YEYINTNGE(CANADA): Monday, September 05
ကျပ်သိန်း ၅ဝဝတန် စိတ်ကြွပီကေ
စိတ်ကြွပီကေကျွေးပြီး ဝတ်လစ်စလစ်ပုံများ ရိုက်ယူကာ ငွေခြိမ်းခြောက်ရယူသည့် အသက် ၂ဝ အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ရဲက ပုဒ်မ ၃၈၆ ဖြင့် ဖမ်းဆီးလိုက် ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြည်မြို့ အမှတ် ၂ ရဲစခန်းမှ သိရသည်။ ပြည်မြို့ရှိကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူ တစ်ဦးကို ယောက်ျားစိတ်ပေါက်နေ သူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပီကေကျွေးကာ အင်္ကျီချွတ်ပြီး ဝတ်လစ် စလစ်ပုံ ရိုက် ယူခြင်းဖြစ်ပြီး ၄င်းဓာတ်ပုံများကို အင်တာနက်ပေါ်တင်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက် ပြီးငွေအကြိမ်ကြိမ် တောင်းခံ ခဲ့ရာ စုစုပေါင်း ကျပ်သိန်း ၅ဝဝ ခန့် ပေးခဲ့ရကြောင်း တရား လိုနှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးကပြောသည်။ ”အစ ကတော့ မသိ ဘူးပေါ့၊ နောက်မှ သူက အဒေါ်ကို ဖွင့်ပြော လိုက်တော့ဖြစ်ရပ်အကုန်းလုံးသိကြ ရတယ်၊ဒါနဲ့ရဲစခန်းကို သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့ က တိုင်ကြားလိုက် ရတယ်” ဟု ၄င်းက တယ်လီဖုန်း ဖြင့် ဆက်သွယ်ပြောသည်။ ယင်း ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ပေါ်ပြူလာနယူးစ် ဂျာနယ်မှ ပြည်မြို့ ရှိ အမှတ် ၂ ရဲစခန်းသို့ ဆက် သွယ် မေးမြန်းခဲ့ရာ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ”ဒီအမှုဖြစ်တာ ဟုတ်ပါတယ်၊ တရားခံလို့ ယူဆရတဲ့ သူကိုလည်း ဖမ်းမိထားပါတယ်၊ တရားရုံးကို အမြန်ဆုံးတင်ပို့နိုင်ဖို့အတွက် စီစဉ်နေပါ တယ်”ဟု ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။ ရန်ကုန်မြို့ စမ်းချောင်းနေ တရားခံဟု ယူဆရသူ အမျိုးသမီး ငယ်က ခြိမ်းခြောက်၍ ရယူထား သော ငွေစုစုပေါင်း သိန်း ၅ဝ နှင့် ရန်ကုန်ရိုးမဘဏ်မှမထုတ်ရသေး သည့် ငွေကျပ် ၄၆ သိန်းတို့ အပါအဝင် ခြိမ်းခြောက် ၍ ရထား သောငွေဖြင့် ပင်ဝယ်ယူထားသည့် လတ်ဝတ်ရတနာ ကျပ်သိန်း ၈ဝ ခန့်တို့ကိုတရား လို ကျောင်းသူ ၏ မှတ်ပုံတင်နှင့်အတူ သိမ်းဆည်း ရမိ ခဲ့ကြောင်းကို ပြည်မြို့အမှတ် (၂) ရဲစခန်းမှ စခန်းမှူးဦးဇော်လွင်နှင့် အမှုစစ်ရဲအုပ်ဦးဇော်လှိုင်ထွန်း တို့ထံမှ သိရသည်။”ပြည်မြို့က နွေဦးကံ့ကော် အဆောင်မှာ ဖမ်းမိတယ်။ သူနဲ့အ တူလက်ကိုင်ဖုန်းကိုပါ သိမ်းဆည်းမိ ပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ အခြားမိန်း ကလေးတွေရဲ့ ဝတ်လစ်စလစ်ပုံ တွေကိုပါ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်” ဟု ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမှ ရဲအုပ်ဦးစိုးမင်း ကပြောသည်။ တရားလို ကွန်ပျူတာတက္က သိုလ်ကျောင်းသူသည် ၂ဝ၁ဝ ပြည့် နှစ်သြဂုတ်လ ၁ဝ ရက်နေ့မှစ၍ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်အထိ စုစုပေါင်းငွေသိန်း ၅ဝဝ ခန့်ကို တရားခံဟုယူဆရသူ ထံအကြိမ် ကြိမ်ပေးအပ်ခဲ့ရကြောင်း ထိုငွေများကို ပြည်မြို့ရှိ ရိုးမဘဏ်မှ ရန်ကုန်သို့လွှဲပြောင်းခဲ့ရသည့်အပြင် မှတ်ပုံတင်ကိုပါ ပေးထားခဲ့ရကြောင်း အိမ်ရှိမီး ခံသေတ္တာအတွင်းမှ စိန်နှင့် ရွှေများအကုန်လုံးကို SURE ကား ဖြင့်ခိုးထုတ်ယူခဲ့ရန် အကြပ်ကိုင် ခြိမ်းခြောက်လာသဖြင့် ဖွင့်ပြောမှ အလုံးစုံသိခဲ့ရပြီး ရဲစခန်းသို့တိုင် ကြားခဲ့ရကြောင်း တရားလိုနှင့်နီးစပ် သူကပြော သည်။ တရားလိုနှင့် တရားခံဟုယူ ဆရသူ အမျိုးသမီးတို့သည် ၂ဝ၁ဝ မတ်လတွင် မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ကြပြီး ၂ဝ၁ဝ ဇူလိုင်လတွင် တရားခံဟုယူ ဆရသူ အမျိုးသမီးသည် ပြည်မြို့သို့ ရောက်ရှိလာကာ အိမ်ငှားနေထိုင် ပြီးနောက် အဆိုပါ အိမ်၌တရားလို အားစိတ်ကိုမေ့မြောစေသော ပီကေ ကျွေးကာ အဝတ် များချွတ်၍ဓါတ်ပုံ ရိုက်ယူခဲ့သည်။ထို့နောက် ဓာတ်ပုံကို အင်တာနက်တင် မည်ဟုခြိမ်းခြောက် ကာငွေညှစ်ခဲ့သည်ဟု တရားလိုနှင့် နီးစပ်သူကပြောသည်။ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးကိုနီမှ အဆိုပါအမှုဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ် သက်၍ ”ဒါက မကောင်းတဲ့လုပ်ရပ် တစ်ခုပဲ။ ပိုဆိုးတာက ဓာတ်ပုံပြပြီး ငွေခြိမ်းခြောက်တာ ဆိုတော့ တော်တော်အောက်တန်း ကျတယ် မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဘဝလမ်း ဆုံးသွားနိုင်တဲ့ အမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အတွက်နောက်လူတွေ ဆက်မ လုပ်နိုင်အောင် ထိရောက်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်ချ မှတ်သင့်တယ်”ဟု ပြောသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/05/20110အကြံပြုခြင်း
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းအား ကန့်ကွက်ကြောင်းဆန္ဒပြသပွဲ နှင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနား ( ကိုရီးယား )
မှိုင်းရာပြည့်ကျောင်းသားလှုတ်ရှားမူ့စသဖြင့်ပေါ့လေ……ဒါပေမဲ့စစ်အာဏာရှင်များရဲ့လူမဆန်စွာ ရက်စက်ဖြိုခွင်းမူ့တွေကြောင့် ရဟန်း ၊ ရှင် ၊လူ ၊ ကျောင်းသား ပြည်သူတွေအသက်ပေးခဲ့ရပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင်များကိုမကျေနပ်တဲ့ ကျောင်းသားလှုတ်ရှားမူ့များဟာ ကြားထဲမှာလည်း ကျိုးကြား ကျိုးကြားဆိုသလိုပေါ်ခဲ့ပါတယ်…ဒါပေမဲ့လူထုကြားထဲကိုပြန့်ပြန့်နှံ့နှံ့မရောက်အောင်မဆလအာဏာရှင်များဟာ နှိပ်ကွက်ခဲ့ပါတယ်…ဒီလိုနဲ့ တနှစ်ပြီး တနှစ်ကုန်လွန်လာခဲ့ရာကအစ…….
အဲဒီနှစ်ကတော့အာဏာရှင်များအတွက်စကံဆိုးလာတဲ့နှစ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းမမှားလောက်ပါဘူး..အစိုးရ ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမူ့အမှားတွေ၊အာဏာရူးသွပ်မူ့တွေအတွက်ပေးဆပ်ရတဲ့နှစ်ပါ…..ဒါမတိုင်မှီမှာ…အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ရပ်တခုကတော့ငွေစက္ကူတွေကိုတရားမ၀င်ကျေငြာလိုက်တဲ့အတွက်လူထုတရပ်လုံးအကြီးအကျယ်ထိခိုက်နစ်နာ သွားစေခဲ့တဲ့ကိစ္စပါ……လူထုလက်ထဲမှာလည်ပတ်နေတဲ့ငွေတွေဟာ…အဓိပ္ပါယ်မဲ့…သာမာန်စက္ကူစုတ်လောက် တောင်တန်ကြေးမရှိဖြစ်ကုန်တယ်….မူလအစက…မဆလ(မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအစိုးရ)ကိုထောက်ခံနေတဲ့သူတွေတောင်ဒီတချီမှာတော့…တော်တော်ကိုအထိနာကုန်ကြပါတယ်….ပြောမယ်ဆို..အသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူတွေတောင်ရှိပါတယ်…..လူထုတရပ်လုံးရဲ့သီးမခံနိုင်မူ့ဟာ..အထွတ်အထိပ်ကိုရောက်နေပြီ…သို့သော် အစပျိုးမဲ့လမ်းစကိုရှာမတွေ့သေးဘူးဖြစ်နေကြတယ်…ကျွှန်တော်မှတ်မိသေးတယ်…ပထမတကြိမ်ငွေစက္ကူတွေသိမ်းတော့…..တ၀က်လောက်ပြန်လဲပေးသေးတယ်..နောက်တကြိမ်…၇၅ကျပ်တန်တွေကိုတရားမ၀င်ငွေစက္ကူအဖြစ်ကျေငြာလိုက်တော့…လုံးလုံးကိုလဲမပေးတော့ဘူး….ရန်ကုန်မှာဆူပူမူ့တချို့ဖြစ်တယ်…..လှည်းတန်း ကမာရွတ်ဘက်မှာ….မကျေနပ်တဲ့လူတွေက..အစိုးရပိုင်အဆောက်အဦကိုဖျက်ပစ်တယ်…မီးပွိုင့်တွေရိုက်ချိုးကြတယ်…..နောက် ကျောင်းတွေပိတ်ပစ်လိုက်တယ်…..အိမ်ပြန်ဘို့ပိုက်ဆံမရှိတဲ့အဆောင်နေကျောင်းသားတွေကို လမ်းစရိတ်တွေထုတ်ပေးပြီး…အပြန်ခိုင်းလိုက်တယ်…….
ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်တဲ့အခါ….ကျောင်းသားတွေရဲ့မကျေနပ်မူ့အဆိုင်အခဲကြီးကတော့ရှိနေဆဲ….ဒါပေမဲ့ဘယ်ကစရမလည်းမသိဖြစ်နေကြတယ်….ဒီလိုနဲ့နေလာရင်းက…၁၉၈၈မတ်လမှာတော့ရန်ကုန်စက်မူ့တက္က သိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့..အရပ်သားတွေ..လဘက်ရည်ဆိုင်မှာစကားများရာကအစ…ပြသနာတွေဖြစ်ကြတယ်…ရိုက်ပွဲတွေဖြစ်ကြတယ်…သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များရဲ့အထိန်းအသိမ်းညံ့ဖျင်းမူ့တွေကြောင့်….ပြသနာက အေးချမ်းမသွားပဲ…ပိုကြီးထွားလာတယ်…ရန်ကုန်စက်မူ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား…ကိုဖုန်းမော်နဲ့ကိုစိုးနိုင်တို့ လုံထိန်းတွေပစ်လိုက်တဲ့သေနပ်နဲ့ သေဆုံးခဲ့ကြတယ်….အဲဒီ့ဂယက်က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထိပါကူးစက်ခဲ့ပြီး ကျောင်းသားလှုတ်ရှားမူ့အကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်….တခါ….တန်းစီချီတက်လာတဲ့ကျောင်းသားတွေကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အနီး..အင်းလျှားကန်စောင်းမှာရှိတဲ့…တံတားနီမှာ…အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခြင်းပြင်းပြင်းထံထံခံလိုက်ရတယ်…ကျောင်းသားပေါင်းများစွာကိုလည်း….အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ထဲ့..ဖမ်းထဲ့ထားလိုက်တယ်…..ဒါကိုတော့….၁၉၈၈မတ်လကျောင်းသားလှုတ်ရှားမူ့လို့..နောင်ကာလများမှာသမိုင်းတွင်စေခဲ့ပါတယ်…….ဒီလှုတ် ရှားမူ့မှာထင်ရှားခဲ့တဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေထဲကတော့မင်းဇေယျ(၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်း ဆောင် )နဲ့ကိုဌေးကြွယ်၊လှမျိုးနောင်တို့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်……
၁၉၈၈မတ်လကျောင်းသားလှုတ်ရှားမူ့ဖြစ်တော့ကျနော်ကျောင်းမှာမရှိပါဘူး…နေမကောင်းတာနဲ့ ဇာတိမြို့ကိုပြန်ရောက်နေတော့…အဲဒီ့အကြောင်းလည်းကောင်းကောင်းမသိပါဘူး…..နားရည်ဝအောင်ကြားဘူးတဲ့အဆင့်ပဲရှိပါတယ်…ဒါပေမဲ့နယ်ကနေသတင်းတွေကြားနေရတော့…ရင်ထဲမတော့တော်တော်ခံစားခဲ့ရတာအမှန်ပါ….ကျောင်းတွေကို…ဇွန်လမှာပြန်ဖွင့်ပေးပါတယ်….ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်တော့…ကျနော့သူငယ်ချင်း… ထိန်လင်း၊အောင်လင်း၊ဇော်လင်းအပါဝင်အနီးစပ်ဆုံးပုဂ္ဂိုတွေကကျောင်းသားလှုတ်ရှားမူ့ထဲမှာပါလို့ဆိုပြီးကျောင်းထုတ်ခံလိုက်ရပြီ…သူတို့ကကျောင်းထုတ်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတာကို…မိဘတွေအသိမပေးဘူး..ဟန်မပျက် ကျောင်းလာတက်ကြတယ်…နေစရာအဆောင်ကမရှိတော့ ကျနော့်အခန်းမှာပဲစုနေကြတယ်…( အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော်တို့ကစတုတ္ထနှစ်ရောက်နေပြီဆိုတော့တစ်ယောက်ခန်းတွေရတယ်)..နောက်တော့…အဆောင်မူးက.ကျနော့်ကိုခေါ်သတိပေးတယ်….ကျောင်းထုတ်ခံထားရတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုလက်ခံမထားဘို့ပေါ့…ကျနော် ထင်ပါတယ်..အဆောင်မူးကလည်းတာဝန်အရသာပြောတာပါ….လက်တွေ့…သူငယ်ချင်းတွေအသာလေးဝင်နေတာကို သိပေမဲ့လည်း…မသိချင်ဟန်ဆောင်နေရှာပါတယ်….
ကျနော်တို့ကကျောင်းကိုသာလာကြတာပါ…ကျောင်းတက်စာသင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူး..တယောက်မှမရှိ တော့ဘူး…လှုတ်ရှားမူ့တွေလုပ်ဘို့ကို စတင်စိုင်းပြင်းဘို့ကိုပဲ…အားသန်နေကြတယ်…..ဘာလို့လည်းဆိုတော့ မကြာသေးခင်ကမှပူပူနွေးနွေးကာလကမှ…ကျနော်တို့ကျောင်းသားတွေသွေးမြေကျခဲ့ရပြီ…ကျောင်းသားပေါင်း ရာနဲ့ချီအင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ထဲမှာလည်းရှိနေဆဲဆိုတော့…..တော်တော်များများက…စာသင်ကြားရေးကိုစိတ်မ၀င်စားတော့ဘူး…ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝန်းထဲမှာဆို ပိုသိသာတယ်….ကျောင်းသားတွေတော်တော်များများက စာသင်ခန်းတွေထဲမှာမရှိကြပဲ….စာသင်ခန်းပြင်ပက…နေရာတွေဖြစ်တဲ့…စားသောက်ဆိုင်တန်းတို့…အာရ်စီ… .စာကြည့်တိုက်ရှေ့…ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမရှေ့….အဲသလိုနေရာတွေမှာဝိုင်းဖွဲ့ပြီးထိုင်နေကြတယ်…တူရာတူရာအစုလေးတွေဖွဲ့…တီးတိုးကိုယ်စီနဲ့…တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ရင်း…သူနဲ့ကိုယ်မသိတောင်မှ…အကြည့် ချင်းဆုံမိသွားရင်…လက်မထောင်ပြတာမျိုး……..
အပေါင်းသင်းများတဲ့ ကျနော်တို့ ဒီတခါတော့ တော်တော်ကောင်းတယ်ပြောရမယ်….ကျနော် ကိုဇာဂနာနဲ့တွေ့တော့ကျနော်တို့လှုတ်ရှားနေတဲ့အကြောင်းသူ့ကိုတီးတိုးဖွင့်ပြောပြတယ်…ဖြစ်ချင်တော့..သူကလည်း..သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့လှုတ်ရှားနေတာကိုး….ကျနော်တို့ကိုအကူညီပေးတယ်….ကျနော်ကမြို့ကတယောက်ဆီကနေကဗျာစာအုပ်တအုပ်ယူလာတယ်…ဗားတော့ဂရက်ကဗျာတွေ…အဲဒီထဲက..ကဗျာတွေကို…လက်ရေး တွေနဲ့ကူးရေးတာကူး…နောက်ဖရောင်းစက္ကူပေါ်မှာ..ကညစ်တံနဲ့ရေး…မှင်သုတ်…မီးချောင်းနဲ့လှိမ့်ပြီး…ကော်ပီ တွေပွား…..ညဘက်လူခြေတိတ်ချိန်ဆို…အုပ်စုလိုက်ခွဲပြီး…တက္ကသိုလ်ဝန်းနေရာအနှံ့မှာစာတွေလိုက်ကပ်ကြ တယ်…..ကျနော်တို့လိုပဲ…အခြားသောအုပ်စုတွေကလည်း..သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့လှုတ်ရှားနေကြတာ….ဒါပေမဲ့…တအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုမပေါင်းဆုံမိကြသေးဘူး……….အာရ်စီထဲမှာ…အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးစာတွေ….ကပ်တော့… ကျနော်တို့က သုံးဖွဲ့ခွဲထားတယ်….တဖွဲ့က ကပ်…တဖွဲ့က ကင်းစောင့်....အဲဒီ ကင်းစောင့်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ ကျန်တဖွဲ့ကပေါင်းပြီး…အဲဒီ့စာကိုဝိုင်းအုံဖတ်ပေးရတယ်…နောက်တော့…ကျောင်းသားအုပ်ကတဖြေးဖြေးနဲ့များလာ…စာထဲမှာပါတဲ့အချက်တွေကိုကျနော်တို့ကအသံကျယ်ကျယ်နဲ့ထောက်ခံဆွေးနွေးပေါ့…တချို့ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေဆို မှတ်စုနဲ့လိုက်ကူးတာတောင်ရှိတယ်…( သူတို့ကလည်းဆက်ဖြန့်ဘို့များပါတယ် ) ကော်ပီဆိုင်တွေလည်းသွားမကူးရဲဘူးလေ….ဒီလိုနဲ့..မကြာလှတဲ့တနေ့မှာတော့….ကျနော်တို့အင်းဝဆောင်ပေါ်မှာရှိနေခိုက်…ကျောင်းသားတွေရဲ့အော်ဟစ်သံတွေ…ဆူညံထွက်လာတယ်…အာရ်စီရှေ့မှာကျောင်းသားတွေ…ဆန္ဒစပြပြီ…..ကျောင်းဝန်းအတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ကျောင်းသားတွေ….အဲဒီနေရာဆီကိုစုပြုံရောက်လာကြတယ်….
၁၉၈၈ ရဲ့ဇွန်လ ကျောင်းသားလှုတ်ရှားမူ့စတင်ခဲ့ကြတယ်……..
ကျောင်းဝန်းအတွင်းမှာစီတန်းလှည့်လည်ဆန္ဒပြကြတယ်……အာရ်စီရှေ့မှာဟောပြောလုပ်တယ်……ကျောင်း သားတွေ တယောက်ပြီး တယောက်ဟောပြောကြပေါ့….ဇွန်လ ကျောင်းသားလှုတ်ရှားမူ့မှာ…ထင်ရှားခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကတော့….မောင်မောင်ကျော်(ယခုအမေရိကံနိုင်ငံ)ပါ။နောက်မိုးသီးဇွန်…..ကိုကို လတ်အစရှိသူတွေပေါ့…..ဇွန်လကျောင်းသားလှုတ်ရှားမူ့မှာထူးခြားတာက…ကျောင်းသားအရေးလှုတ်ရှားမူ့တင်မကတော့ပဲ…ဒီထက်တဆင့်မြှင့်တဲ့…နိုင်ငံရေးဆီလှမ်းတက်ခဲ့ကြတယ်……ဒီမိုကရေစီသဘောတရားဟာ… ဇွန်ကျောင်းသားလှုတ်ရှားမူ့မှာ စတင်အမြစ်တွယ်ခဲ့ပြီ…….ဖမ်းဆီးခံကျောင်းသားတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဘို့ကို တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်…….ဇွန်ကျောင်းသားလှုတ်ရှားမူ့မှာ…အရေးကြီးတဲ့မူတခုကိုချနိုင်ခဲ့တယ်….ဒါကတော့…….. “ ကျောင်းသားသပိတ်မှသည်….အထွေထွေသပိတ်ကြီးဆီသို့ ” ဆိုတာပါပဲ…..
နောက်မကြာခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲမဆလအစိုးရဟာသုံးနေကြဗျူဟာအတိုင်း…ကျောင်းသားလှုတ်ရှားမူ့ဖြစ်လာတဲ့အခါတိုင်းမှာ…ကျောင်းပိတ်တဲ့..စနစ်ကိုအမြဲလုပ်တယ်….ကျောင်းတွေကိုပိတ်လိုက်ပြီ………..ကျနော်တို့ကျောင်းသားအစုတွေကွဲပြားသွားအောင်လုပ်လိုက်တာပေါ့……ဆန္ဒပြကျောင်းသားအများစုကြီးက..ကျောင်းဝန်းအတွင်းကနေပြင်ပကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်……ပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းမယ်….ရန်ကုန်ပြည်လမ်းမကြီးတလျှောက်ချီတက်ခဲ့ကြတယ်…ဒီချီတက်ဆန္ဒပြပွဲမှာ..အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းကကျောင်းသူကျောင်းသားလေး တွေပါပါဝင်လာခဲ့ကြတယ်….စမ်းချောင်းမြေနီကုန်းအရောက်မှာလုံထိန်းကားတွေနဲ့..၀င်တိုက်လို့သေကျေခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသားတွေရှိခဲ့ပါတယ်……..ဒါကိုမခံနိုင်တဲ့…လူအုပ်ကြီးက…လုံထိန်းတွေမောင်းလာတဲ့ကားကိုအတင်းဝင်တက်ပြီး…ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့…လုံထိန်းရဲတွေကိုသတ်ဖြတ်ပစ်လိုက်ကြတယ်….ကျနော်မှတ်မိသလောက်ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးရှေ့အရောက်မှာ…တခါလုံထိန်းအလောင်းတွေကိုတင်လာတဲ့ကားကိုပါ..လူအုပ်ကြီးက…မီးနဲ့ရှို့ ပစ်လိုက်တယ်…..မဆလ အစိုးရက ရန်ကုန်မြို့ကိုပါ အရေးပေါ်အခြေနေ(ပိုဒ်မ၁၄၄ ) ထုတ်လိုက်တယ်လေ…..
ဇွန်လကျောင်းသားလှုတ်ရှားမူ့မှာလူထုနဲ့ကျောင်းသားအတိုင်းအတာတခုထိပူးပေါင်းမိသွားပြီ….. အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်မူ့တွေကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်လိုက်ကြရပြီ……လူထုရဲ့မခံနိုင်မူ့တွေဟာအထွတ် အထိတ်ကိုရောက်နေပြီ….တိုင်းပြည်ရဲ့ဆင်းရဲမွဲတေမူ့ဟာ…အောက်ဆုံးကိုရောက်နေပြီ…….
ဒါပေမဲ့…ဒီတချီလည်း….အာဏာရှင်များဘက်က…အသာရနေဆဲပါ……ကျောင်းသားလှုတ်ရှားမူ့ကို အောင်မြင်စွာချေမူန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်………အာဏာရှင်တို့မချေမူန်းနိုင်လိုက်တဲ့…အရာကတော့….နယ်အရပ်ရပ်ကို ပြန်သွားကြမဲ့…ကျောင်းသားများရဲ့အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓါတ်များကိုတော့သူတို့…..မချေမူန်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး…….
ဒါဟာ…၁၉၈၈လူထုအရေးတော်ပုံကြီးဖြစ်ဘို့…အစပျိုးမူ့တခုဖြစ်သွားပြီဆိုတာ…မဆလတစ်ပါတီအာ ဏာရှင်အစိုးရဟာ….သိပ်အလေးနက်မထားခဲ့ပါဘူး….သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်က…ဖြစ်ပေါ်လာသော..အစိုးရဆန့်ကျင် ရေးလူတ်ရှားမူ့တိုင်းကို အကြမ်းဖက်ချေမူန်းဘို့ကိုသာ…အလေးနက်ထားနေကြတာပါ……
တကယ်တော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်း ( မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ ဥက္ကဌ ကြီး ဦးနေ၀င်း ) ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာ အာဏာသိမ်းလိုက်ခြင်းဟာ…ဒီမိုကရေစီကိုသင်းကွပ်ပစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်….သူအာဏာရချိန်ကစလို့ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီဆိုတာလည်းဆိပ်သုဉ်းသွားရရှာတယ်…၁၉၇၄မှာဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကိုအတည် ပြုပြီး….တိုင်းပြည်ကိုတပါတီအာဏာရှင်စနစ်နဲ့သွားတယ်….စီးပွားရေးပုံစံမှာလည်းဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေးဆို… .ပြည်သူပိုင်အခန်းကဏ္ဍကိုမှေးမှိန်အောင်လုပ်…တံခါးပိတ်စီးပွားရေးမူဝါဒကိုချမှတ်ပြီး…နိုင်ငံတကာရဲ့လာ ရောက်ရင်းနှီးမြုတ်နှံမူ့တွေကိုလက်မခံဘူး…အဲဒီတော့ဘာဖြစ်လာသည်းဆိုတော့…မှောင်ခိုစီးပွားရေးစနစ်ဟာ…မဆလအစိုးရခေတ်မှာအရမ်းကြီးထွားခဲ့တယ်….ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ကနည်းပညာအားနည်းတော့…ဘာများဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်တီထွင်နိုင်မှာလည်း….ပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်တဲ့ခပ်ညံ့ညံ့ပစ္စည်းတွေကိုပဲသုံးစွဲရတော့တယ်..….ကျနော်တို့ကျောင်းသားဘ၀က..တက္ကသိုလ်အဆောင်တွေမှာပေးထားတဲ့..ဆင်တဲထုတ်ရုပ်မြင်သံကြားတွေဆို…ဒီနေ့လူငယ်တွေတွေ့လိုက်ရင်ရီကြမှာအမှန်ပဲ….ထင်းရူးသေတ္တာပုံးကြီးလိုဟာမျိုး….နောက်တခါအံ့အား သင့်စရာမဆလအစိုးရရဲ့လုပ်ရပ်တခုရှိသေးတယ်ဗျ….ပိုက်ဆံချမ်းသာလို့အဖမ်းခံရတယ်ဆိုရင်…ယုံမလားမသိဘူး..အဲဒါတကယ်ပါ…ပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့သူတွေကို“ဆူဇကာစစ်ဆင်ရေး”ဆိုထောင်ထဲထဲ့ထားတယ်….သဘောကတော့…ဂုတ်သွေးစုတ်အရင်းရှင်တွေပေါ့…ဒီလုပ်တွေလုပ်လာနေမှာတော့…ဒီတိုင်းပြည်မှမမွဲ..ဘယ်သူမွဲတော့မှာလည်း….ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံစာရင်းဝင်သွားတယ်….ဒီလိုနဲ့…၁၉၆၂စစ်အာဏာသိမ်းစဉ်ကပါဝင်ပြီး တော်လှန်ရေးကောင်စီလို့ခေါ်တဲ့ စစ်ကောင်စီမှာ အကြီးအကဲတယောက်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့…ဦးအောင်ကြီး ( ဗိုလ်မူးချုပ်ဟောင်းအောင်ကြီး- အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှာ..ခနလေး ဥက္ကဌ ဖြစ်ခဲ့ဘူးသူ ) သူက..ဦးနေ၀င်းဆီပေးပို့ထားတဲ့..စာမျက်နှာလေးဆယ်ကျော်ပါစာတမ်းတခုကလူထုကြားထွက်ပေါ်လာတယ် လေ…..ဦးအောင်ကြီးဟာဦးနေ၀င်းရဲ့အမျက်တော်ရှမူ့ကြောင့်အာဏာရုတ်သိမ်းခံရသူတယောက်ပေါ့…..မဆလကနေ အထုတ်ခံလိုက်ရပြီး..ရန်ကုန်မြို့စမ်းချောင်းအရပ်ဒေသမှာ လဘက်ရည်ဆိုင်ကြီးဖွင့်ထားပြီး…နိုင်ငံကျော် “အောင်ကြီးကိတ်”ဆိုတာသူ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပါ….သူ့စာတမ်းက..လူထုကြားမှာတော်တော်လေးပြန့်ပြန့်နှံ့နှံ့ရောက်သွားခဲ့တယ်…ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ဗျားဆို…အစချီထားပြီး…ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့…လူမူ့၊စီးပွား၊နိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်းတွေကိုတင်ပြထားတယ်….ဒါပေမဲ့သူ့စာထဲမှာဦးနေ၀င်းကိုတော့အပြစ်ဖို့မထားဘူး…ဒါတွေဦးနေ၀င်းမသိပါဘူးေးပါ့(သဘောကတော့…သူမသိလို့..ဒီလိုတွေဖြစ်နေရတာပါပေါ့)…နောက်တခါ၁၉၆၂အာဏာသိမ်းစဉ်က ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အဦကိုဗုံးဖောက်ခွဲပြီး..ကျောင်းသားအများအပြားသေဆုံးခဲ့ကြရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ..သူရော..ဦးနေ၀င်းရောနှစ်ယောက်လုံး..အပြစ်ကင်းမဲ့လေဟန်တွေပါ ပါဝင်တယ်….( ၁၉၆၂ အာဏာသိမ်းတော့ စစ်အာဏာရှင်များဟာ…ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝန်းထဲမှာရှိတဲ့…ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အဦကိုဗုံးဖောက်ခွဲပြီး ပစ်ခပ်နှိမ်နင်းတဲ့အတွက်ကျောင်းသားပေါင်းများစွာသေကျေခဲ့ရပါတယ်….များစွာ..ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခြင်းခဲ့ရပါတယ်…အဲဒါကိုတော့…ဆဲဗင်းဂျူလိုင်ကျောင်းသားလှုတ်ရှားမူ့လို့သမိုင်းတွင်စေခဲ့ပါတယ်…အဲဒီအချိန်ကစလို့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂကို တရားဝင်ရပ်တည်ခွင့်မပေးတော့တာအခုထိပါပဲ)
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်…ဦးအောင်ကြီးရဲ့စာတမ်းကတော့…မျက်မှောက်အခြေနေနဲ့အနီးစပ်ဆုံးအံဝင်ဂွင်ကျဖြစ် သွားတဲ့အတွက်…လူထုကြားမှာ..တော်တော်..ဂယက်ထသွားပြီ…ဘယ်လောက်ထိဂယက်ရိုက်သလည်းဆို တော့ပါတီညီလာခံမှာ…ဦးနေ၀င်းကိုယ်တိုင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂကိစ္စ္ဂကိုဖြေရှင်းချက်ပေးရတော့တယ်…သူ့ဖြေရှင်းက…ဦးအောင်ကြီးကိုပဲ…ပြန်ပြီးလက်ညှိုးထိုးတရားခံအဖြစ်အပြစ်ဖို့သရောင်ရောင်ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပြောဆို ထားတယ်လေ….အဲဒီပါတီညီလာခံမှာပဲ…ဦးနေ၀င်းကနိုင်ငံရေးအစတခုကိုဟပေးလိုက်တယ်…တိုင်းပြည်ကို…တပါတီစနစ်နဲ့ပဲသွားမလား…ပါတီစုံစနစ်နဲ့ပဲသွားမှာလားဆိုတာ…အဆုံးအဖြတ်ပေးဘို့…ညီလာခံကိုတင်ပြခဲ့ တယ်…..အဆိုးဆုံးက…လူထုကိုစိမ်ခေါ်တဲ့စကားပြောဆိုသွားခြင်းပါ…ကျနော်တို့…တခုတည်းသောမြန့်မာ့ရုပ် မြင်သံကြားကတဆင့်ပါတီညီလာခံကျင်းပတာကိုကြည့်လိုက်ရတယ်…ကျနော်မှတ်မိသေးတယ်….ဦးနေ၀င်းဟာ..မိန့်ခွန်းပြောဆိုနေရင်းက..ဒေါသတွေထွက်လာတယ်….(ကြည့်ရတော်တော်ကိုရုပ်ဆိုးတာပါ)…ဘာပြောသ လည်းဆိုတော့…..“ဒီတခါတိုင်းပြည်မှာ..ဆူဆူပူပူလုပ်တဲ့သူတွေကိုသတိပေးချင်တယ်……စစ်တပ်ဆိုတာမိုးပေါ် ထောင်မဖောက်ဘူး…ပစ်ရင်မှန်အောင်ပစ်တယ်…နောက်တခါ ဆူဆူပူပူလုပ်လို့ကတော့…မလွယ်ဘူးသာပြင် ”ဆိုတော့တိုင်းပြည်ကလူထုကပိုချဉ်သွားကြတော့တယ်….စဉ်းစားကြည့်ပါ…တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူ ပြောအပ်သောစကားလားဆိုတာ…..ဒါဟာ..ခေတ်အဆက်ဆက်ကျန်ရစ်နေတဲ့..ဦးနေ၀င်းရဲ့သမိုင်းဝင်မိန့်ခွန်းပါ….လူထုကဘာဖြစ်လာသလည်းဆိုတော့….ကြောက်လန့်မလာပဲ….ဒေါသတွေပိုထွက်လာကြတယ်…….နဂိုကမှ အထွေထွေအကြပ်အတည်းတွေငွေစက္ကူတွေကိုတရားမ၀င်သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်..မကျေနပ်မူ့အဆိုင်အခဲက..ဦးနေ၀င်းမိန့်ခွန်းကြောင့်…ပိုဆိုးလာကြတယ်……
ကျနော်ဇာတိမြေကိုပြန်ရောက်တော့…ထူးခြားချက်တခုက…သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေများမှာပါတီဝင်များကနေ…ကျောင်းသားများကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ဘို့ကိုညွှန်ကြားထားတယ်လေ….ကျနော်ရေနံချောင်းပြန်ရောက်တော့…အိမ်ကခြံဝန်းအတွင်းမှာ စစ်ပြန်စစ်မူ့ထမ်းဟောင်း အမိန့်ရလိုင်စင်ထန်းရည်ဆိုင်ဌားတယ်…အဲဒီမှာ တာဝန်ခံလုပ်နေတဲ့…ဦးအံ့မောင်ဆိုတာသူကရပ်ကွက်ပါတီစိတ်မှုး…သူ့ကိုမြို့နယ်ပါတီယူနစ်က…တာဝန်ပေး ထားတာ..ကျနော့်ကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ဖို့ပေါ့…ကျနော်ကလည်း…ဟန်မပျက်နေရတယ်…သူကလည်းအရိပ်တကြည့်ကြည့်…ကျနော်အိမ်ကိုဝင်ထွက်သွားလာတတ်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေကိုအမြဲလေ့လာတယ်ပြီးရင်မှတ်တမ်းတင်တယ်…သတင်းပို့တယ်…..ဦးအောင်ကြီးစာတမ်းတွေကိုဖြန့်တော့….သူငယ်ချင်းတယောက်ကစာရွက်တွေကိုကော်ပီကူးလို့ရအောင်…လက်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးသူကဖန်တီးလာတယ်…လုပ်ရမဲ့နေရကလည်းမရှိ တော့…..ကျနော့်အိမ်မှာပဲကူးကြတယ်….ကျနော်ကတခုကြံရတော့တယ်…အခန်းထဲမှာဆိုရိပ်မိနိုင်တယ်… ဒါ့ကြောင့်အခန်းထဲမှာမကူးပဲ..အပြင်မှာပဲပေါ်တင်လုပ်တယ်….ဘယ်လိုလုပ်သလည်းဆိုတော့….ကူးပြီးသားစာ ရွက်တွေကိုဖွက်ထား…တရွက်ထွက်လာ..တရွက်ဖွက်ပေါ့….ဘေးနားမှာ…ဆယ်တန်းသချာင်္သင်ကြားချက် စာရွက်တွေကိုအသင့်ပုံထားတယ်…..ထင်တဲ့အတိုင်း….သူကလာကြည့်တယ်….ဘာတွေလုပ်နေကြတာလည်း ပေါ့….ဒါနဲ့ကျနော်က…“ကျောင်းအားရက်သုံးဘို့ပိုက်ဆံမရှိတာနဲ့…ကျူရှင်ကစာရွက်တွေကိုကူးရင်း..ပိုက်ဆံရှာ နေတာပါ ”လို့ဆိုတော့…သူကတရွက်ယူကြည့်ပြီး…အဖြေကိုကျေနပ်သွားပုံရတယ်…
“ ကောင်းပါတယ်…မုန့်ဘိုးရှာကြပေါ့…ပေါက်တတ်ကရတွေမလုပ်ပြီးတာပါပဲ ”
ကျနော်က မကျေနပ်တဲ့ပုံနဲ့….“ ပေါက်တတ်ကရတွေဆိုတာ…ဘာကိုဆိုလိုတာလည်းဗျ ”
ကျနော်တို့ဖြန့်လိုက်တဲ့ဦးအောင်ကြီး.စာတမ်းတွေကလည်း…လက်သိပ်ထိုးတော်တော်ပြန့်သွားတယ်….အဲဒီကာလတွေကရေဒီယိုအသံလွင့်ဌာနဆိုတာ..သုံးခုလားပဲရှိတယ်..ဘီဘီစီရယ်၊ဗွီအိုအေ၊အောအိန္ဒိယ …တသက်လုံးကရေဒီယိုနားမထောင်ဘူးတဲ့ကျနော်တို့တတွေ…အခုမပြတ်တမ်းနားထောင်နေရတယ်လေ… လူတွေတော်တော်များများလည်း..နားထောင်ကြတယ်….တိုင်းကျော်…လဘက်ရည်ဆိုင်မှာရေဒီယိုအသံလွင့် ချိန်ဆိုဆိုင်ရှင်ကဖွင့်ပေးထားတော့…လဘက်ရည်လာသောက်သူရောပြင်ပကသူတွေရောနေ့စဉ်လာနား ထောင်ကြတာအများသားလား….အဲဒီမှာ….သတင်းထောက်ခရစ္စတိုဖာဂါးနက်ဆိုသူကကျောင်းသားခေါင်း ဆောင်..ကိုဌေးကြွယ်၊ကိုဌေးအောင်၊ကိုတင်မောင်မောင်ထွေး၊ကိုကိုလတ်တို့နဲ့တွေ့ပြီး….အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ ကျောင်းသူတွေထဲက…တစ်ယောက်ပေါ့..သူ့နဲ့အင်တာဗျူးခန်းကလူထုစိတ်ကိုနှိုးဆွစေခဲ့တာ..သူကအဖမ်းခံရ စဉ်မှာ..လုံခြုံရေးတပ်သားတွေရဲ့မုဒိန်းကျင့်ပုံတွေကိုပြောပြတယ်…ကြားရတဲ့လူထုရင်ထဲ..မခံစားပဲမနေနိုင်ကြ တော့ဘူး….မျက်ရည်ကျ.. ကြတယ်….
ကျနော်တို့ကလည်း…လူထုအရေးတော်ပုံကြီးပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်…တမြို့နယ်နဲ့တမြို့နယ်..လျှို့ဝှက်ဆက်သွယ်ကြ…အသင့်ပြင်ကြပေါ့….ဒီကြားထဲမှာ…လူထုရဲ့အစိုးရပေါ်မကျေနပ်မူ့ကြီးကို…အာရုံပြောင်းစေချင် တော့….မဆလအစိုးရကဘာလုပ်သလည်းဆိုတော့….လူမျိုးရေးအဓိကရုန်းကိုဖန်တီးပေးလိုက်တယ်…ဒါက လည်းဦးနေ၀င်းအာဏာသိမ်းပြီးကထဲက…တိုင်းပြည်မှာ..အစိုးရကို..လူထုကမကျေနပ်မူ့ကြီးလာပြီဆို…အာရုံ ပြောင်းအောင်လုပ်နေကြ…ဒါမှအစိုးရကိုဆန့်ကျင်တဲ့..ဆန္ဒပြပွဲတွေမပေါ်ပေါက်တော့မှာကိုး…..တောင်ကြီး ၊အောင်လံ၊ပြည်၊ပဲခူးဘက်တွေမှာကုလားဗမာအဓိကရုန်းတွေဖြစ်တယ်…မွတ်စလင်တော်တော်များများခံလိုက်ရတယ်…သေဆုံးမူ့တချို့ရှိခဲ့တယ်…….ဒီအချိန်မှာတနိုင်ငံလုံးကိုရိုက်ခပ်စေမဲ့တပ်လှန့်သံက..အသံလွှင့်သတင်း ဌာနတွေကထွက်လာပြီ….၁၉၈၈သြဂုတ်လ၈ရက်နေ့မှာ..တနိုင်ငံလုံးမဆလလို့ခေါ်တဲ့မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအစိုးရကိုတပြိုင်နက်ထဲတော်လှန်ကြမယ်…လူထုတော်လှန်ရေးကြီးဆင်နွှဲကြမယ်………အဲဒီနေ့ကလည်း…သိပ်ထူးခြားတဲ့နေ့ ရှစ်လေးလုံးပေါင်းဆုံထားတဲ့နေ့…၈.၈.၁၉၈၈………..
သတင်းတွေကပြန့်နေပြီ….အရပ်ထဲ..ရွာထဲ..ဈေးထဲ..ကျောင်းထဲ….ကျောင်းသားတွေ…ဆန္ဒပြကြတော့မယ်တဲ့…ဒါပေမဲ့….မဆလအစိုးရက..သိပ်ထိပ်လန့်ပုံတော့မပြဘူး…အရင်အခါတွေတုန်းကလို…နှိမ်နင်းပြလိုက်ရင် ပြတ်သွားမယ်ပဲထင်နေဆဲ….တနိုင်ငံလုံးမှာ..သူတို့ပါတီတွေ…လုံခြုံရေးတွေကိုနည်းနည်းပါးပါးတပ်လှန့်ထားယုံကလွဲလို့ အရမ်းကာရောကြီးတင်းကြပ်မထားဘူး…မြို့နယ်အသီးသီးက…အထက်တန်းကျောင်းတွေမှာတော့ ဆရာတွေကိုယ်တိုင်ကင်းစောင့်နေရတယ်….ကျနော်တို့အားလုံးစီစဉ်ရတော့တယ်…..အဲဒီမှာပြသနာကဘာ လည်းဆိုတော့..ကျနော်တို့ကကျောင်းသားတွေ…၀င်ငွေမရှိဘူး….ပိုက်ဆံဆိုတာမိဘတွေကပေးမှမုန့်ဘိုးအဖြစ်ရကြတာ…နယ်အသီးသီးကိုသွားဖို့..ဆက်သွယ်ဖို့…စာရွက်စာတမ်းတွေဖြန့်ဝေဖို့ငွေလိုတယ်…လူတကာဆီလိုက်အလူခံလို့ရတဲ့အမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး….ဒါနဲ့လျှို့ဝှက်အစည်းဝေးထိုင်ဘာလုပ်ခဲ့ရသလည်းဆိုတော့….ချဲရောင်း မယ်…များများစားစားမဟုတ်ဘူး…၁၀ဘိုးအကွက်လားမသိဘူး..ဒါနဲ့လူခွဲပြီးလိုက်ရောင်းတယ်….တယောက်က မေးတယ်…ပေါက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလည်းဆိုတော့…ငါတို့က ၈ ရက်နေ့မှာ လူထုအုံကြွမူ့စမှာ…ချဲက ၁၅ ရက်နေ့မှထွက်မှာ…အဲဒီတော့..ဒါထဲ့တွက်ဘို့မလိုတော့ဘူး…ပေါက်တဲ့သူရှိရင်လည်းတောင်းပန်လိုက်မယ်ကွာဆိုပြီး…ကိုယ်မြင်တဲ့အမြင်သေးသေးလေးလေးနဲ့ဖြေရှင်းခဲ့ကြတယ်…ချဲရောင်းလို့ရတဲ့ငွေတွေနဲ့..နယ်အသီးသီးကိုသွားကြ…စာရွက်စာတမ်းတွေဝေကြပေါ့……
ဒီလိုနဲ့တဖြေးဖြေး သြဂုတ်လ ၈ - ရက်နေ့နီးကပ်လာတယ်…….တနေ့…ကျနော့်သူငယ်ချင်းတယောက်က အူယားဖားရားသတင်းလာပေးတယ်…..
“ဟေ့ကောင်…ငါသတင်းအတိကျရထားပြီ…..ပါတီယူနစ်အတွင်းသတင်းကပေါက်ထွက်လာတာ….ငါတို့ကျောင်းသားတွေကိုဒီရက်ပိုင်းအတွင်းအကျယ်ခေါ်ပြီးထိန်းသိမ်းထားလိမ့်မယ်…..အထူးသဖြင့်ရန်ကုန်မှာကျောင်းတက် နေတဲ့သူတွေဖြစ်ဘို့များတယ်…..”ကျနော်လည်းခေါင်းတော်တော်စားသွားတယ်..ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူး…အတွေ့အကြုံကလည်းမရှိ…အသက်အရွယ်ကလည်းငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေဆိုတော့…ဆုံးဖြတ်ရခက်သွားတယ်..ဒါနဲ့ ကျနော်တို့ချက်ခြင်းလူစုပြီး…အစည်းအဝေးထိုင်တယ်….အားလုံးကသဘာတူညီစွာနဲ့…ဆန္ဒပြပွဲကို သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့လုပ်မဲ့အစားရှေ့တိုးပြီး၆.ရက်နေ့မှာစတင်ဘို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ကြတယ်…..ရက်ကအရမ်းနီးနေပြီ.. လုပ်စရာရှိတာစီစဉ်စရာရှိတာတွေကိုအသေးစိတ်စီစဉ်ရတော့တယ်….နောက်တခါရေနံမြေကအလုပ်သမားတ ချို့နဲ့ ကျနော်တို့ကျောင်းသားတွေချိတ်ဆက်မိတယ်…သူတို့ပါ..ပါဝင်လာတယ်..
လူထုဆန္ဒပြပွဲကိုစတင်ဘို့…မြို့လယ်နဲ့မနီးမဝေးမှာရှိတဲ့…အထက(၁)ကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်..ဒီ ကျောင်းက သမိုင်းအစဉ်လာကြီးတဲ့ကျောင်း…ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကစလို့ အရှင်ဆန္ဒာဓိက ၊ စာရေးဆရာမ ဂျူးတို့ပညာရည်နို့စို့ခဲ့ရာကျောင်းတော်ကြီး….တယောက်ကကျောင်းရဲ့မြေပုံကိုပြုစုတယ်…အဖွဲ့တွေအသီးသီးခွဲလိုက်ကြတယ်…..ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တိုင်းကျေနပ်မိတာတခုကကျနော်တို့အားလုံးကထင်ရာမြင်ရာတွေနဲ့စု ပေါင်းလုပ်လိုက်ကြတာ…နည်းနည်းတော့စနစ်ကျတယ်ပြောလို့ရပါတယ်…အဖွဲ့အသီးသီးခွဲပြီးဘယ်သူကဘယ် ကျောင်းဆောင်မှာတာဝန်ယူမယ်…ဘယ်သူနဲ့အဖွဲ့ကကျောင်းရှေ့တံခါးကိုပိတ်လုံခြုံရေးစောင့်ကြည့်တာဝန်…မြို့ထဲတလျှောက်ကနေကျောင်းအထိ..ကြားထဲမှာကျနော်တို့လူတွေတယောက်ပြီးတယောက်ချထားတယ်…အချိန်ကိုက်…တပ်လှန့်ထားတယ်….သတ်မှတ်တဲ့အချိန်ရောက်တာနဲ့မြို့ထဲမှာရှိနေတဲ့လူထုကိုကျောင်းသားတွေဆန္ဒပြပြီဆိုတာကိုဆော်သြဘို့ပေါ့…….
ကျနော်….၅..ရက်နေ့တညလုံးနီးပါးလောက်မအိပ်ရဘူး…ကြွေးကြော်သံစာရွက်ငယ်လေးတွေကူးနေတာ… မနက်လင်းခါနီးလောက်ကြမှတမှေးလောက်ပဲမှေးလိုက်ရတယ်…မနက်..၈နာရီလောက်ပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ရင်း..ဆုံရပ်ရှိရာကိုထွက်လာခဲ့တယ်….လမ်းတလျှောက်ဖြတ်လာရင်းကြည့်လိုက်တော့ ရေနံမြေက အလုပ်သမားတချို့အနည်းငယ်အကွာဝေးဆီမှာမရောင်မလည်လုပ်ရင်းနေရာယူနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတော့ တော်တော်အားတက်သွားမိတယ်…..
အထက(၁)ကျောင်းရှေ့မှာရှိတဲ့လဘက်ရည်ဆိုင်ကနေကျောင်းထဲကိုလှမ်းပြီးအဆက်မပြတ်အကဲခပ် ကြည့်လိုက်တော့..ကျောင်းဝန်းတံခါးအ၀င်ဝမှာဆရာတွေကကျောင်းသားတွေကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးတာတွေလုပ်နေတာကိုလှမ်းမြင်နေရတယ်….ရှေ့တံခါးပေါက်မကြီးက၀င်ရောက်ရမှာက သုံးဦး…ကျနော်ရယ်…သက်နိုင် (ဒသာနိကဗေဒ )ရယ် ကျော်ဆန်းဦး( မကွေးကောလိပ် )……အားလုံးကရင်ခုံနေကြတယ်….ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ကျနော်ခါးကြားမှာဓါးမြှောင်တိုလေးတချောင်းဆောင်လာတယ်…ပထမကျောင်းတက်ခေါင်းလောင်းထိုးသံကြားလိုက်ရပြီ……ရင်ခုံသံတွေက..အရင်ကထက်ပိုကျယ်လောင်လာပြီ….သုံးရောက်လုံးလဘက်ရည်ဆိုင်ကနေ…ထထွက်လာပြီးအသင့်နေရာယူလိုက်တယ်…ဒုတိယခေါင်းလောင်းထိုးပြီးရင်ကျောင်းတံခါးကိုပိတ်လိုက်တော့မှာ လေ…အချိန်ကနောက်ထပ်ငါးမိနစ်ပဲကျန်တော့တယ်….ခပ်လှမ်းလှမ်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျော်လင်းနဲ့သူ့အဖွဲ့သားတွေက..ကျောင်းဝန်းတံခါးတွေကိုပိတ်ပြီးထိန်းသိမ်းထားဘို့အသင့်…ကျနော့်ကိုသူကလက်မထောင်ပြတယ်( အားလုံးအိုကေပေါ့ )…နောက် ကျောင်းနောက်ဖက်ကနေ ပတ်ဝင်ပြီး သွားမဲ့ကျော်စွာတို့အဖွဲ့ကခပ်သုတ်သုတ်ပြေးသွားပြီ…..သက်နိုင်ကကျနော်ကိုကပ်ပြီးတိုးတိုးလေး လှမ်းပြောတယ် …..
“ကိုဝမ်း…မတတ်နိုင်ဘူးဗျာ…ရှေ့ကစောင့်နေတဲ့ဆရာတွေက…ခင်ဗျားတို့ကျနော်တို့ဆရာတွေ…..သူတို့ဘယ်လိုတားတား ကျနော်တို့နားမရောင်နဲ့ တွန့်မသွားနဲ့ရှေ့ဆက်တိုးမယ်….”ဆိုတော့ ကျော်ဆန်းဦးက….
၁၉၈၈သြဂုတ်လ(၈)ရက်နေ့မှာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့..ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံဆိုတာ… တပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကနေ..ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအကောင်ထည်ဖော်ဘို့..တောင်းဆိုခဲ့ ကြတဲ့..လူထုတော်လှန်ရေးကြီးဖြစ်တယ်..မင်းမဲ့စရိုက်တွေနဲ့ပရမ်းပတာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့..ဆူပူအရေးအခင်းမဟုတ်
ခေါင်းလောင်းသံမဆုံးခင်မှာပဲကျနော်တို့သုံးယောက်သားကျောင်းထဲကိုအပြေးဝင်သွားတယ်၊လုံခြုံရေးဆရာတ ယောက်ကတံခါးပိတ်မလို့ထအလာ…ဆရာကကျနော်တို့ကိုကြည့်ပြီးကြောင်သွားတယ်…..ကျန်တဲ့ဆရာနှစ် ယောက်ကထလာပြီး ကျနော်တို့ကိုလိုက်တားတယ်……
“ဟာ…..ဟာ…ဘာလုပ်ကြမလို့လည်းခလေးတို့…ဘာလုပ်ကြမလို့လည်း….”ဆရာ့အော်သံကိုကျနော်တို့နားစွန့်မနေနိုင်ဘူး…ကျနော်တို့သုံးယောက်လုံးကျောင်းအပေါ်ထပ်ပြေးတက်သွားခဲ့တယ်…ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးရုံး ခန်းနားရောက်တော့…ကျောင်းအုပ်ကြီးနဲ့ရုံးစာရေးတယောက်ကမတ်တပ်ရပ်လို့်…ရုတ်တရက်ဆိုတော့သူတို့ လည်း ကြောင်သွားပုံရတယ်…ကျနော်က
“တယ်လီဖုန်းဘယ်မှာလည်းဗျ”ဆိုတော့…ရုံးစာရေးလုပ်တဲ့သူကလက်ညှိုးလှမ်းထိုးပြလိုက်တယ်…ကျနော်အ ပြေးအလွှားသွားပြီး ပါလာတဲ့ ဓါးမြှောင်နဲ့ ဖုန်းကြိုးကို ဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်…..…မြို့နယ်ပညာရေးမူးရုံးကလည်း ကျောင်းအပေါ်ထပ်မှာ…ကျနော်ပညာရေးမှုးရုံးခန်းဆီကိုတခါအပြေးဝင်သွားတယ်…ကျနော်ဝင်သွားတော့.. ရုံးခန်းက၀န်ထမ်းတွေက…မတ်တပ်လေးတွေရပ်ပြီး..ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး..သူတို့စိတ်ထဲ..ဘာတွေဖြစ်နေတာလည်းကိုမသိတာ….စောစောကလိုပဲ ဖုန်းကိုလိုက်ရှာပြီး ကြိုးကိုဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်…အဲဒီအချိန်မှာ..သက်နိုင်နဲ့ ကျော်ဆန်းဦးက ကျောင်းဆောင်အပေါ်ထပ် ဆရာ၊ဆရာမများနားနေရာအခန်းမှာ..တရားတွေဟောလို့…
“ဆရာ၊ဆရာမတို့ခင်ဗျား…အခုချိန်ကစလို့..ကျနော်တို့လူထုတော်လှန်ရေးကြီးစပါပြီ…ဆရာတို့ဆရာမတို့ဟာကျနော်တို့ဆရာတွေပါ..အားတော့နာပါတယ်….ဒါပေမဲ့…ဆင်းရဲတွင်းနက်နေတဲ့…ပြည်သူလူထုကြီးအ တွက်လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာဖြစ်လို့..ကျနော်တို့ကိုနားလည်ပေးပါ….”ကျော်ဆန်းဦးကလက်သီးလက်မောင်း တန်းပြီးတရားဟောနေတော့…ဆရာဆရာမတွေလည်းဘာမှပြန်မပြောကြဘူး..ငုတ်တုတ်လေးတွေထိုင်ပြီး.. ကျနော်တို့ကိုကြောင်စီစီလေးတွေကြည့်နေကြတယ်….ကျနော်က ကျောင်းအောက်ကိုတချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ကျောင်းရှေ့ကွင်းပြင်လယ်မှာ ရန်ကုန်စက်မူ့တက္ကသိုလ်က ကိုကံတင်နဲ့ ကျော်စွာတို့အုပ်စုက ခွပ်ဒေါင်းအလံကိုလွင့်ပြီးကြွေးကြော်သံတွေတိုင်လို့…
ဒါပေမဲ့ကျောင်းသားအင်အားကဘာမှမရှိဘူး…ကွင်းပြင်လည်မှာအယောက်နှစ်ဆယ်လောက်ငုတ်စုစုလေးအော်နေကြတာ…ကျနော်တော်တော်အားငယ်သွားတယ်…ဒါနဲ့ကျနော်တို့ကျောင်းအောင်ထပ်ကိုပြန်ဆင်းလာကြပြီး….စာသင်ခန်းထဲကိုဝင်တယ်….ကျောင်းသားတွေကိုဝင်ပြီးတရားဟောတယ်…တခြားအဆောင်တွေမှာလည်း…ကျနော်တို့ရဲဘော်တွေက..စာသင်ခန်းတွေထဲဝင်..ကျောင်းသားတွေကိုကွင်းလည်ထွက်ခဲ့ဘို့ပြောတယ်…ဒါပေမဲ့ ကျောင်းသားတွေကကြောက်နေကြပြီးဘယ်သူမှထွက်မလာဘူး….ကျောင်းရှေ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့… ကျော်လင်းတို့အုပ်စုကတံခါးမကြီးကိုသူတို့ယူလာတဲ့သံကြိုးတွေနဲ့ချည်ပြီးပိတ်ထားလိုက်တယ်…တံခါးမကြီးရဲ့တဘက်ကျောင်းဝန်းအပြင်ဘက်မတော့…အစုလိုက်အပြုံလိုက်လူထုကြီး….နောက်မှသိရတာက…ကျနော်တို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကိုက်နာရီကိုရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ထဲ…မြို့ထဲမှာတာဝန်ယူထားတဲ့သူတွေက… သတင်းစကားတွေကိုလိုက်ဖြန့်ကြတယ်…ဖြစ်ချင်တော့…ကျနော်တို့ထဲကတယောက်ဖြစ်တဲ့ မြင့်ငွေ ( ယခု NDF ပါတီဗဟိုအလုပ်အမူ့ဆောင်အဖွဲ့ဝင်)က လမ်းတလျှောက်အော်ပြေးတယ်လေ…
“ အထက ( ၁ ) မှာ သူပုန်တွေဝင်စီးလို့ဗျို့……..အထက ( ၁ ) မှာ သူပုန်တွေဝင်စီးနေပြီ ” ဆိုတော့…မြို့နေလူထုကထိတ်လန့်သွားပြီး..သူတို့သားသမီးတွေရှိရာကျောင်းဆီကိုတဟုန်ထိုးရောက်လာကြ တယ်…ကျောင်းဝန်းပြင်ပမှာသာလူထုကြီးကရောက်နေတာ…ကျောင်းဝန်းအတွင်းမှာကဘာမှမရှိသလောက်နီး ပါး…ကျနော်တို့စိတ်ဓါတ်တော်တော်ကျသွားကြတယ်…ဘာလုပ်လို့ဘာကိုင်ရမှန်းမသိတော့ဘူး…ပြာယာခတ်နေ ကြပြီ…သက်နိုင်ကကျနော့်ကိုကြည့်ပြီး..မျက်နှာအမူအရာနဲ့…ဘာဆက်လုပ်ကြမလည်းပေါ့……ကျနော့်ခေါင်းထဲအကြံတခုဝင်လာတယ်…ဘာမှပြောမနေတော့ဘူး…ကျောင်းအပေါ်ထပ်ကိုပြေးတက်သွားပြီး..ခေါင်းလောင်းရှိ ရာကိုသွားတယ်…ပြီးတော့..ခေါင်းလောင်းကိုအဆက်မပြတ်တီးတော့…..ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးကကြောင်ပြီး ကြည့်နေတယ်….စာသင်ခန်းတွေဆီကကျောင်းသားတွေက..တကယ်ကျောင်းဆင်းတယ်ထင်ပြီးအကုန်ထွက်လာကြတယ်…အဲဒီအခါကြမှကျောင်းသားတွေကကွင်းလယ်ကိုစုရုံးရောက်ရှိလာပြီး..ကျနော်တို့လူတွေနဲ့ပေါင်း စည်းမိသွားတော့တယ်…ခွပ်ဒေါင်းအလံတော်ကိုရှေ့ကငွားငွားစွင့်စွင့်ကိုင်သူကကိုင်နဲ့စနစ်တကျတန်းဆီထွက်ဘို့လိုက်ပြောအပြီးမှတော့ငါးရောက်တွဲတန်းဆီပြီးကျောင်းထဲကနေထွက်လာတော့တယ်….ကျောင်းဝန်းအပြင်ကစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့လူထုကြီးကအဲဒီအခါကြမှသဘောပေါက်တယ်ထင်ပါရဲ့..လက်ခုပ်သံတွေ..မုံထိယံနေ အောင်တီးလို့အားပေးကြရင်းသူတို့ပါစီတန်းဆန္ဒပြတဲ့ထဲမှာပါလာကြတယ်လေ။…..ဘေးမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတယောက်ကကျနော့်ကိုလက်ကိုင်ပုဝါတထည်လှမ်းကမ်းတယ်….သူကိုယ်တိုင်လည်းမျက်နှာမှာစည်းထားတော့…စိတ်ထဲမှာ..သူ့များဒီလိုလုပ်ရမယ်လို့ဘယ်သူကများပြောထားပါလိမ့်ပေါ့…ဒီလိုနဲ့နေရာတနေရာအရောက်မှာ ပထမဆုံးလူထုနိုင်ငံရေးတရားပွဲစကျင်းပတယ်…လူတွေကစားပွဲခုံတလုံးထုတ်ပေးတော့..ကျနော်ကအဲဒီအပေါ်တက်..ဦးထုတ်အမဲတလုံးကိုလည်းခေါင်းမှာဆောင်း…လက်ကိုင်ပုဝါကိုလည်း..မျက်နှာမှာစည်းထားရင်း (ရုပ်ဖျက်တာ)နိုင်ငံရေးတရားတွေကို အားနဲ့မာန်နဲ့ဟောတာပေါ့
“ ခွေးသူတောင်းစားအစိုးရကြောင့်……ဒီ ပါတီ၊ကောင်စီတွေကြောင့်…..”
ဟာသွားပြီ..ကျနော်တော်တော်ရီချင်သွားတယ်…ရွာသစ်ဆိုတာကျနော်နေတဲ့ရပ်ကွက်.ကျနော်ကမသိအောင် ရုတ်ဖျက်ထားကာမှ..ကျနော့်နံမည်ကိုထုတ်အော်နေကြတော့..မထူးတော့ပါဘူး..မျက်နှာမှာစည်းထားတဲ့လက်ကိုင်ပုဝါရောဦးထုတ်ရောဆွဲချွှတ်ပစ်လိုက်တယ်…..လူအုပ်ကြီးကများသထက်များလာပြီ…..ကျောင်းသားတ ယောက်ကကြွေးကြော်သံရှေ့ကတိုင် ပေးတယ်……
ဟာသွားပြီ…ကျနော်အပြေးအလွှားလှမ်းပြောလိုက်ပေမဲ့မမှီလိုက်တော့…ဘယ်နဲ့..ကျောင်းသားကုလသမဂ္ဂ ရမှာလည်း ကျောင်းသားသမဂ္ဂ…ကျောင်းသားသမဂ္ဂ…ကျနော်က သူ့ကိုရှင်းပြလိုက်တော့မှ….
“ကုလားဗလီမီးရှို့ကြမယ်ဟေ့…ကုလားတွေလိုက်ရိုက်…ကုလားဆိုင်တွေဖျက်ကြ….”ဆိုတဲ့အသံတွေကစူးထွက်လာတယ် လူတွေအားလုံး စနစ်တကျ စီတန်းလှည့်လည်လာရာက ၀ရုန်းသုံးကားတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်…ဒါနဲ့ ကျနော်ကကျောင်းသားတွေအားလုံးကိုအပြေးအလွှားလိုက်ခေါ်ပြီး မွတ်စလင် ဗလီသွားရာလမ်းသွယ်ထိပ်ကနေ တယောက်ကိုတယောက်လက်ခြင်းယှက်ပိတ်ထားလိုက်တယ်….စားပွဲခုံတလုံးကိုအမြန်ယူခိုင်းပြီး ခုံပေါ်တက်စကားပြောရပြန်တော့တယ်…….
“ပြည်သူလူထုကြီးခင်ဗျား…ကျနော်တို့တတွေဟာ..ဘာသာရေးဆန့်ကျင်မှု့အတွက်အခုလိုဆန္ဒပြပွဲကိုဖော် ဆောင်နေတာမဟုတ်ပါဘူး…ကျနော်တို့ဟာ..လက်ရှိတပါတီအာဏာရှင်မဆလအစိုးရကိုဆန့်ကျင်တော်လှန်နေတာပါ…ဒါ့ကြောင့်အခုလို…မွတ်စလင်ဗလီများကိုဖျက်စီးဘို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုမပြုလုပ်ကြဘို့အနူးညွတ်မေတ္တာရပ်ခံပါ တယ်….အာဏာရှင်တွေဟာသူတို့ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ကိစ္စတွေအာရုံအလှည့်အပြောင်းဖြစ်သွားအောင်…လူမျိုးရေးအဓိကရုန်းတွေကိုဖန်တီးလေ့ရှိပါတယ်….တကယ်လို့ကျနော်တို့အားလုံးကဘာသာရေး၊လူမျိုးရေးအဓိကရုန်း ကို ပြုလုပ်လိုက်မယ်ဆို….အစိုးရကြိုက်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်….အစိုးရအကြိုက်အဖြစ်ခံတော့မှာလား ”
“ အဖြစ်မခံနိုင်ဘူး…ဒီခွေးသားတွေအကြိုက်အဖြစ်မခံနိုင်ဘူး…ဆက်ချီတက်ကြမယ် ”
လက်ခုပ်တွေကိုတဖြောင်းဖြောင်းတီးရင်းဆက်ချီတက်ခဲ့ကြတယ်……မြို့မြောက်ဖျားဘက်ရောက်သည်တိုင် အောင်လူထုဆန္ဒပြပွဲကြီးကိုကျင်းပခဲ့ကြတယ်..တခါမြို့ထဲဘက်ကိုပြန်လှည့်လာခဲ့တယ်….ကျနော်တို့အားလုံးက သပိတ်စခမ်းအမာခံထိုင်မဲ့နေရာကိုလျှို့ဝှက်ထားတယ်…တကယ်လို့ဒီလိုမလုပ်ပဲကြိုတင်ကျေငြာလိုက်မယ်ဆို..အာဏာပိုင်တွေက လက်နှက်ကိုင်တွေနဲ့စီးစောင့်နေမှာကိုကာကွယ်ထားတဲ့သဘောပါ….
သပိတ်စခမ်းအမာခံထိုင်မဲ့နေရာကမြို့လည်နားမှာရှိတဲ့..လည်ပေါ်(လယ်ပေါ်)သာသနာ့ဗိမ္ဗာန်…ဒီနေရာက သမိုင်းရှိခဲ့တဲ့နေရာ….တို့ဗမာအစည်းရုံးကြီးပြည်လုံးကျွှတ်ညီလာခံကျင်းပခဲ့တဲ့နေရာ….ဗိမ္ဗာန်ကြီးကလည်း တော်တော်ကြီးတယ်….ဘေးပတ်လည်ကလည်းရပ်ကွက်တွေအိမ်တွေဝန်းရံထားတော့…လက်နှက်ကိုင်တွေ တော်ယုံဝင်ဘို့မလွယ်ဘူး
လည်ပေါ်သာသနာ့ဗိမ္ဗာန်ကိုဝင်မဲ့လမ်းသွယ်ထိပ်ကိုဆန္ဒပြလူအုပ်ကြီးရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲ….ကျောင်းသားတွေအားလုံးကလမ်းကြောင်းပေးလိုက်ကြတယ်…အဲဒီ့နေရာမှာအမာခံသပိတ်စခမ်းထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းအားလုံးသိအောင်ဖြန့်ဝေလိုက်တယ်……သာသနာ့ဗိမ္ဗာန်ထဲကိုလူထုကြီးရောက်တော့…တော်တော် မောနေကြပြီ…မြို့တပတ်ဆိုတာနည်းတဲ့အကွာဝေးမှမဟုတ်တာ…ရပ်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကသောက်ဖို့..ရေတွေကိုပလပ်စတစ်ပုံးတွေ..ရေအိုးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်သယ်လာရင်း…လာတိုက်ကြတယ်…ခနနေတော့လူထုထဲကပဲသူတို့ဖာသာသူတို့မိုက်ကရိုဖုန်းတွေလော်စပီကာတွေသယ်လာကြတယ်….မမောနိုင်မပမ်းနိုင်အသံချဲ့ စက်တွေဆင်..နေရာတွေချပေါ့…..လူစုမခွဲဘို့ကျောင်းသားတွေကမေတ္တာရပ်ခံထားတော့…လူအုပ်ကြီးကကွဲမ သွားဘူး…ဒီလိုနဲ့...နေ့လည်(၁)နာရီလောက်ကနေ..သာသနာ့ဗိမ္ဗာန်ထဲမှာ..အထိုင်သပိတ်စခမ်း…နိုင်ငံရေး တရားပွဲကိုကျင်းပကြတော့…တယောက်ပြီးတယောက်စင်ပေါ်တက်ပြောတော့တာပဲ….လူထုရဲ့ရင်ဖွင့်သံအသီးသီးကိုကြားနေရပြီ…
“ကျမမှာသားသမီး၅ယောက်ရှိပါတယ်…ယောကျာင်္းဆုံးသွားတာ…၁၂နှစ်လောက်ရှိပါပြီ..ကျမကအကြော်ရောင်း ပြီးသားသမီးတွေကိုစောင့်ရှောက်လာခဲ့တာ..ကျမမှာဝင်ငွေနဲ့…ထွက်ငွေမလောက်ပါဘူးရှင်…မနှစ်က သမီးအငယ်ဆုံးလေးဖျားလို့ဆေးရုံသွားပို့တာ…ကျမတို့မှာ..ဆေးကုစရာပိုက်ဆံကလည်းမရှိ..ဘယ်သူကိုအားကိုးရမှန်းလည်းမသိ….သောကတွေဝေခဲ့ရပါတယ်…ဒါပေမဲ့..ကျမသမီးလေး အသက်မရှင်ရှာပါဘူး….
“အလုပ်လုပ်တိုင်းသာချမ်းသာရစတမ်းဆို…ကျုပ်ချမ်းသာတာကြာပြီဗျ….ကျုပ်ကဆိုက်ကားနင်းတယ်….အားတဲ့အချိန်ဝါသနာပါတဲ့…စာလေးပေလေးဖတ်တယ်…..ကျုပ်ရဲ့အလုပ်လုပ်ချိန်ဟာတနေ့ကို၁၀နာရီလောက်ရှိတယ်….တနေ့တနေ့စားဘို့ကိုမနည်းရုန်းကန်နေရတယ်…ဒါတောင် မတ်တပ်စာပဲရှိသေးတယ်နော် …တုန်းလုံးစာ… (နေထိုင်မကောင်းလို့ဆေးကုသရမဲ့စရိတ်)တပြားမှမရှိဘူး…နေမကောင်းလို့ဆေးရုံသွားမယ်…ဘယ်မှာလည်း ဆေး…အလုပ်မလုပ်နိုင်လို့..စားစရာမရှိရင်..ဘယ်သူကလာကြွေးမှာလည်း…ဒီစနစ်ဆိုးကြီးကိုကျုပ်မကြိုက်ဘူး ဗျာ…အားလုံးတော်လှန်ပစ်ကြမယ်….
ဒီလိုနဲ့ညနေနည်းနည်းစောင်းသွားတော့….စီတန်းလှည့်လည်ဆန္ဒပြပွဲကိုဆက်လို့ဖို့..ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်…ကျနော်ကတချို့လူတွေကိုမေတ္တာရပ်ခံပြီးသပိတ်စခမ်းမှာစောင့်ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်…ဘာလို့လည်းဆိုတော့… လူတွေအားလုံးထွက်ခွာသွားတဲ့အခါ….အာဏာပိုင်တွေက…သပိတ်စခမ်းကိုဝင်သိမ်းသွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ရ သေးတယ်….ကျန်တဲ့ကျောင်းသားတွေခေါင်းဆောင်ပြီး…လူထုဆန္ဒပြပွဲကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်…..ညနေ၆နာရီလောက်လည်းရောက်ရော…သတင်းဆိုးတခုက၀င်လာတယ်…ဆန္ဒပြပွဲကိုအာဏာပိုင်တွေကဖြိုခွင်းနေ ပြီ….အခုဆန္ဒပြသမားတွေ..ပိတ်မိနေပြီ…သေနပ်နဲ့လည်းပစ်တာ…တယောက်သေသွားတယ်လို့ကြားတယ်….ကျနော်တော်တော်စိုးရိမ်သွားတယ်…စိတ်တွေလည်းအရမ်းလှုတ်ရှားနေပြီ…မတတ်နိုင်ဘူး…ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုဦးဆောင်ပြီးနောက်ကနေလိုက်သွားခဲ့တယ်…မြို့ထဲတလျှောက်မှာလည်း..လူထုကိုလှုံ့ဆော်ရင်း…ပိတ်မိနေတဲ့နေရာဆီချီတက်လာတော့…တနေရာအရောက်မှာ…လူတွေက၀ိုင်းတားတယ်…ရှေ့ဆက်မသွားနဲ့ပစ်လိမ့်မယ်…အကြောင်းမဲ့အသေမခံကြပါနဲ့…သပိတ်စခမ်းမကျအောင်သာကာကွယ်ကြအောင်ပါ…ဆိုတော့ ကျနော်တို့နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်လာခဲ့ကြတယ်…ရွှေဘုံသာရပ်ကွက်နေ..ဖိုးချိုဆိုတဲ့သူသေနပ်နဲ့အပစ်ခံရတာ ပွဲချင်းပြီးသေသွားတယ်…သုံးဦးလောက်ဒဏ်ရာရတယ်…လူထုကြီးက..အာဏာပိုင်တွေစီးလာတဲ့ကားကို အတင်းလုယူပြီးမီးရှို့ပစ်လိုက်ကြတယ်…လူအုပ်ကြီးကယူကြုံးမရဖြစ်နေပြီ်…ဒေါသတွေပေါက်ကွဲနေပြီ…ဒါပေမဲ့အမာခံသပိတ်စခမ်းကိုတော့မကျရအောင်ပြန်လှည့်ကာကွယ်ဘို့ပြန်လာရာကနေ..ရဲစခမ်းတခုရှေ့လည်းရောက်ရော…လူအုပ်ကြီးကရဲစခမ်းဝန်းထဲက..အဆောက်တဦတခုကိုမီးရှို့ပစ်လိုက်တယ်လေ…လူအုပ်ကြီးကိုကျနော်တို့မထိန်းနိုင်တော့ဘူး…..ဘာတတ်နိုင်မှာလည်း…ကျနော်တို့ဘယ်လိုမှမတားဆီးနိုင်တော့ဘူး….
ညဘက်၈နာရီသတင်းမှာတော့…ဆူပူအကြမ်းဖက်ဆန္ဒပြသူလူတစုကကားကိုမီးနဲ့ရှို့လို့သေနပ်နဲ့ပြန် လည်ပစ်ခတ်တာလူတဦးသေဆုံးသွားတယ်ဆိုတာပါလာတယ်…ကျနော်တို့တတွေဒေါသထွက်လိုက်တာမပြောပါနဲ့..တကယ်က..သေနပ်နဲ့ပစ်တာ..လူတဦးသေလို့…လူထုကကားကိုမီးနဲ့ရှို့လိုက်တာ…ပြောင်းပြန်ကျေငြာသွားတယ်…အစိုးရရဲ့မသမာမှု့နဲ့လိမ်ညာမှု့ကိုအားလုံးကသဘောပေါက်သွားကြပြီ…..အဲဒီနေ့ကလူတွေတော်တော် များများဒေါသတွေထွက်ကြတယ်…ကျေကွဲကြတယ်…ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သပိတ်စခမ်းကိုအာဏာပိုင်တွေဝင်မစီးနင်း နိုင်အောင်တော့ကာကွယ်ရမယ်….သပိတ်စခမ်းတည်ရှိရာ..ဆုံတိုက်ရပ်ကွက်သူရပ်ကွက်သားတွေအပါဝင် လူတွေက နိုးနိုးကြားကြားနဲ့ဝိုင်းဝန်းကာကွယ်ကြတယ်လေ…
ကျနော်အဲဒီ့တညလုံးကောင်းကောင်းမအိပ်ခဲ့ရဘူး..အားလုံးကလည်းအကွဲကွဲအပြားပြားဖြစ်ကုန်ကြပြီ၊ဘယ် ရောက်လို့ဘယ်ပေါက်ကုန်မှန်းမသိ၊သပိတ်စခမ်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူဦးရေကြည့်လိုက်တော့အယောက် ၂၀တောင်ကောင်းကောင်းမပြည့်ချင်ဘူး၊တော်တော်လေးထိပ်လန့်ပြီးစိုးရိမ်နေမိတာအမှန်ပဲ…ဘယ်အချိန်များ ငါတို့ကိုဝိုင်းပြီးဖမ်းမလည်းပေါ့..ဒါပေမဲ့ ပတ်ချာလည်မှာဝိုင်းပတ်နေတဲ့အိမ်တွေကလူတွေနဲ့ သပိတ်စခမ်းရှိရာ ဆုံတိုက်ရပ်ကွက်ကပြည်သူတွေကအမာခံကာကွယ်ပေးထားတယ်..ဒုတ်တွေ၊ဓါးတွေဂျင်ကလိလက်နှက်တွေ ကိုင်ဆောင်ပြီးညလုံးပေါက်ကင်းစောင့်ပေးရှာတယ်။ကြားဖြတ်ပြီးတခုပြောချင်သေးတယ်..ဂျင်ကလိဆိုတာ မြှားပုံစံလုပ်ထားတဲ့သံချောင်းအတိုလေး…လောက်လေးဂွနဲ့ထဲ့ပစ်တာ…အဲဒါမှန်လိုက်လို့ကတော့တော်တော်မလွယ်ဘူးဗျ…အာဏာပိုင်တွေဟာ..အဲဒီ့ဂျင်ကလိလက်နှက်ကိုတော်တော်ကြောက်ကြတယ်…တော်တော်လှမ်းတဲ့အကွာဝေးထိလှမ်းပစ်လို့ရတယ်….
“အိမ်ကိုညကရဲတွေအထပ်ထပ်ဝိုင်းပြီး…မင်းကိုလာရှာတယ်…တအိမ်လုံးလိုက်ရှာကြတာဗြောင်းဆန်နေတာပဲ..ရဲအရာရှိတယောက်ကငါ့နားထင်ကိုသေနပ်နဲ့ထောက်ပြီး..ခင်ဗျားသားဘယ်မှာလည်းမှန်မှန်ပြောဆိုပြီး..မေး တယ်..ငါကလည်းအမှန်ပြောတာလေ..ကျမဘာမှမသိဘူး..သူလုပ်တာတွေက..သူစိတ်သူ့သဘောနဲ့လုပ်တာ..ကျမလည်းဘာမှမပြောဘူး…ဆိုတော့..တော်တော်ရိုင်းကြတယ်ကွာ…ပြောတာဆိုတာတွေက…လူမဆန်ဘူး…တခါမင်းညီတွေရောကျန်တဲ့အလုပ်သမားတွေရောကိုဝမ်းလျှားမှောက်ခိုင်းပြီးထားတယ်…ငါမင်းအတွက်တော် တော်စိုးရိမ်တာ…ဆုတောင်းလိုက်ရတာအမောပဲ…မင်းကိုတွေ့မသွားတော့..သူတို့တော်တော်လေးဒေါကန်နေပုံရတယ်…တော်တော်များများလည်းအဖမ်းခံရတယ်လို့ကြားတယ်..လူအယောက်၃၀လောက်မြို့မရဲစခမ်းအချုပ်ထဲမှာအခုဖမ်းထားတယ်တဲ့…”အမေနဲ့အိမ်သားတွေအတွက်တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်..မနက် ၇နာရီလောက်ရောက်တော့လူတွေတဖွဲဖွဲသပိတ်စခမ်းရှိရာကိုရောက်လာကြတယ်…ဒါပေမဲ့..ကျနော်တို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တွေက စုစည်းလို့မရသေးဘူး…ယာယီ ဥက္ကဌ တင်ထားတဲ့..စက်မှု့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ကိုကံတင်ကလည်းအဖမ်းခံလိုက်ပြီ…ဖြစ်ချင်တော့…လှုတ်ရှားမှု့အဖြိုခွဲခံရပြီးနောက်ကိုယ့်အိမ်တွေကိုယ်ပြန်အိပ်ကြတဲ့သူတွေအကုန်နီးပါးလောက်အဖမ်းခံလိုက်ရတယ်..
ကျောင်းသားရယ်လို့ပြန်စုစည်းလို့ရတာ ကျနော်ရယ် ၊ မြင့်ငွေ ၊ ကိုဝင်းရွှေ ၊ ကိုပေါက် (ဂျီတီအိုင်)လောက်ပဲရှိတော့တယ်..ကျန်တဲ့သူတွေပြန်ဆုံလို့မရသေးဘူး…လူအယောက်၁၀၀လောက် သပိတ်စခမ်းထဲမှာစုစည်းမိတယ်ဆိုရင်ပဲ..မြင့်ငွေကလူထုတရားပွဲကိုစကျင်းပတယ်…မနေ့ညနေကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်မှာသူကကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့သူဆိုတော့..အပ်ကျမတ်ကျပြောပြနိုင်တယ်လေ…လူထုရင်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားသလည်းဆိုတော့..အစိုးရရဲ့ဗြောင်ကျကျလိမ်ညာမှု့ကြီးကိုအတော်ကိုစက်ဆုတ်သွားကြတယ်…တဖြေးဖြေးနဲ့လူတွေကသပိတ်စခမ်းထဲကရောက်လာလိုက်ကြတာ..လည်ပေါ်သာသနာ့ဗိမ္ဗာန်ထဲမှာအပြည့်လောက်ရှိနေပြီ…မကြာခင်ပဲ..ကျနော်တို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ထဲက..ကျော်စွာမြင့်ရောက်လာတယ်..အားလုံးကတော် တော်ဝမ်းသာသွားကြပြီ…သူနဲ့အတူမန္တလေးဆေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား..အောင်မျိုး(ယခုကင်ဆာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး..စင်္ကာပူ)ပါပါလာတယ်လေ…အားတွေကိုပြန်စုနိုင်ကြပြီ…ဒီလိုနဲ့မနက် ၉နာရီလောက်ရောက်တော့ မြို့လည်ထဲကပစ်ခပ်နေတဲ့သေနပ်သံတွေကိုအတိုင်းသားကြားနေရတယ်..သတင်းလာပို့သူတွေကလည်း.. အပြေးအလွှားသတင်းလာပို့ကြ….
“မြို့ထဲမှာ…လူစုစုရှိတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်ဖြိုခွဲနေတယ်..ရဲတွေအများကြီးပဲ…လဘက်ရည်ဆိုင်ထဲက စားပွဲထိုးလေးတယောက်ကပုဆိုးလှန်ပြလို့ဆိုသေနပ်နဲ့ပစ်လိုက်တာ..ပွဲချင်းပြီးသေသွားတယ်…သူ့နံမည်က.. ရာကူ..တဲ့…နောက်ဆိုက်ကားစီးလာတဲ့..တယောက်သေနပ်ကျည်ဆိုင်ပါးစပ်မှန်သွားတာ..ဆေးရုံကိုချက်ခြင်း ခေါ်သွားတယ်..သူ့နံမည်ကဦးသောင်း…နောက်ထပ်လည်းသေတဲ့သူတွေမှန်တဲ့သူတွေရှိသေးတယ်ကြားတာပဲ….အဲဒီနေ့ကကျနော်တို့သပိတ်စခမ်းကနေပြင်ပထွက်စီတန်းဆန္ဒပြမှု့မလုပ်ဘို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ကြတယ်.. သပိတ်စခမ်းကိုပဲ..ကျမသွားအောင်အကာကွယ်ပေးဘို့..ပြည်သူလူထုကိုမေတ္တာရပ်ခံခဲ့တယ်…ကျောင်းသား သမဂ္ဂကိုလည်း..ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြတယ်…ကျနော်က ဥက္ကဌ ၊ ဒု ဥက္ကဌက ကျော်ဆန်းဦး ၊ အောင်မျိုးက အတွင်းရေးမှုး၊တွဲဖက်အတွင်းရေးမှုးကျော်စွာမြင့်နဲ့မြင့်ငွေကအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းသားများအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တာဝန်တွေကိုယူခဲ့ကြတယ်…
ညရောက်တော့လူထုကကျနော်တို့ကိုမေတ္တာရပ်ခံတယ်..ကျနော်တို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကျလို့မဖြစ်ဘူးဒါ့ကြောင့်ကျနော်တို့ကိုလုံခြုံတဲ့နေရာမှာထားမယ်..သပိတ်စခမ်းကိုသူတို့ကာကွယ်မယ်..သတင်းတွေက လည်းရထားတာရှိတယ်…သပိတ်စခမ်းကိုရဲအင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ဝင်စီးလိမ့်မယ်..ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့..မနက်ဖြန်ကရှစ်လေးလုံးနေ့..တနိုင်ငံလုံးတပ်လှန့်ထားတဲ့နေ့…သတင်းရထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ..သက်ဆိုင်ရာအာ ဏာပိုင်များကအဲဒီ့ညမှာ..အလုံးအရင်းနဲ့ဝင်စီးဘို့ကြိုးစားတယ်…ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့မားမားမတ်မတ်ခုခံမူ့ ကြောင့်..သူတို့သပိတ်စခမ်းကိုဝင်မစီးနိုင်ခဲ့ဘူး..တပ်လှန်သွားခဲ့တယ်။ညပိုင်းရောက်တော့..သပိတ်စခမ်းတည်ရှိရာဆုံတိုက်ရပ်ကွက်ကအမာခံလူထုတွေက..ကျနော်တို့ကိုလျှို့ဝှက်ခေါ်ထုတ်သွားပြီး..လုံခြုံတဲ့နေရာကိုပို့ပေး ထားတယ်..မှတ်မိနေပါ သေးတယ်..ကျနော်ရယ် အတွင်းရေးမူး အောင်မျိုးရယ် တွဲ-အတွင်းရေးမူး ကျော်စွာရယ်လိူင်ဂူကြီးတစ်လုံးထဲဝင်အိပ်ရတယ်..ကောင်းကောင်းလည်းအိပ်မရပါဘူး…အပေါ်ကသဲတွေကတဖျောဖျောကျဆိုတော့..ပေးထားတဲ့..စောင်တွေကိုခေါင်းမြီးခြုံပြီးကွေးနေရတာပေါ့..အားလုံးကမနက်ဖြန်အတွက်ရင်ခုန်နေကြတော့..တော်တော်နဲ့အိပ်မပျော်နိုင်ကြပါဘူး
မနက်မိုးလင်းတော့ကျနော်တို့သပိတ်စခမ်းရှိရာကိုသွားခဲ့တယ်…လုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားတဲ့သူတွေက..ညကသပိတ်စခမ်းကိုဝင်စီးဘို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့…ရဲတွေကိုသူတို့ဘယ်လိုတုန့်ပြန်ကာကွယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ပြန်ပြောပြကြတယ်…ရဲတွေဂျင်ကလိနဲ့လောက်လေးတွေမှန်ပြီးရှေ့ဆက်မတက်ရဲပဲ..ပြန်ဆုတ်သွားကြတယ်…မနက်၈နာရီလောက်ရောက်တော့..လူတွေတော်တော်များများရောက်လာကြပြီ…ခွပ်ဒေါင်းအလံတွေကိုယ်စီကိုယ်စီလွှင့်ထူလို့…ကျနော်တို့က၁၀နာရီမှာချီတန်းလှည့်လည်ဆန္ဒပြပွဲလုပ်ဘို့သတ်မှတ်ထားတော့…၁၀နာရီလောက်မှာ..လူထုကြီးကသပိတ်စခမ်းထဲမှာခြေချစရာနေရာမရှိလောက်အောင်ကိုများနေပြီ…..အဲဒီနေ့မှာကျနော်တို့ထဲကခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေအကုန်နီးပါးလောက်ပြန်ဆုံနိုင်ကြတယ်…ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ မင်းရဲထွန်းကား ၊ တို့ပြန်လာတယ်…ဒီလိုနဲ့သပိတ်လမ်းကြောင်းချီတက်ရာလမ်းကြောင်းရေးဆွဲနေစဉ်မှာပဲ…အမကြီးတယောက်က အမောတကောပြေးလာပြီး ကျနော်တို့ကို လာပြောတယ်…
“မောင်လေးတို့..အမအရေးကြီးတာလေးတခုပြောချင်တယ်..မောင်လေးတို့ယုံတာမယုံတာခနထားပေါ့..အမ ပြောတာလေးတော့နားထောင်ပေးပါ…အမကိုအကြံပေးတဲ့သူရှိနေလို့ပါ…မောင်လေးတို့ချီတက်ရင်တောင်ဘက်ကိုဦးတည်ပြီးမသွားကြပါနဲ့…နဂါးဦးခေါင်းကဒီလမှာမြောက်ဘက်ကိုဦးတည်နေတယ်…တောင်ဘက်ကို ဦးတည်သွားတယ်ဆိုရင်..နဂါးခံတွင်းထဲဝင်သွားသလိုဖြစ်မယ်..အစားခံရလိမ့်မယ်…အမတောင်းပန်ပါတယ်…မသွားကြပါနဲ့…မြောက်ဘက်ကိုဦးတည်ထွက်ပါ….”သူကိုကြည့်ပြီးကျနော်တို့တယောက်ကိုတယောက်ပြုံးမိကြ တယ်…ဒါနဲ့ပဲ..ကျနော်တို့အားလုံးက..တောင်ဖက်ကိုဦးတည်ထွက်မဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းပြီးမြောက်ဘက် ကိုဦးတည်ထွက်လိုက်ကြတယ်….ပြီးတော့..ပစ်ခပ်နိုင်လောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုရှောင်ပြီးချီတက်ခဲ့ကြ တယ်….အဲဒီနေ့ကပစ်တာခပ်တာလုံးဝမလုပ်ခဲ့ဘူး…ပါဝင်လာတဲ့လူထုအင်အားကြီးကလည်းကြောက်စရာ ကောင်းလောက်အောင်များလိုက်တာမှမပြောပါနဲ့တော့…..တမြို့လုံးမှာရှိနေတဲ့လူထုကလည်းအားပေးလိုက်ကြတာ..ကျနော်တို့တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ရင်းကျေနပ်မိခဲ့ကြတယ်…ဘာပဲပြောပြောကျနော်တို့ကြိုးပမ်း ချက်တွေအောင်မြင်သွားပြီ….ပူပြင်းလှတဲ့အညာနေရဲ့ဒဏ်ကိုတောင်ဘယ်သူမှမမူ့ကြဘူး….မြို့လည်မှာ ကျနော်နိုင်ငံရေးတရားဟောတော့…အောက်ကလူထုကိုကြည့်ပြီး…ကြက်သီးတွေတောင်ထမိတယ်…အားလုံးရဲ့မျက်နှာသွင်ပြင်တွေဟာ..နာကျဉ်းခပ်ထန်နေကြသလိုပဲ…ကျွှေးကြော်သံတွေကိုနောက်ကလိုက်အော်သံတွေ ဟာ….မိုးကြိုးအလုံးလိုက်အလုံးလိုက်ပစ်ချလိုက်သည့်အလား
သြဂုတ်လ ၉ ရက် ၁၉၈၈
ဒီနေ့လည်း မနေ့ကရှစ်လေးလုံးလိုပဲ..လူထုဆန္ဒပြပွဲနဲ့စီတန်းလှည့်လည်တာကို မြို့မြောက်ဘက်ကနေထွက်ပြီး တောင်ဘက်ကပြန်ဝင်လာခဲ့တယ်…ထူးခြားတာက..ပစ်တာခတ်တာလုံးဝမရှိခဲ့ဘူး..မြို့လူထုကပိုရဲတင်းလာ တယ်…သောက်ရေတွေအိုးတွေကိုအိမ်တွေရှေ့မှာတန်းစီချထားတာမျိုး၊သပိတ်တပ်ဦးကိုပန်းကုံးတွေစွပ်တာမျိုးတွေလုပ်ကြတယ်….သတင်းတွေထဲမှာလည်းတနိုင်ငံလုံးလောက်လူထုအုံကြွမူ့တွေစနေကြပြီ…တမြို့ပြီးတမြို့ဆန္ဒပြပွဲတွေအကြောင်းအသံလွှင့်ဌာနတွေကတဆင့်သိနေရတယ်….တကယ်တော့…လူထုဟာဘယ်ဟာ မတရားဘူး၊ဘယ်ဟာတရားတယ်ဆိုတာကိုသိကြပါတယ်..အကြောက်တရားတွေဖြစ်အောင်ခြောက်လှန့်ဖိနှိပ်ထားလို့သာမလွန်ဆန်ဖြစ်နေကြတာပါ..လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ထိုးဖောက်ခွင့်တစုံတရာလည်းရောက်လာရော..လူထုရဲ့ဆန္ဒတွေသဘောထားတွေကသိသာတယ်…
သပိတ်စခမ်းထဲဆန္ဒပြစစ်ကြောင်းကြီးပြန်ဝင်တော့..ကျနော်တို့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တ တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ပြီးတော်တော်ရီချင်နေကြတယ်..ဘာလို့လည်းဆိုတော့..လူတွေကချွှေးတွေတရွဲရွဲနဲ့ဆံပင်တွေမှာလည်းဖုံတွေအလိမ်းလိမ်း..ဒါပေမဲ့..လည်ပင်းမှာအစွတ်ခံထားရတဲ့ပန်းကုံးတွေကဇာတ်မင်းသားလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ဆိုတော့ ..စပ်ဖြဲဖြဲပုံတွေပေါက်နေကြတယ်….ဒီကြားထဲမှာ..သပိတ်စခမ်းထဲက..စင်မြင့်မှာ နိုင်ငံရေးတရားဟောတော့..ပန်းကုံးတွေကမချွှတ်ရဲသေးဘူး..လူထုကတမြတ်တနိုးနဲ့ချီးမြှင့်ထားတာဆိုတော့… ငြိုငြင်သွားမှာကိုလည်းကြောက်ရသေးတယ်..တခါဆန္ဒပြလမ်းကြောင်းကိုအကြံပေးတဲ့အမကြီးကလုပ်ပြန်ပါလေရော..ကျနော်တို့စင်မြင့်ပေါ်တက် တရားမဟောခင် ခြေထောက်အောက်နားမှာ ခြင်္သေ့ပုံနဲ့ နေ၀င်း ၊ စိန်လွင်ဆို နှစ်ပုံခင်းထားတယ်လေ…အဲဒီပုံတွေပေါ်ခြေဖနောင့်နဲ့“ဟိတ်”ဆိုပေါက်ပြီးမှပြောရမယ်တဲ့..ကျနော်တို့ကလည်းအားနာတတ်တယ်..ဒါလေးလုပ်တာဘာမှမခက်ပါဘူးလေဆို..သူပြောသလိုလုပ်လုပ်ပြီးမှစင်ပေါ်တက်ရတယ်..သူကတော့..တော်တော်ကိုကျေနပ်လို့…ပြီးတော့ပြောလိုက်သေးတယ်
“ သူတို့ကလည်းငါတို့ကို ဗေဒင်၊ယေတြာတွေနဲ့တိုက်နေတာ..ငါတို့ကလည်းပြန်တိုက်စစ်ဆင်ရမယ်လေတဲ့”
ရင်ထဲမှာသူ့ကိုကြိတ်ပြီးတော့ချီးကျူးမိတာရှိပါတယ်..သူလည်းသူတတ်နိုင်သလောက်တော်လှန်ရေးလုပ်နေတာကိုပါ။တမြို့လုံးမှာရှိတဲ့ရပ်ကွက်အသီးသီးကထမင်းထုတ်တွေစုပြီးလာပေးကြတယ်..ရှစ်လေးလုံးလူထုဆန္ဒပြပွဲကာလတွေမှာ လူထုကပေးတဲ့..ထမင်းထုတ်တွေစားရတာကိုက သိပ်အရသာရှိလှပါတယ်…
သြဂုတ်လ ၁၀ ရက် ၁၉၈၈
ဒီနေ့မှာ..ရေနံမြေအလုပ်သမားတွေက..သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုစွန့်ခွာပြီး..ကျောင်းသားသမဂ္ဂရှိရာသပိတ် စခမ်းကိုချီတက်လာကြတယ်..ပြီးတော့..ရေနံမြေအလုပ်သမားသမဂ္ဂဆိုတာကိုရေနံမြေအလုပ်သမားအများစု ထောက်ခံမူ့နဲ့ဖွဲ့လိုက်ကြတယ်..ဥက္ကဌက..ဦးခင်ဝင်း ( ယခု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မြို့နယ် ဥက္ကဌ ) အတွင်းရေးမူးကဦးချစ်ညီညီ(လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီ)….ရေနံမြေအလုပ်သမားတပ်ကြီးချီတက်လာတော့..မြို့နေလူထုကသောင်းသောင်းဖျဖျကြိုဆိုကြတဲ့မြင်ကွင်းကိုအခုထိသတိရနေဆဲပါ..တခါ…ပွင့်ဖြူ ၊စလင်း နယ်ဘက်က လယ်သမားတွေ နဲ့ ရေနံချောင်းပတ်လည်ရွာတွေက လယ်သမားတွေလည်းချီတက်လာမဲ့ဆိုတဲ့…သတင်းတွေကိုလည်းရထားတယ်…တချို့ရွာတွေကလယ်သမား တွေ..မော်တော်တွေနဲ့တက်လာပြီတဲ့…ဒါနဲ့..ကျနော်တို့လည်းသူတို့လာချိန်နဲ့တိုက်ပြီးမှ..စီတန်းလှည့်လည် ဆန္ဒပြပွဲကိုထွက်ဘို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်…. မနက် ( ၉ ) ရီမှာစတင်ပြီး သပိတ်ဆန္ဒပြစစ်ကြောင်းကို စခမ်းထဲကနေစတင်ထွက်ခွာလိုက်ကြတယ်…ဒီနေ့နေကလည်းအရင်နေ့ကထက်စာရင်နည်းနည်းပြင်းသလားမသိဘူး..လူတွေကြည့်လိုက်ရင်ချွှေးသံတရွဲရွဲနဲ့..ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမောရပမ်းရကောင်းမှန်းမသိ..မြင့်ငွေဆိုရင်..ရှေ့ကကြွေးကြော်သံတိုင်ရလွန်းလို့အသံတွေဝင်ပြီးထွက်တောင်မထွက်တော့ဘူး…မြို့လည်ဈေးတနေရာရောက် တော့..ကျနော်စီးလာတဲ့ဘိနပ်ကပြတ်သွားတယ်..အဲဒါကိုသပိတ်တပ်ဦးမှာအလံကိုင်လာတဲ့..ကျောင်းသား..သူ့နံမည်ကသန်းဇော်ဦးတဲ့..ရေနံချောင်းကောလ်ိပ်မှာတက်နေတာ..သူကချက်ခြင်းသူ့ဘိနပ်ကိုချွှတ်ပြီးကျနော့်ကိုထိုးပေးတော့ကျနော်ကငြင်းတယ်…ဒါပေမဲ့မရဘူးသူကဇွတ်အတင်းထိုးပေးတာနဲ့..ကျနော်လည်းအားနာပြီးယူစီးလိုက်မိတယ်..ဒါနဲ့…ကျနော်က
“ ညီလေး မင်းခြေထောက်တွေပူမှာပေါ့…နေကပူတယ်ကွ ”ဆိုတော့
“ရပါတယ်အကိုရာ..နေပူတာ..နေ၀င်းပူတာလောက်မဆိုးသေးပါဘူးတဲ့”ဒီစကားလေးကကျနော့်ရင်ထဲစိမ့်ကနဲ ၀င်သွားတယ်…နေ၀င်းဆိုတာအဲဒီအခါကမြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီရဲ့ဥက္ကဌကြီးနိုင်ငံအကြီးအကဲ ဦးနေ၀င်းကိုပြောတာ…ဒါပေမဲ့ အဲဒီအချိန်မှာသူကအနားယူသွားပြီး ဦးစိန်လွင် ( ဗိုလ်မူးချုပ်စိန်လွင် ) ကို ပါတီ ဥက္ကဌ ရာထူးရော ၊ ကောင်စီ ဥက္ကဌရာထူးရောလွှဲပေးထားခဲ့ပြီး နောက်ကွယ်ကနေကြိုးကိုင်တယ်….ဒီလိုနဲ့ လမ်းခွဲတနေရာကိုရောက်တော့စောစောကပြောခဲ့တဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေက..ဆီးစောင့်နေကြတယ်.. နည်းတဲ့အင်အားလားတော်တော်များတယ်…ကျနော်တို့လည်းတော်တော်လေးဝမ်းသာကြတယ်…တောင်သူ လယ်သမားဦးကြီးတွေကနဲ့ကျနော်တို့ပွေ့ဖက်နှုတ်ဆက်ပြီး..သပိတ်စစ်ကြောင်းကိုဆက်ချီတက်လာတော့…… ရှေ့ကလွှတ်ထားတဲ့ ကင်းထောက်လူငယ်တွေက အပြေးအလွှားသတင်းတွေလာပို့ကြတယ်…..ရှေ့မှာ ရဲတွေ သေနပ်တွေနဲ့လမ်းပိတ်ပြီးအဆင်သင့်နေရာယူစောင့်နေကြပြီတဲ့…..ကျနော်တို့အားလုံးဘာဆက်လုပ်ကြမလည်း ဆုံးဖြတ်ရတော့မယ်…ခေါင်းဆောင်တွေစုစည်းပြီးချက်ခြင်းဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်…ရှေ့ဆက်တက်ဘို့ ( ဒီဆုံးဖြတ် ချက်ဟာမှားတယ်လို့မဆိုနိုင်ပေမဲ့မမှန်ခဲ့တာတော့သေချာပါတယ်)..အားလုံးကသွေးဆူနေကြတာမဟုတ်လား..တရွေ့ရွေ့နဲ့သပိတ်တပ်ကြီးက မိုးလုံးညံကြွေးကျော်သံတွေနဲ့ချီတက်လာရာကနေ…မြို့နယ်ကောင်စီရုံရှေ့မှာ ရဲတွေကလမ်းကိုကန့်လန့်ပိတ်ပြီးသေနပ်တွေနဲ့ချိန်ထားတယ်….နောက်မှာလည်းသံဆူးကြိုးအထပ်ထပ်ကာလို့…ရှေ့ဆက်တက်မလာဘို့ကိုလော်စပီကာနဲ့အော်တယ်….ကျနော်ကသပိတ်တပ်ဦးမှာရှိနေတော့..အလံကိုင်အဖွဲ့ကိုခနရပ်တန့်ကြည့်ဘို့ပြောလိုက်တယ်…ဆဲသံဆိုသံအော်သံတွေနဲ့ဆူညံနေတော့..ဟိုဘက်ကလော်စပီကာနဲ့ အော်နေတာ..သဲသဲကွဲကွဲမကြားရဘူး…တချက်တချက်ကြားရတာက…အခုပုဒ်မ၁၄၄ထုတ်ထားကြောင်း ( ပုဒ်မ ၁၄၄ ဆိုတာ- ည၆နာရီကနေမနက်၆နာရီပြင်ပကိုထွက်ခွင့်မပြု ၊ လူငါးဦးထက်ပိုမစုဝေးရ ဆိုတဲ့ ဥပဒေပါ ) နောက်ကြွေးကျော်သံတွေသံပြိုင်တိုင်တယ်….ပထမမိုးပေါ်ထောင်ပစ်တဲ့သေနပ်သံတွေထွက်လာတယ်…နောက်တော့လူအုပ်ကြီးရှိနေတဲ့အနီးနားကတမာပင်ကိုင်းတွေကိုလှမ်းပစ်ပြီးချောက်လှန့်တယ်…လူအုပ်ကြီးဘက်က လည်းပါလာတဲ့လောက်လေးဂွတွေ..ဂျင်ကလိတွေနဲ့ဝိုင်းပစ်ကြတယ်…ဒါပေမဲ့နည်းနည်းအလှမ်းဝေးနေတော့မ ရောက်နိုင်ပါဘူး..အပေါ်ကသစ်ကိုင်းတွေ..သေနပ်မှန်ပြီး…တဖျောင်းဖျောင်းကျလာတာမနည်းရှောင်လိုက် ရတယ်….ရှေ့ဆုံးကအလံကိုင်သပိတ်တပ်ဦးက..ရှေ့ဆက်တက်ဘို့ရုန်းထနေတော့..သေနပ်သံတွေအဆက် မပြတ်ထွက်လာပြီးကျည်ဆံတွေတရွှီရွှီပြေးနေတယ်လို့တောင်ထင်ရတယ်…အားလုံးကရုန်းရင်းဆန်ခပ်ဖြစ်နေပြီ..…တဘက်ကလည်း အဆက်မပြတ်ပစ်နေပြီ…ရုတ်တရက်..ကျနော့်ဘေးနားမှာ အလံကိုင်နေတဲ့ စောစောက ကျနော်တင်ပြခဲ့တဲ့..ကျောင်းသား..သေနပ်မှန်သွားတယ်..ရင်အုံလောက်မှာဖြစ်မယ်ထင်တယ်…သွေးတွေဖျာကနဲထွက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်…အလံကိုင်ထားရက်ကကတ္တရာလမ်းမပေါ်ကိုမှောက်ရက်ကျသွားတယ်.. ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရပြီး..ကျနော့်လည်းပူထူသွားတယ်..ဘေးမှာလူထုကကျနော့်ကိုချက်ခြင်းဝိုင်းလိုက်ပြီး..လှဲချ..အပေါ်ကနေအုပ်ထားတယ်..ပြီးတော့.သေနပ်သံယာယီအစဲလောက်မှာ..ကျနော့်ကိုဆွဲထူပြီးအပြေးအလွှား ခေါ်သွားတော့တာပဲ…ကျည်ကွယ်ရာကုန်းကမူတခုကိုရောက်တော့မှအပေါ်စီးကနေလှမ်းကြည့်နေတော့….လမ်းမပေါ်မှာလဲကျနေတာ..လေးဦးလောက်ရှိမယ်…အလံကိုင်ကျောင်းသားသန်းဇော်ဦးကတော့ချက်ခြင်း..ကျဆုံး သွားတယ်..ရဲတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေရောက်လာပြီး..သူ့အလောင်းနားရောက်တော့..ရဲတယောက်က ဘိနပ်နဲ့မျက်နှာကိုဆွဲလှန်လိုက်တယ်…ကျန်တဲ့သူတွေက..ကျန်တဲ့အလောင်းတွေလိုက်ကောက်နေတယ်…
အဲဒီနေ့ကမြင်ကွင်းကိုတော့ကျနော့်တသက်မှာဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်ပါဘူး..ကျနော့်ဘ၀မှာငိုကြွေးတယ်ဆိုတာအလွန်မှရှားပါးပါတယ်…ကျနော်သာမကအားလုံးသာလူထုတော်တော်များများဝမ်းနည်းပက်လက်ငိုကြွေးမိကြတယ်..တကယ်တော့ဒီမျက်ရည်တွေဟာခံပြင်းနာကျဉ်းလို့ကျလာတဲ့မျက်ရည်တွေသာလျှင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်…လူထုရဲ့စိတ်ဓါတ်ခွန်အားတွေကတော့မာသထက်မာကျောသွားပြီ..ဘယ်လိုနည်းနဲ့နှစ်သိမ့်မူ့ကိုမှလက်မခံ တော့ဘူး…ပိုပြီးတော့စုစည်းကျစ်လစ်လာကြတယ်…သပိတ်အမာခံစခမ်းကိုအသက်နဲ့လဲကာကွယ်ဘို့ဆုံးဖြတ် ကြတယ်…၁၀ရက်နေ့ကလေးဦ်းကျဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်…အဲဒီ့နောက်ပိုင်းမှာတော့..ချီတက်တန်းစီဆန္ဒပြပွဲကိုယာယီရပ်ဆိုင်းထားကြတယ်။
အဲဒီနေ့ညမှာပဲတခါ…သပိတ်စခမ်းကိုဝင်စီးဘို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့..ရဲတွေကိုပြည်သူလူထုကြီးက..မောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ တယ်..ညဘက်မှာထိပ်တိုက်တွေ့ကြတယ်…သူတို့ရဲတွေက..သပိတ်စခမ်းရှိရာလမ်းသွယ်ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့..လူထုက သူတို့ကို ၀ိုင်းပတ်ထားလိုက်ပြီ…ရဲတွေက နယ်မြေမကျွှမ်းကျင်ဘူး..ပြီးတော့အမှောင်ထဲမှာ…လူထုက တားတယ်..ရှေ့ဆက်တက်ရင်ခုခံမယ်ဆိုတာပြောတယ်..သူတို့ကမရဘူး..အထက်အမိန့်အရ..သပိတ်စခမ်းကို ၀င်သိမ်းမယ်ဆိုတာပြောတော့….မမြင်ရတဲ့အမှောင်ထဲကထွက်လာလိုက်တဲ့..သံလုံးထဲ့ပစ်တဲ့လောက်လေးဂွ တွေ၊ဂျင်ကလိတွေနဲ့ဝိုင်းအုံပစ်ကြတာ..ရဲတွေဒဏ်ရာရပြီး..ကစင့်ကလျားထွက်ပြေးကုန်ကြတယ်….သေနပ်နဲ့ တောင်ပြန်မပစ်နိုင်အားဘူး……အဲဒီ့နောက်ပိုင်းမှာ..သူတို့သပိတ်စခမ်းကိုလာမစီးရဲတော့ဘူး….(နောက်ပိုင်းမှသိရတာက..ဒီကိစ္စတွေအတွက် တိုင်းရဲမူးနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ပါတီ၊ကောင်စီတွေနဲ့ပြသနာတက်တယ် ၊ တိုင်းရဲမူးက ပြောတာ…အမုန်းခံရ၊အနာခံရတော့ကျုပ်တို့ရဲတွေ…ခင်ဗျားတို့ကပါတာမဟုတ်ဘူး..စားပွဲပေါ်ထိုင်ရာမပျက် အမိန့်ပေးနေတယ်…ကျုပ်တို့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့အာခံတယ်…)
နောက်ပိုင်းမှာကျနော်တို့ဆီကသတင်းမှားတွေသူတို့ရတယ်….ဘာလည်းဆိုတော့..ကျနော်ကျောင်း သားတွေလက်ထဲမှာလက်နှက်အချို့ရောက်နေပြီဆိုတာသူတို့ကြားမှာသတင်းကြီးသွားတယ်..ဒါ့ကြောင့်ဝင်မစီးရဲတော့တာလည်းပါတယ်…အမှန်ကကျနော်တို့လက်ထဲမှာလောက်လေးဂွ၊ဂျင်ကလိ၊လေးမြှားလိုလက်နှက်ကလွဲရင် ကျန်တာဘာမှမရှိဘူး…ဖြစ်တာက ဒီလိုပါ…ကျနော်တို့အဖွဲ့ထဲက မြင့်ငွေနဲ့ ၊ ကိုအေးမောင်မောင်ကြည် (ယခုရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးနဲ့ထောင်ကျနေသူ)ကညဘက်ရောက်ရင်..တယောက်တလှည့်လော်စပီကာနဲ့ အော်နေတာ…စကားဝှက်တွေလည်းပါတယ်…တခါဘာလုပ်သလည်းဆိုတော့…ကျနော်တို့ကို လူတစုက…ရိုင်ဖယ်ကျည်ဆံတွေလာပေးတယ်…အတောင့်၄၀လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်..အဲဒါတော့ရှိတယ်…ဒါနဲ့ဘာလုပ်လို့ရမှာလည်း…ဒီတော့….ဘာလုပ်သလည်းဆိုတော့..လေသေနပ်အလက်လေးလက်လောက်ရှာလာတယ်…လုပ်တဲ့သူတွေကလည်းပေါက်ပေါက်ရှာရှာလုပ်တတ်တယ်ဗျ….လေသေနပ်ပြောင်းတံထိပ်မှာ..စောစောကရိုင်ဖယ်ကျည်ကိုတိတ်စတွေနဲ့အသာကပ်ထားတယ်…ကျည်ဆံဖင်ကို..လေသေနပ်ကျည်ကရိုက်ထွက်တဲ့ သဘောပေါ့…(လေသေနပ်ကျည်ကကျည်ရိုက်တံလိုဖြစ်သွားတယ်)…ညလူခြေခပ်တိတ်တိတ်အချိန်ရောက်ပြီဆို မိုးပေါ်ထောင်ပစ်လိုက်တယ်…တကယ်သေနပ်ပစ်လိုက်တဲ့အတိုင်း ဟိန်းထွက်နေတာ…တလက်ပစ်ပြီးပြီဆို တခါ..တိတ်နဲ့ပြန်ကပ်ပေါ့…နောက်တခါ တချက်ပစ်လိုက်….လော်စပီကာနဲ့ကလည်းအော်သေးတာ…
“ ရဲဘောတို့ ကျည်တွေသိပ်မဖြုန်းပါနဲ့…တတောင့်ကို တယောက်မှန်အောင်ပစ်ပါ ”….
(နောက်မှပြန်သိရတာက..အဲဒီအချိန်မှာရဲစခမ်းအချုပ်ထဲမှာဆန္ဒပြပွဲကြောင့်ဖမ်းထားတာ…အယောက်၃၀ လောက်ရှိတယ်..သူတို့က ရဲစခမ်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့မြင်ကွင်းစုံကို အကုန်တွေ့နေရတယ်…ကျနော့်တို့ဆီက သေနပ်သံတွေထွက်လာပြီဆို..နေရာတွေယူ..အသင့်တွေပြင်..ပြာယာခပ်နေကြတာတဲ့….)
နောက်..လူထုဟောပြောကနေ..ကျနော်ကပြင်းပြင်းထံထံတောင်းဆိုချက်တခုကိုတောင်းဆိုလိုက်တယ်….ဖမ်းထားတဲ့သူတွေကိုချက်ခြင်းလွှတ်ပေးပါ..လွှတ်မပေးရင်..ရဲစခမ်းအပါဝင်…ပါတီကောင်စီရုံးတွေ…သက် ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေအိမ်တွေကိုအကုန်ဝင်စီးမယ်….မိရင်မိတဲ့သူ..အကုန်ရှင်းမယ်ဆိုခပ်တည်တည်ပဲကျေငြာလိုက်တယ်….ညဘက်ရောက်တော့…ကျနော်တို့ဆရာတွေဖြစ်တဲ့…ဆရာဦးသိန်းနဲ့…ဦးရဲမြင့်တို့နှစ်ဦးကို သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကအကူညီတောင်းပြီးကျောင်းသားတွေနဲ့စေ့စပ်ဆွေးနွေးလိုကြောင်းကိုကမ်းလှမ်းလာတယ်…ကျနော်တို့ဆီကလွှတ်လိုက်မဲ့..ကိုယ်စားလှယ်ကိုလည်း..လုံးဝဖမ်းဆီးခြင်း..အန္တယာယ်ပြုခြင်းမလုပ်မဲ့အကြောင်းကိုလည်းကတိက၀တ်တွေနဲ့မှာလိုက်တယ်…ကျနော်တို့ဘက်ကကျောင်းသားသမဂ္ဂ..တွဲဖက် အတွင်းရေးမူး(မကွေးကောလိပ်ကျောင်းသားကျော်စွာ)လိုက်သွားတယ်….အေးအေးဆေးဆေးပဲပြန်ရောက်လာပါတယ်….သူတို့ဘက်ကကျနော်တို့ကိုအကြမ်းမဖက်ဘို့ကတိပေးလာတယ်..ကျနော်တို့ကလည်းအကြမ်းမဖက်ဘို့ပြောတယ်..နောက်ဖမ်းထားတဲ့သူတွေကိုမနက်မှာပြန်လွှတ်ပေးမယ်ဆိုပြောတယ်…တွဲဖက်အတွင်းရေးမူးကလည်း
“အန်ကယ်တို့ဘက်ကကတိတည်ရင်..ကျနော်တို့ဘက်ကလည်းကတိတည်ပေးပါ့မယ်..ဒါပေမဲ့စောင့်ကြည့်လေ့လာဦးမယ်..သို့သော်သပိတ်လှန်ဘို့ကိစ္စမျိုးကိုတော့လုံးဝ..လုံးဝ လက်မခံပါ ”ဆိုပြောလာခဲ့တယ်….ပြောမယ်ဆို အဲဒီနေ့ညက..အပစ်အခပ်ရပ်စဲထားတယ်ပေါ့….
တနိုင်ငံလုံးမှာလည်းမြို့နယ်အသီးသီးရှစ်လေးလုံးသပိတ်တိုက်ပွဲကြီးကိုဆင်နွဲနေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထဲ မှာကြားနေရပြီ…ကျနော်တို့တိုက်ပွဲအရှိန်ကလည်းမြင့်သထက်မြင့်လာနေတယ်…ဒီလိုနဲ့…နောက်နေ့ရောက် တော့မြို့ထဲဈေးနှစ်ဈေးကဈေးသူဈေးသားတွေကစုပြီးကျောင်းသားသမဂ္ဂသပိတ်စခမ်းကိုရောက်လာကြတယ်…သူတို့က..ဈေးပိတ်ထားရတဲ့အတွက်များစွာနစ်နာနေတဲ့အကြောင်း၊ဈေးကိုပြန်ဖွင့်ခွင့်ရအောင်ကြိုးစားပေးဘို့အ ကြောင်းတွေတင်ပြလာတယ်....ကျနော်တို့ဘာလုပ်နိုင်မှာလည်း…ကျနော်တို့ကတော်လှန်ရေးလုပ်နေတာ..အာဏာပိုင်တွေလည်းမဟုတ်..ဒါပေမဲ့..ဟန်ကိုယ့်ဘို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကျနော်တို့ကြိုးစားပေးပါ့မယ်ဆိုပြောလိုက်ကြ တယ်…သူတို့ပြန်သွားတော့..ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေစုဝေးပြီးတို့ဘာလုပ်ကြမလည်း..ဒီကိစ္စဘယ်လိုလုပ်ရပါ့ လည်းပေါ့….ဒါနဲ့ကျနော်က …
“ငါ့အမြင်ကတော့..ဖြစ်လာတာမလာတာခနထား..အာဏာပိုင်တွေကိုသရော်ချင်တယ်ကွ…သရော်တယ်ဆိုတာလည်းတကယ်တော့အံတုခြင်းတမျိုးပဲ…ဘယ်လိုလည်းဆိုတော့ကွာ..ငါတို့ကအမိန့်ကျေငြာစာထုတ်မယ်…” ဆိုတော့..အားလုံးကဟာသ..သဘောမျိုး..သရော်တဲ့သဘောမျိုးထားပြီးချကွာ..လုပ်မယ်ကွာဆိုသဘောတူ ခဲ့ကြတယ်..ဒါနဲ့ ကျနော်တို့အမိန့်ကြေငြာစာကို လူထုသိအောင်ကျေငြာလိုက်ကြတယ်….
အမိန့်ကြေငြာချက်အမှတ် ၁ / ၈၈
ဒီကနေ့ ( +++++++++++) ရက်နေ့မှစပြီး..ရေနံချောင်းဈေးကြီးအား တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုလိုက်သည်။ ယခုအမိန့်သည် ဥပဒေကဲ့သို့တည်စေရမည်။
“မိန်းမငါထမင်းစားမယ်..ထမင်းခူးလိုက်ပါ…ပုံ..စိန်လွင်….လူတွေကဟာသလုပ်ကြတယ်..ဘာလို့ဒီလိုလုပ်ကြတာလည်းဆိုတော့..ငွေစက္ကူတွေသိမ်းလည်း ..ပုံ- စိန်လွင် ဆိုအမိန့်ထုတ်သိမ်း ၊ ဟိုဟာအာဏာပြချင် ၊ ဒီဟာပါဝါပြချင်လည်း..ပုံ.စိန်လွင်ဆိုအမိန့်ထုတ်နေတော့လူတွေစိတ်ထဲမှာနာကျဉ်မူ့တွေကိုဖောက်ခွဲဘို့..ဟာသလုပ်ပစ်လိုက်ကြတယ်..ဒါကိုကျနော်တို့ကတန်ပြန်သရော်ဘို့လုပ်လိုက်တာ..အကျိုးဆက်ကဘာဖြစ်လာသ လည်းဆိုတော့…ကျောင်းသားတွေက ဈေးဖွင့်ခိုင်းလိုက်ပြီ..ဖွင့်လို့ရပြီ ဆို ဈေးကြီးကိုစည်စည်ကားကားပြန်ဖွင့် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားကြတော့တယ်..ကျနော်တို့လည်းတော်တော်အံသြကုန်ကြတယ်..ဘာတွေဖြစ်ကုန်မှန်းကိုမသိတော့ဘူး….ဒီလိုနဲ့ကျနော်တို့ဆက်အကြံထုတ်တယ်….ဆက်အားစမ်းကြည့်ဦးမယ်ဆို ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အမိန့်ကျေငြာချက်ဆိုတာကို ၂ / ၈၈ နဲ့ထုတ်ပြီး ကျောင်းသားသမဂ္ဂပိုင်နက်ဆို နယ်မြေတွေသတ်မှတ်ပစ်လိုက်တယ်…အဲဒီထဲမှာဘာပါသလည်းဆိုတော့…ဒီနယ်မြေများအတွင်း သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များ ၊ ရဲများ ၊ ယင်းတို့မိသားစုဝင်များ ၊ ကူးလူးခြင်း သွားလာခြင်း ၊ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်း နေထိုင်ခြင်းခွင့်မပြု..တွေ့ရှိပါက ပြင်းထံစွာအရေးယူမည်ဆို ကျေငြာလိုက်တယ်…..
အဲဒီလိုကျေငြာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ထဲ…ရပ်ကွက်အသီးသီးကလူထုက သူတို့နယ်မြေတွေကို လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့…သက်ဆိုင်ရာ ပါတီ၊ကောင်စီတွေ၊ရဲတွေ၊မိသားစုဝင်တွေကို လုံးဝကိုဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်မပြုတော့ဘူး….အကျိုးဆက်ကဘာဖြစ်လာသလည်းဆိုတော့ သူတို့မှာဈေးဝယ်စားစရာဘာမှမရှိတော့ဘူး…အဲဒီ့ကျေငြာချက်ကို လက်ကမ်းစာစောင်တွေနဲ့ပါဝေတော့..စာရိုက်တဲ့သူက ၂ / ၈၈ မှာ မျဉ်းစောင်းက ပါမလာဘူး …လူထုကဘယ်လိုကောက်ချက်ဆွဲကြသလည်းဆိုတော့..အစိုးရက ပိုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်တာလူထုက မလိုက်နာဘူး..ကျောင်းသားတွေက ကျေငြာချက် ၂၈၈ ထုတ်တာ..အကုန်လိုက်နာကြတယ်ဆို..ပြောဆိုနေကြတာ..ကျနော်တို့တောင်သူတို့ပြောမှသဘောပေါက်တယ်
နောက်ရက်မှာ ဖမ်းထားတဲ့သူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်…ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးက အစည်းပြေနေပြီ…အစိုးရအာဏာက မသက်ရောက်တော့ဘူး…ဒါပေမဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ သြဇာလွှမ်းမိုးနေတာတော့ထူးထူးခြားခြားတွေ့နေရတယ်…မဆလ ပါတီ၊ကောင်စီတွေကလည်းသူတို့ရုံးထဲကတောင်အပြင်မထွက်ရဲကြဘူး..ရဲလုံခြုံရေးနဲ့နေနေရတယ်…ဖြစ်ပျက် လာတဲ့ ကိစ္စအ၀၀ကိုကျောင်းသားသမဂ္ဂ ကတာဝန်ယူဖြေရှင်းနေရတယ်…အတွင်းရေးမှုးက စည်ပင်ကိုကိုင်တွယ်၊ ကျနော်က အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာတာဝန်ယူ စသဖြင့်တာဝန်တွေအသီးသီးခွဲဝေပြီးလုပ်နေချိန်မှာ…..သမ္မတ ဦးစိန်လွင် ရာထူးမှနှုတ်ထွက်လိုက်ရပြီး ဒေါက်တာမောင်မောင် တက်လာတယ်…မာရှယ်လောရုတ်သိမ်းပေးလိုက်ပြီး..ဒေါက်တာမောင်မောင်က လူထုကိုလေပြေလေးနဲ့ စည်းရုံးတယ် ဒါပေမဲ့..မရတော့ဘူး လူထုကအရှိန်ကောင်းနေပြီ ထိန်းလို့မရတော့ဘူး မြို့က သက်ဆိုင်ရာ ပါတီ ကောင်စီတွေအကုန်လုံးနီးပါး ရှောင်ပြေးကုန်ကြတယ်..ဒေါသထွက်နေတဲ့လူထုက သီးမခံနိုင်တော့..သူတို့အိမ်တွေဝင်ဖျက်စီးဘို့လုပ်ကြတယ်…သတင်းရချိန်မှာတော့ ကျနော်တို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေ အချိန်မှီတားစီးနိုင်လိုက်ကြတယ်..မဖျက်စီးဘို့တောင်းပန်တယ်…ဒါပေမဲ့ သူတို့ အိမ်ထဲက ပစ္စည်းတွေကိုတော့ သိမ်းဆည်းခွင့်ပေးလိုက်တယ် ဒါတွေအကုန်လုံးကို သပိတ်စခမ်းမှာလေလံတင်ရောင်းချပစ်လိုက်ကြတယ်…ရလာတဲ့ငွေကြေးတွေကို သေဆုံးသူမိသားစုဝင်တွေသွားထောက်ပံ့ကြတယ်။
မဆလ ပါတီ၊ကောင်စီခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေထွက်ပြေးကုန်တော့…ဒေသကိုအုပ်ချုပ်ဘို့တာဝန်က ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းပေါ်ကျလာတယ်လေ…သူတို့အားလုံးလည်းထွက်ပြေးကုန်တော့…ရဲတွေက ကျနော်တို့နဲ့လာပေါင်းတယ်….ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြိုဆိုပါတယ်…ရဲတွေ ဆန္ဒပြပွဲကိုဝင်ရောက်လာတုန်းကဆိုရင် အားလုံးက ကြောက်နေကြတာ..ကျောင်းသားတွေက သူတို့ကိုဝန်းရံပေးထားတော့..အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ…အဲဒီနေ့မှာပဲ..ရဲမြို့နယ်မှုးနဲ့ ကျနော်နဲ့တွေ့တယ်… “ညီလေးတို့…အခုသက်ဆိုင်ရာ..အာဏာပိုင်တွေဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူး…အုပ်ချုပ်ရေးယန္တယားတာဝန်တွေက ..အကိုတို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့..ကျောင်းသားသမဂ္ဂပေါ်မှာကျရောက်နေပြီ…ဒီတော့တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရအောင် ”
“ ကျနော်တို့က..ကျောင်းသားတွေပါ မြို့နယ်မှုးကြီး…တကယ်တော့ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာ နားလည်မလည်ပါဘူး ကျွှမ်းလည်းမကျွှမ်းကျင်ပါဘူး လိုအပ်တာရှိရင်..ကျနော်တို့ကို အကြံပေးပါ ” အားလုံးကလည်းသဘောတူကြတယ်…တခါမြို့နယ်မှုးက ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကို ရဲလုံခြုံရေးပေးမဲ့အစီအစဉ်ကိုတော့လက်မခံခဲ့ဘူး…ဒါပေမဲ့..သူက ကျနော့်ကို လုံခြုံရေးအရအရေးကြီးကြောင်း စသဖြင့်အရှည်ကြီးရှင်းပြပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကာကွယ်ဘို့ဆို ခြောက်လုံးပြူးသေနပ်တလက်ထုတ်ပေးတယ်…ခက်တာက ကျနော်က သေနပ်ဆိုတာ ကိုင်တောင်မကိုင်ဘူးဖူး ပစ်လည်းမပစ်တတ်ဘူး ဟန်ကိုယ့်ဘို့အနေနဲ့ အဲဒီ သေနပ်ကိုတော့ယူထားလိုက်တယ် ( ကျနော်ထောင်ကျတဲ့အထဲမှာ အဲဒီ့အမှု့က နှစ်နှစ်ပါတယ် - အဲဒီ့မြို့နယ်မှုး အလုပ်ပြုတ်သွားတယ် )။
တကယ်တော့ အာဏာရှင်များဟာ အကွက်ကျကျယုတ်မာလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်…အုပ်ချုပ်ရေးယန္တယားကြီးပြိုသွားအောင်လုပ်တယ်…ကျောင်းသားတွေဆိုတာ အုပ်ချုပ်ရေး ကျွှမ်းကျင်ကြတာမဟုတ်..မတန်တဆတာဝန်တွေက မထမ်းချင်လည်း ထမ်း ..ထမ်းချင်လည်းထမ်းဖြစ်လာတော့တယ်…အဲဒီတော့ ကျနော့်ကို သတင်းစာတွေ စာစောင်တွေထဲကနေဝေဖန်ကြတော့တယ် ( ကာလတခုမှာ စာပေလွတ်လပ်ခွင့်တော်တော်ရလိုက်ပါတယ်) ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဥက္ကဌ ပုလိပ်ထဲဝင်သွားခြင်း ဆိုပြီး ---ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်တယ်ဗျ ကျနော့်မှာကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ နိုင်ငံရေးကပျောက်သွားပြီး လူဆိုးသူခိုး ဆူပူမှု့တွေနှိမ်နင်းရတဲ့ အလုပ်တွေလိုက်လုပ်နေရတယ် ( တခုတော့ရှိတယ်..အခုအသက်အရွယ်ရောက်လာမှ ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီးပြောသွားသလိုပဲ အာဏာနဲ့ငွေဟာ လူတွေနဲ့သိပ်မတဲ့ဘူးဆိုတာ သဘောပေါက်လာတယ် ) လက်နှက်ကိုင်ပြီး ပါဝါပြနေရတာ…နည်းနည်းသဘောကျနေသလိုပဲ ..စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ အသက်နှစ်ဆယ်ကျော်အရွယ်မှာ ရင်ခုန်တတ်တာ ဓမ္မတာပဲလေ အဲဒီကာလမှာ မိန်းမချောလေးတွေဆိုတာ ၀ိုင်းရံနေကြတာ ကိုယ်ဘယ်ကိုသွားချင်လည်း မော်တော်ကားဆိုတာ အသင့် ဘာစားချင်လည်း အလကား ( ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကာလက စိတ်အစဉ်ကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်မယ်ဆို အာဏာကို ယစ်မှုးခဲ့မိတာအမှန်ပဲ )
ရေနံမြေကြီးတခုလုံးကလည်း ကျောင်းသားသမဂ္ဂလက်ထဲမှာ အဲဒီတော့ဘာလုပ်သလည်းဆိုတော့ လက်နှက်စက်ရုံက အနားယူလာတဲ့ တပ်ထွက်ရဲဘော်ဟောင်းတွေက ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ လက်နှက်တွေလုပ်ကြတယ်….လက်လုပ်စိန်ပြောင်းတွေလုပ်တယ် ( သူတို့ကတော့ စိန်ပြောင်းလို့ပဲသုံးတယ် ကျနော် လက်နှက်အကြောင်းသိပ်နားမလည်ဘူး ) ပစ်လိုက်ရင်တော့ တဒိန်းဒိန်းနဲ့ ဟုတ်နေတာပဲ နောက်တခါ ရေနံမြေက လမ်းလျှောက်စကားပြောစက်တွေရလာတယ် လှမ်းလျှောက်စက်တကိုင်ကိုင်နဲ့သွားနေရတာကိုက ကျနော်တို့အားလုံးမှာ မြောက်နေကြတာ။ တနေ့တော့ ရပ်ကွက်တခုမှာ စကားများရန်ဖြစ်ပြီး မီးရှို့တာဖြစ်တယ်…ကျနော်တို့ဒေသက မီးဆိုအရမ်းကြောက်ကြတယ်လေ မီးဒဏ်ခနခဏခံခဲ့ရတာကိုး ကျောင်းသားသမဂ္ဂလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေက သွားတားတာ မရဘူး ဒါနဲ့ကျနော်လိုက်သွားတယ် ရဲမြို့နယ်မှုးကလည်း ကျနော့်ကိုလှမ်းအကြောင်းကြားပြီး ရဲတွေလွှတ်ပေးမဲ့အကြောင်းပြောတော့ ကျနော်ကလက်မခံခဲ့ဘူး သူ့ဆီက လက်နှက် ဆယ်လက်လောက်ကိုပဲ ခနဌားလိုက်တယ် ( ပြီးတော့ပြန်ပေးပါတယ် ) လုံခြုံရေးအဖွဲ့ထဲက ပစ်တပ်ခပ်တတ်တဲ့သူတွေကိုရွေးထုတ်ပြီး ခေါ်သွားတယ်၊ ဖြစ်တဲ့နေရာက ချိုင့်ထဲလိုနေရာမှာ ကျနော်က တောင်ကုန်းတခုပေါ်ကနေ မီးနဲ့ဆက်မရှို့ဘို့လော်စပီကာနဲ့အော်တော့မရဘူး မီးသတ်ကားကငြိမ်းဘို့ရောက်လာတာတောင် မီးသတ်ကားကိုခဲတွေ လောက်လေးဂွတွေနဲ့ပစ်လို့ ကားလည်းစုတ်ပြတ်သတ်သွားတယ် ၊ မရတော့ဘူး ဒါနဲ့ လက်လုပ် စိန်ပြောင်းနှစ်လက်ကိုထုတ်လာပြီး အပစ်ခိုင်းလိုက်တယ် လူတွေမှန်အောင်တော့မပစ်ပါဘူး ( သေနပ်နဲ့ဘာလို့မပစ်တာလည်းဆိုတော့ ကျည်ဆန်ကုန်မှာဆိုးလို့ လိုအပ်မှ ဘယ်လိုမှမရမှ ထုတ်သုံးမယ်ဆို ဆုံးဖြတ်ထားတာ ) ညအမှောင်ထု ရဲ့တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အချိန်မှာ တဒုန်းဒုန်းနဲ့ဆိုတော့မြို့လူထုကလည်းကြောက်ကြတာပေါ့……ကျနော်ဒီအလုပ်တွေမလုပ်ချင်ဘူး ဒါပေမဲ့မတတ်နိုင်ဘူးလုပ်ရတော့တယ် ဒီကြားထဲမှာ အကျဉ်းထောင်တွေထဲက အကျဉ်းသားတွေကိုထောင်ဖွင့်လွှတ်ပေးလိုက်တော့ အုပ်ချုပ်ရေးက ပိုဆိုးကုန်တယ် ကျနော်တို့ဒေသမှာတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တတ်နိုင်သလောက်နိုင်အောင်ထိန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ် ၊
သံဝေဂရစရာတခုက မြို့ရဲစခမ်းအချုပ်ထဲက အချုပ်သား တရာကျော်လောက်က လွှတ်ပေးဘို့ဆန္ဒပြပါလေရော ရဲမြို့နယ်မှုးက ကျနော့်ကိုလှမ်းခေါ်လို့သွားတော့ သူတို့ကရှင်းပြတယ် အချုပ်က ထမင်းကို တနေ့ တနပ်ပဲကျွှေးနိုင်တော့တယ်…စားစရာရိက္ခာ အထောက်အပံ့က မလုံလောက်တော့ဘူး ဒါနဲ့ အဲဒီညနဲ့ မနက်အတွက် သပိတ်စခမ်းကနေ ထမင်းတွေပို့ပေးလိုက်ရတယ် နောက်နေ့မနက်မှာ လာလွှတ်ပေးမယ် ကတိပေးလိုက်လို့ ထွက်လာလိုက်တဲ့ အချုပ်သားတွေအသံက တမြို့လုံးကကိုကြားနေရတာ……
နောက်နေ့မနက်ရောက်တော့ အချုပ်သားတွေကိုလွှတ်ပေးဘို့ သွားတယ် တရားရုံးတခုကအခန်းထဲမှာရော အပြင်မှာရောအားလုံးကိုထိုင်ခိုင်းလိုက်ပြီး သြ၀ါဒတွေချွှေရတာပေါ့လေ ဥပဒေအရာရှိ ( နောင်တရားသူကြီး )ရော ရဲမြို့နယ်မှုးရောပါတယ်…ကျနော့်အလှည့်ရောက်တော့
“ ခင်ဗျားတို့ကို ကျောင်းသားသမဂ္ဂတာဝန်ရှိသူများရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လွှတ်ပေးမယ်..ဒါပေမဲ့ ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးကိုတော့ပျက်ပြားအောင်မလုပ်ပါနဲ့ ပျက်ပြားအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ကိုထိန်းသိမ်းထားစရာနေရာမရှိဘူး…သဘောပေါက်လား ”
“ ကျနော်တို့ ကတိပေးပါတယ် ကျနော်တို့ကျောင်းသားတွေအနှောက်ယှက်ဖြစ်အောင်မလုပ်ပါဘူး ” အားလုံးကို ကျနော်တို့လွှတ်ပေးလိုက်တယ် ။ ( အဲဒီ့အချိန်ကပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကို ပြန်သတိရတိုင်း အရမ်းရှက်မိတာအမှန်ပါ …ကျနော် အသက်နှစ်ဆယ်ကျော်အရွယ်မှာ အာဏာသုံးပြီး မောက်မောက်မာမာပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကို အခု စစ်အာဏာရှင်များက အသက် ငါးဆယ် ခြောက်ဆယ်ကျော်အရွယ်တွေမှာပြောပြောနေတော့ စဉ်းစားမိတယ် အော် ငါက အသက်နှစ်ဆယ်ကျော်အရွယ်မှာပြောခဲ့တာ..သူတို့က ဒီအသက်အရွယ်မှာဆိုတော့ သူတို့အတွေးအခေါ်ဆင်ခြင်တုံတရားက အသက်နှစ်ဆယ်ကျော် လူငယ်တယောက်လောက်ပါပဲလားဆိုတာ စဉ်းစားမိတယ် ) သံဝေဂ ရစရာဆိုတာကတော့ ကျနော့်ကိုထောင်ချတဲ့အခါ အဲဒီ့ရုံးခန်းအတွင်းမှာပဲ..တရားသူကြီးက ကျနော်ထိုင်ခဲ့တဲ့ထိုင်ခုံပေါ်မှာထိုင်ပြီး ကျနော့်ကိုထောင်ချခဲ့တာပါ။
တကယ်တော့ အသက်နှစ်ဆယ်ကျော်အရွယ်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ ဒေသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးကိုကိုင်တွယ်ဘို့ဆိုတာ အတော်မလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စပါ….ကျနော်တို့မှာဘာအတွေ့အကြုံမှလည်းမရှိ…ဘာပညာရပ်မှလည်းမရှိ တော်တော့်ကို ကသောင်းကနင်းနိုင်လှပါတယ် လူထုခမျာလည်း အားကိုးစရာ အခြားမရှိလေတော့ အိမ်မှာ ဒန်အိုး ဒန်ခွက်ပျောက်တာက အစ ကျောင်းသားသမဂ္ဂကိုလာတိုင်တန်းကြတယ် တတ်နိုင်သလောက်လည်း လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်များက ရှင်းပေးကြပါတယ် ။ ဒီလိုနဲ့ အတတ်ပညာရှင်များကလည်း တတ်သည့်ပညာမနေသာဆိုသလို လွတ်လပ်သွားတဲ့ကာလလေးတခုမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် တီထွင်ကြတယ် ရေဒီယိုပညာရှင် ဆရာဦးသန်းစိန် က အသံလွှင့်ဌာန အသေးစားလေးတခုကို ထူထောင်တယ် သိပ်အဝေးကြီးတော့မရပါဘူး မိုင် ၂၀ ပတ်လည်လောက်တော့ရတာပေါ့လေ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ကအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရပ်တွေ ကျေငြာချက်တွေကို အရင်လို လောစပီကာကြီးတွေနဲ့လိုက်အော်စရာမလိုတော့ဘူး အသံလွှင့်ဌာနကနေ ကျေငြာလိုက်ယုံပဲ ဟန်တော့ကျတယ်……..
ကျနော်ဆို နေ့ဘက်မှာ တာဝန်တွေထမ်းဆောင်လိုက် ညဘက်ဆို အားဆေးပုလင်းချိတ်ပြီးနေ့စဉ် နီးပါးလောက် ဆေးသွင်းနေရတယ် တခါတလေ အရေးပေါ်လာရင် သွင်းလက်စ အားဆေးပုလင်းကို ဇွတ်ဖြုတ်ခိုင်းပြီး ပြေးရတော့တာပဲ ….ဒီကြားထဲ ဦးနု က အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့လိုက်တော့ ကျနော်တို့ကဘာလုပ်ရမှန်းလည်းမသိဘူး…တယောက်ကလာပြောတယ် ထောက်ခံလိုက် ဒါအရေးကြီးတယ် အားလုံးဝိုင်းထောက်ခံကြပါဆိုတော့ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနကနေ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အာဘော်ကိုထုတ်လွှင့်လိုက်တယ်…နောက်မကြာဘူး နောက်တဖွဲ့က ဒါ ထောက်ခံရမဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ဘူး ပွဲလန့်တုန်းဖျာဝင်ခင်းတာ မင်းတို့ထောက်ခံလိုက်ရင် တိုင်းပြည်ဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်သလည်းဆိုတော့ စောစောက ထောက်ခံချက်ကိုပြန်ရုတ်သိမ်းရ (ဘာတွေဖြစ်လို့ဖြစ်ကုန်မှန်းကိုမသိတော့)
ဒီလိုနဲ့ ကျနော်နဲ့ ကျောင်းသားအချို့ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂနဲ့သွားတွေ့အပြီး အပြန် ညနေခင်းလောက်မှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းဆိုးကိုကြားလိုက်ရတယ် ရေဒီယိုကလည်း စစ်သီချင်းတွေ အဆက်မပြတ်လွှင့် ကျေငြာချက်တွေ အဆက်မပြတ်ကြေငြာနဲ့ အားလုံး လှုတ်လှုတ်ရွရွတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်…ဘာဆက်လုပ်ကြမလည်း ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေအားလုံးက ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ရှိတဲ့လက်နှက်တွေနဲ့ခံချမယ် ၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့မှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းအပြီး နောက်ရက် ၁၉ ရက်နေ့မှာ တမြို့လုံး ချီတက် ဆန္ဒပြတယ် ကျနော်တို့ စစ်တပ်ကို ခံချမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်း လူထုကို အသိပေးလိုက်တယ် မြို့လူထုက ထိပ်လန့်နေကြပြီ
၁၉ ရက်နေ့ညမှာ ကျနော်တို့တတွေ မြို့တောင်ဖက်ဖျားက ကမ်းပါးနှစ်ခုကို ဆက်ထားတဲ့ တံတားကို ရေနံမြေက ယူလာတဲ့ ယမ်းတွေနဲ့ ကျွှမ်းကျင်သူများက မိုင်းတွေတပ်ဆင်ကြတယ် ရှိတဲ့လက်နှက်တွေနဲ့ ခံဆော်ကြမယ် ည ၁၁ နာရီလောက်ရောက်တော့ မြို့မိမြို့ဖ လူကြီးတွေရောက်လာကြပြီး မျက်ရည်စက်လက်နဲ့တောင်းပန်ကြတယ် ဒီလို မလုပ်ဘို့ ဒီလိုသာလုပ်မယ်ဆိုရင် မြို့နာလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြကြတယ် ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့အများစုက လက်မခံခဲ့ဘူး မနက် ၁ နာရီလောက်အရောက်မှာ ဗုန်းပေါက်ကွဲသံကြီးတခုက တော်တော်ကိုကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ကြားလိုက်ရပြီ ဘာပဲပြောပြော အားလုံးက ကြောက်ရွံ့ကုန်ကြတာတော့အမှန်ပါ ( အဲဒီ့ဖြစ်ရပ်က ကျနော်တို့ကိုကယ်သွားတာပါ တကယ်က စစ်တပ်ကလည်း ကျနော်တို့နဲ့ ၆မိုင်လောက်အကွာမှာရောက်နေပြီ ၊ ဗုန်းက ကျနော်တို့လည်းမဟုတ် စစ်တပ်ကလည်းမဟုတ် ကြားထဲက ထပေါက်ကွဲတာ ၊ ဗုန်းဆံအဟောင်းတလုံးကို လူတစုက ဖောက်ခွဲလိုက်တာ….စစ်တပ်ကလည်း ကျနော်တို့လို့ထင် ကျနော်တို့ကလည်း စစ်တပ်လို့ထင်နဲ့….မြို့ကိုသိမ်းမဲ့စစ်တပ်က ရှေ့ဆက်မတက်တော့ပဲ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်သွားတယ် ကျနော်တို့ကလည်း ဒီပုံဆို အခြေနေမကောင်းဘူးဆို ပြန်ဆုတ် တပ်ဖျောက်လိုက်ကြတော့တယ်
နောက်မနက်လင်းလို့ ၂၀ ရက်နေ့ရောက်ခါမှစစ်တပ်က ၀င်သိမ်းတယ် ကျနော်တို့အားလုံး ရှောင်တိမ်းပြီး ပုန်းအောင်းနေခဲ့ကြတယ်…..စစ်တပ်ကတော့ အပြီးတိုင် သပိတ်စခမ်းကို ၀င်သိမ်းလိုက်ပြီ ကျနော်တို့တော်တော်ဝမ်းနည်းခဲ့ကြတယ် ဘာတတ်နိုင်မှာလည်း ကျနော်တို့မှာ ပြန်လှန်တွန်းလှန်ဘို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်…..စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှု့မှာတော့ သေဆုံးမှု့မရှိခဲ့ဘူး။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၃ နှစ်က ပုံရိပ်တွေဟာ ကာလကြာခဲ့ပေမဲ့ အစဉ်မြဲ ထင်ဟပ်နေဆဲပါ…ကျနော်သေဆုံးသွားသည့်တိုင် ရှစ်ဆယ်ရှစ်ရဲ့သမိုင်းတခေတ်ဟာ ရင်ထဲမှာကျန်ရစ်နေဦးမလား……..။
ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က မကြာခဏဆိုသလို ပြောလေ့ရှိသည့် စကားတစ်ခွန်းကို မှတ်မိနေသည်။ သူက ရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးကို တဒီးဒီးသွားနေပြီး လေယာဉ်နှင့်ပဲ သွားလေ့ရှိတော့ ကိုယ်တို့က ကောင်းကင်ပေါ်ကပဲ သွားတယ်ဟူသော စကားဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ လေယာဉ်နှင့် ခရီးသွားရသည့် စရိတ်ခကကြီးလွန်းသဖြင့် ကိုယ်နှင့်တန်ရာတန်ရာ ကား၊မီးရထားကိုပဲ အားကိုး၍ သွားလာကြရသည်။
တစ်ရက်ကတော့ ကောင်းကင်ပေါ်က သွားရမည့်ခရီးစဉ်တစ်ခုပေါ်လာသည်။ သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီ မိနစ်၂၀ ထွက်မည့် လေယာဉ်ခရီးစဉ်ဖြင့် မန္တလေးကနေ ရန်ကုန်ကိုသွားရသည်။ လေယာဉ်လက်မှတ်ကို Hotel Mandalay ထဲတွင် ရောင်းချပေးသည့် SEVEN DIAMOND ကနေ အသွားအပြန် ၀ယ်လိုက်သည်။ သြဂုတ်လ၂၈ရက်နေ့ မန္တလေး-ရန်ကုန်၊ သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်နေ့ ရန်ကုန်-မန္တလေး ခရီးစဉ်ဖြစ်သည်။
ဟိုတယ်မန္တလေးမှာပဲရှိသည့် အငှားကားကို ငှားလိုက်သည်။ ကားတစ်စီးလုံးကို တစ်သောင်းရှစ်ထောင် အဲကွန်းပါလျှင် နှစ်သောင်းဟု ဆိုသည်။ မန္တလေးတွင် မိုးရွာနေတာကြောင့် အဲကွန်းမသုံးဘဲ တစ်သောင်းရှစ်ထောင်ပေးကာ ငှားလိုက်သည်။ လေယာဉ်က သတ်မှတ်ထားသည့် ၁၀း၂၀ နာရီတွင် အတိအကျထွက်သည်။ လေယာဉ်စီးရချိန် ၅၅ မိနစ်ကြာသည်။ မန္တလေးမြို့တွင်းကနေ တံတားဦးလေဆိပ်ထိ တစ်နာရီလောက်စီးရသည်။
မန္တလေးကနေ တံတားဦးလေဆိပ်ကို တစ်နာရီ၊ လေဆိပ်မှာ စောင့်ရတာက တစ်နာရီ၊ လေယာဉ်စီးရတာက ၅၅ မိနစ်၊ ရန်ကုန်လေဆိပ်ကနေ မြို့ထဲသွားတာက ၄၅ မိနစ် စုစုပေါင်း ၃ နာရီ မိနစ်၄၀ဖြင့် ရန်ကုန်က တည်းခိုမည့် စီးတီးစတား ဟိုတယ်ကို ရောက်သွားသည်။ သြဂုတ်လ၂၉ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၁နာရီတွင် ဆရာပါရဂူ၏ စာမူမူပိုင်ခွင့်ကော်မတီ အစည်းအဝေးရှိသဖြင့် ကော်မတီတွင်ပါသည့် ပန်းချီဦးမျိုးခင် (ထန်းရိပ်ညို) နှင့် အဖော်လိုက် သွားရခြင်းဖြစ်သည်။
သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်နေ့ လေယာဉ်ကွင်းချိန်းက ၇ နာရီဖြစ်ပြီး ၈ နာရီတွင် လေယာဉ်ထွက်မည်ဖြစ်သဖြင့် ဟိုတယ်က ငှားပေးသည့် အငှားကားဖြင့် နံနက် ၆နာရီတွင် ဟိုတယ်က ခွာခဲ့ကြသည်။ ရန်ကုန်မနက်ပိုင်းက လမ်းတွေရှင်းလင်းနေသဖြင့် လေဆိပ်ကိုနာရီဝက်နှင့် ရောက်သွားသည်။ နံနက် ၇ နာရီခွဲကျော်တော့ လေဆိပ်အတွင်းဘက်ထွက်ခွာရာဌာနကို ၀င်ခွင့်ရသည်။
လေဆိပ်ထဲရှိသည့် ကော်ဖီဆိုင်မှာပဲ နံနက်စာစားလိုက်ကြသည်။ ကောင်းကင်ပေါ်က ခရီးသွားရသည်မှာ အဆင်ပြေလှသည်။ သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ထွက်တော့ ကြာရှည်စောင့်ဆိုင်းစရာမလိုပေ။ ရာသီဥတုကောင်းလျှင် လေယာဉ်ခရီးက အဆင်ပြေစွာရောက်သွားရတာပဲဖြစ်သည်။ ယခင်ကတော့ ရန်ကုန်ထားဝယ်ခရီးစဉ်ကို လေယာဉ်ဖြင့် ခဏခဏသွားဖူးသည့် ဂျက်၊ ဖော်ကာ လေယာဉ်များဖြင့် သွားရသည်။
ယခုအခါမှာတော့ မြန်မာ့လေကြောင်းအပြင် ပုဂ္ဂလိကလေကြောင်းတစ်လိုင်းကနေ လေယာဉ်လက်မှတ်ကို အသွားအပြန် ၀ယ်ထားသဖြင့် လက်မှတ်ကိစ္စကတော့ အဆင်ပြေသည်။ ကောင်းကင်ပေါ်က ခရီးသွားရတာ အချိန်တွက်ဆ၍ ရလာသဖြင့် မန္တလေးတွင် စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲ တစ်ခုကို သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်နေ့မှာပင် ကျွန်တော်စီစဉ်ထားခဲ့သည်။ မိတ်ဆက်ပွဲကို ညနေ ၄ နာရီမှ စတင်မည်ဆိုတော့ နံနက် ၈ နာရီ လေယာဉ်နှင့် မန္တလေးကိုပြန်လာမည့် ကျွန်တော့်အတွက် အဆင်ပြေလေသည်။
လေယာဉ်သတ်မှတ်ထားသည့် အတိုင်းပင် နံနက် ၈ နာရီတွင် မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်ကနေ စတင်ထွက်ခွာလာသည်။ ရာသီဥတုကလည်း အသွားတုန်းကထက် ပိုကောင်းနေသည်။ ကောင်းကင်က ကြည်လင်နေသည်။ လေယာဉ်အောက်က လေထုကလည်း ကြည်လင်နေသည်။ ကျွန်တော်တို့ လိုက်ပါလာသည်။ ခရီးစဉ်အမှတ် ၀၁၁ ဂျက်လေယာဉ်သည် ကောင်းကင်တွင်လွတ်လပ် ပေါ့ပါးစွာပျံသန်းလျက်ရှိသည်။
လေယာဉ်ထွက်ခွာပြီး မိနစ် ၃၀ လောက်တွင် လေယာဉ်မယ်ကလေးတွေက မုန့်နှင့် လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီတွေ လိုက်ချပေးသည်။ အအေးသောက်လိုသူတွေကို အအေးလိုက်ချပေးသည်။ ကျွန်တော်တို့ခုံရှေ့က တင်စရာကလေးကိုချပြီး ဗန်းကလေးကို တင်လိုက်သည်။ မုန့်ဗန်းကလေးကို ဖောက်မည်ပြင်လိုက်စဉ် မုန့်ဗန်းကလေးက အောက်ကိုလျှောကျသွားသည်။ ပုံမှန်ပြေးနေသည့် လေယာဉ်မှာ အောက်ကိုဇောက်ထိုး ကျသွားခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ ခေါင်းပေါ်က ၀ုန်းခနဲအသံတွေကြားရပြီး အောက်ဆီဂျင်ရှူမည့် ပိုက်တွေပြုတ်ကျလာသည်။ အသက်ရှူကျပ်စပြုလာသည်။ ခေါင်းပေါ်က လေအေးဝင်နေသည့် အပေါက်ကလေးတွေက လေမ၀င်တော့ပေ။ လေယာဉ်ပေါ် ပါလာသည့် ခရီးသည်တွေအထိတ်တလန့် ဖြစ်သွားကြသည်။ လေယာဉ်မှူး၏ အသံပေါ်လာသည်။ လေယာဉ်တွင် လေဖိအား ပြဿနာပေါ်လာသဖြင့်မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်ကို ပြန်လည်ဆင်းသက်မည့်အကြောင်း စိုးရိမ်စရာမလိုကြောင်း ကြေညာသည်။
ကျွန်တော်တို့လည်း လေယာဉ်ထဲတွင်ပူလာပြီး အသက်ရှူရကျပ်သလိုဖြစ်လာသဖြင့် အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ကို လှည့်ယူပြီးတပ်လိုက်သည်။ အောက်ဆီဂျင်ပိုက်က ဘာမှမလာပေ။ လေယာဉ်မယ်ကလေးတွေကလည်း စိုးရိမ်စရာမရှိကြောင်း လိုက်ပြောနေရင်းက မျက်နှာတွေက စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ ပေါ်လွင်နေသည်။
တချို့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တွေက သုံး၍ရနေသဖြင့် နေရာရွှေ့ပြောင်းဖို့ပြောနေသည်။ လေယာဉ်ထဲတွင် အပူချိန်မြင့်တက်လာသည်။ နားတွေအူလာပြီး လက်နှင့်ပိတ်ထားရသည်။ နားဆို့ရသည့် ဂွမ်းလုံးကလေးတွေလည်း လေယာဉ်ပေါ်တွင် ပါမလာပေ။
"ရန်ကုန်ကို ပြန်မောင်းတယ်ဆိုတော့ မန္တလေးဆက်သွားတာက ပိုမနီးဘူးလား"
ခရီးသည်တစ်ဦးက လေယာဉ်မောင်ကို မေးလိုက်သည်။ နာရီဝက်မောင်းလာပြီးဖြစ်၍ နောက်ထပ် မိနစ် ၂၀ လောက် မောင်းလိုက်လျှင် တံတားဦး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ကို ရောက်လာပြီး ရန်ကုန်ကို ပြန်လှည့်တာက အနည်းဆုံးနာရီဝက် ကြာပေဦးမည်။
"အောက်ဆီဂျင်က ၁၅ မိနစ်ပဲရတယ်။ ရန်ကုန်ပြန်ဆင်းတာက ပိုအဆင်ပြေလို့ပါ"
"နေပြည်တော်နဲ့ နီးနေတာပဲ။ နီးတဲ့နေရာ ဆင်းလို့မရဘူးလား" လေယာဉ်မောင်က ဘာဆက်ပြောရမှန်း မသိဘဲ စိတ်ချပါ၊ အန္တရာယ်မရှိပါဘူးဟုသာ ပြောနေသည်။ လေယာဉ်မယ်ကလေး တစ်ယောက်ကကျတော့ ခရီးသည်တွေကို လေယာဉ်လေပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေကို ပြောနေသည်။
"ကေဗင်ထဲမှာအတွင်းက လေနဲ့အပြင်ကလေကို ဆက်သွယ်တည်ဆောက်ထားတဲ့ စစ္စတမ်ရှိပါတယ်။ အပြင်ကလေကိုယူပြီး အတွင်းဘက်မှာပြုပြင်သုံးတာပါ။ အမြင့်ပေ နှစ်သောင်းကျော်ရောက်နေတော့ အပြင်လေကရှူလို့ မရပါဘူး။ နောက် ၁၅ မိနစ်လောက်ဆိုရင် လေဆိပ်ကို ဆင်းနိုင်ပါမယ်"
လေယာဉ်မယ်ကလေးက ကိစ္စတွေကို ရှင်းပြနေသည်။ အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တွေက အလုပ်မလုပ်တာကိုလည်း ပိုက်တွေကို ဆွဲဆွဲဆောင့်နေသည်။ ဒီလိုမျိုးအောက်ဆီဂျင်ပိုက်တွေ အောက်ကိုပြုတ်ကျလာတာကို သူတို့လည်း မကြုံဖူးသေးကြောင်း ပြောနေသည်။ အလုပ်မလုပ်သည့် အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တွေကို ဆွဲဆွဲဆောင့်နေတာက ပိုက်သာပြုတ်ပြတ်ကုန်မည်၊ အောက်ဆီဂျင်ကထွက်မလာပေ။
တချို့ခရီးသည်တွေ လေတဖျပ်ဖျပ်ယပ်ခပ်နေရသည်။ တချို့က ရင်ဘတ်ကိုဖိနေပြီး၊ တချို့က နားပေါက်တွေကို လက်ဖြင့်ပိတ်နေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ ချွေးတွေပြန်လာသည်။ မွန်းကြပ်လာသည်။ အသက်ရှုမ၀သလိုဖြစ်သည့် ခရီးသည်တွေက အနီးဆုံးလေဆိပ်ကိုမဆင်းဘဲ ရန်ကုန်ပြန်နေတာကို ပြောနေကြသည်။
အပေါ်က လေအေးထွက်နေသည့် အပေါက်တွေက လေလုံးဝမ၀င်တော့ပေ။ လေယာဉ်ထဲတွင် လေနည်းနေပြီး အသက်ကိုလုရှူနေရသည်။ လူတွေက မျက်လုံးစုံမှိတ်ပြီး ပါးစပ်ကတတွတ်တွတ်ရွတ်နေကြသည်။ မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်ကိုဆင်းခါနီးကျတော့မှ လေပေါက်တွေကaန လေထွက်လာပြီး အသက်ရှူရတာပြန်ပြီး အဆင်ပြေလာသည်။ လေယာဉ်ပြေးလမ်းပေါ် လေယာဉ်ဆင်းလိုက်တော့မှ ခရီးသည်တွေလည်း ဟင်းချနိုင်ရတော့သည်။
လေဆိပ်ထွက်ခွာခရီးတွင် ကျွန်တော်တို့ ပြန်နားကြရသည်။ ပုဂ္ဂလိကလေကြောင်းလိုင်းကကျွေးသည့် လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီနှင့်မုန့်ကိုစားပြီး စောင့်ရသည်။ လေကြောင်းလိုင်းမှ ၀န်ထမ်းများက နောက်ထပ်တစ်နာရီခွဲလောက်စောင့် ရမည်ဟု လာပြောသည်။
"ဟုတ်ပါတယ်။ တစ်နာရီ လောက်ကြာမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်"
"ဒီလေယာဉ်ပြင်ပြီးတော့မှ ဒီလေယာဉ်နဲ့ ပြန်သွားရမှာလား"
ခရီးသည်တွေမှာထိုလေယာဉ်ဖြင့် ပြန်သွားရမှာကိုပင် လန့်နေကြပုံရသည်။ မန္တလေးထွက်မည့် လေယာဉ်ခရီးစဉ်တွေထဲက ဂိုးရှိုးလိုက်လို့ရမရ၊ လက်မှတ်လက်ကျန်ရှိ မရှိကို စုံစမ်းသူက စုံစမ်းသည်။ ၁၂ နာရီလောက်မှ လေယာဉ်ခရီးစဉ်က ရှိတော့သည်ဟု ဆိုသည်။ တချို့ကကျတော့လည်း ကားငှားပြီး သွားရင်ကောင်းမလားမသိဘူးဟု တိုင်ပင်နေကြသည်။
ခရီးသည်တွေက အကျိုးအကြောင်းသတင်းအတိအကျ သိချင်နေသည်။ ထိုပုဂ္ဂလိကပိုင် လေကြောင်းလိုင်းကတ်ပြားတွေ ဆွဲထားသည့် ၀န်ထမ်းတွေကို မေးနေကြသည်။ ၀န်ထမ်းတွေက တိတိကျကျ မသိတော့ ပြောရခက်နေသည်။ တချို့ကကျတော့လည်း ခရီးသည်မေးတာကို အဖြေပေးနေသည်။ သူတို့ပေးနေသည့် အဖြေတွေက သူတို့ထင်တာတွေ များနေတာကို တွေ့ရသည်။
လေဆိပ်တွင်တာဝန်ကျသည့် ထိုလေကြောင်းလိုင်းက ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်က ကျွန်တော်တို့စီးသည့် ဂျက်လေယာဉ်မှာ မနေ့ကမှ စင်ကာပူကနေ Check လုပ်ပြီး ပြန်လာသည့် လေယာဉ်ဟု ပြောနေသည်။ စင်ကာပူကနေ ရန်ကုန်ကိုလာပြီးမှ ရန်ကုန်ကနေ မန္တလေးပျံသန်းချိန်တွင် ဖြစ်တာက ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဟု မေးနေသည်။
ထားဝယ်-ကော့သောင်းခရီးစဉ်၊ ဟဲဟိုး-ပုဂံ-မန္တလေးခရီးစဉ်များသို့ လိုက်ပါစီးနင်းမည့် ခရီးသည်တွေ ၀င်လာသည်။ ထွက်ခွာခန်းမတွင် လူတွေပြည့်လာပြန်သည်။ ကျွန်တော်တို့လေယာဉ်က ခရီးသည်တွေက သူတို့အိမ်တွေကို ဖုန်းဆက်နေကြတော့ ထိုခရီးသည်များကို နောက်ဝင်လာသည့် ခရီးသည်တွေက စိတ်ဝင်စားသွားသည်။ မေးကြ၊ မြန်းကြ၊ စုပ်တသပ်သပ်ဖြစ်နေကြသည်။
"အာက်ဆီဂျင်ပိုက်တွေက အလုပ်မလုပ်တော့လူတွေကပိုပြီး ထိတ်လန့်သွားကြတာပေါ့။ အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ကို ဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာတော့ လေယာဉ်ထွက်တာနဲ့ သရုပ်ပြတာပဲ။ ဒါတွေ ကောင်းမကောင်းကျတော့ စစ်မထားကြဘူး လား။ နီးတဲ့လေဆိပ်ကို မဆင်းဘဲ ရန်ကုန်ကို မရောက်ရောက်အောင် ပြန်လာတာ။ ခရီးသည်တွေတစ်ခုခုဖြစ်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ဆိုပေမယ့် အသက်ရှူရတာ ကျပ်လာနေပြီလေ။ အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ကလည်း သုံးမရဘူး။ စိတ်ပူတာပေါ့။ ခုထိရင်ထဲ အောင့်တောင့်တောင့်ဖြစ်နေသေးတာ"
ခရီးသည်အမျိုသမီးက သူ့နံဘေးမှ အခြားလေယာဉ်စီးမည့် ခရီးသည်တွေကို ပြောပြတော့ ထိုခရီးသည်များကပါ ဘုရားတနေကြသည်။ မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ကျွန်တော်တို့ ခရီးသည်များကို နှစ်သုတ်ခွဲကာ ဖော်ကာလေယာဉ်ဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ မန္တလေးသို့ ချောမောစွာပြန်ရောက်တော့မှ ရင်မောပြေရတော့သည်။
အငှားကားတစ်စီးငှားပြီး မြို့ထဲဝင်တော့ ကားခက ကျပ် ၁၂၀၀၀ ပေးရသည်။ အသွားတုန်းက ကျပ် ၁၈၀၀၀ပေးခဲ့ရပြီး အပြန်ကျတော့ ၁၂၀၀၀ ပေးရလေရာ အငှားကားလိုင်းတွေကလည်း တောင်းချင်သလို တောင်းနေကြတာပါလားဟု သိရတော့သည်။
ကောင်းကင်ပေါ်က ခရီးသွားရတာ ကုန်ကျစရိတ်များပြီး သက်သောင့်သက်သာရှိပါသည်။ အချိန်ကိုလည်း ချုံ့၍ရပါသည်။ သို့သော်လည်း ကျွန်တော်တို့ခရီးသည်တွေအတွက် ဘယ်လောက်ယုံကြည် စိတ်ချရမလဲဆိုတာက စဉ်းစားစရာဖြစ်နေသည်။ တိကျသေချာသည့် သတင်းထုတ်ပြန် ဖြေရှင်းချက်မရှိသည်ကလည်း စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စရာပင်။ ကားကိုလမ်းဘေးထိုးဆိုက်ပြီး ဆင်းချသွားလို့ မရလေတော့ ကောင်းကင်ပေါ်က ခရီးသွားရခြင်း၏ စိတ်ချယုံကြည်ရမှုကို ယခုတစ်ခေါက်နှင့်ပင် ကျွန်တော်လန့်သွားရသည်။
5 Sep2011 Yeyintnge's diary
သန်း​ရွှေ အလွန် (၂)
Published on September 5, 2011 by မင်းလွင်
ပြီး​ခဲ့​တဲ့​မတ်လ ၃၀ ရက်​နေ့​မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး​မင်း​အောင်လှိုင်ဟာ မြန်မာ့​တပ်မ​တော်ရဲ့​ အမြင့်​ဆုံး​ဖြစ်တဲ့​ ကာကွယ်​ရေး​ဦး​စီး​ချုပ် ဖြစ်လာပါပြီ။ သူဟာ ၁၀ ဦး​မြောက် ကာကွယ်​ရေး​ ဦး​စီး​ချုပ်ပါ။ ဗိုလ်ချုပ်မှူး​ကြီး​သန်း​ရွှေ တရား​ဝင် ရာထူး​လွှဲ​ပြောင်း​ပေး​ပြီး​ ​နောက်ပိုင်း​မှာ ဦး​စီး​ချုပ်သစ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး​ မင်း​အောင်လှိုင်ဟာ တပ်မ​တော်မှာ အဖွဲ့​အစည်း​ပိုင်း​ကို သိသာမြင်သာတဲ့​ အ​ပြောင်း​အလဲ​တွေ စတင်လုပ်​ဆောင်​နေပြီလို့​ ပြည်တွင်း​ပြည်ပ စစ်​ရေး​အကဲခပ်​တွေက သုံး​သပ်ကြပါတယ်။
မြန်မာ့​တပ်မ​တော် ဖွဲ့​စည်း​ပုံစနစ်​တွေ ​ပြောင်း​လဲလာပုံကို ​လေ့​လာသူ​တွေရဲ့​ သုံး​သပ်ချက်​တွေနဲ့​ တင်ပြပါ့​မယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူး​ကြီး​သန်း​ရွှေ လက်ထက်တုန်း​က ရပ်နား​ထား​တဲ့​ တနိုင်ငံနဲ့​တနိုင်ငံ တပ်မ​တော်အချင်း​ချင်း​ ​လေ့​ကျင့်​ရေး​သင်တန်း​တွေကို ​စေလွှတ်တာ​တွေ ပြန်လည် စတင်လာပြီး​ စစ်ဆင်​ရေး​အတွက် အ​ရေး​ကြီး​တဲ့​ ဌာနအဖွဲ့​အစည်း​တချို့​ကိုလည်း​ ဖျက်သိမ်း​နေတယ်လို့​ သိရပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး​မင်း​အောင်လှိုင်ဟာ တပ်မ​တော်အကြီး​အကဲ ဖြစ်လာပြီး​ မကြာခင်မှာပဲ ကစထ (စစ်ဆင်​ရေး​အထူး​အဖွဲ့​မှူး​) ရာထူး​တွေ၊​ အ​ရေး​ကြီး​တဲ့​ စစ်တိုင်း​မှူး​တွေကို ထုတ်ပစ်တာ​တွေ၊​ ​နေရာအ​ပြောင်း​လဲတာ​တွေ လုပ်လာပါတယ်။
စစ်ရုံး​က ထိပ်ပိုင်း​ဗိုလ်ချုပ်​တွေကိုလည်း​ လာဘ်​ပေး​လာဘ်ယူမှု​တွေနဲ့​ ပတ်သက်ပြီး​ ​ခေါ်ယူစစ်​ဆေး​ ​မေး​မြန်း​နေတယ်လို့​လည်း​ သတင်း​တွေ ထွက်​ပေါ်​နေပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူး​ကြီး​သန်း​ရွှေ လက်ထက်​နောက်ပိုင်း​ တပ်မ​တော်ရဲ့​ ဖွဲ့​စည်း​ပုံနဲ့​ နည်း​စနစ် များ​များ​စား​စား​ ​ပြောင်း​လဲမသွား​ဘဲ စစ်ဆင်​ရေး​အထူး​အဖွဲ့​တွေပဲ ​ပြောင်း​လဲသွား​တယ်လို့​ ထိုင်း​-မြန်မာနယ်စပ်က စစ်​ရေး​အကဲခတ် ဦး​ကျော်ကိုက သုံး​သပ်​ပြောကြား​ပါတယ်။
“ဖွဲ့​စည်း​မှု ပုံသဏ္ဌာန်က​တော့​ အများ​ကြီး​ ​ပြောင်း​တာ​တော့​ မ​တွေ့​ဘူး​။ ဒါ​ပေမယ့်​ သူ့​ရဲ့​ စနစ်ပိုင်း​မှာ​တော့​ ​တော်​တော်​လေး​ကို ​ပြောင်း​သွား​ပုံရတယ်။ ဘာ​ကြောင့်​လဲဆို​တော့​ အရင်တုန်း​က​တော့​ ဗိုလ်ချုပ်သန်း​ရွှေတို့​ စသည်ဖြင့်​ ဒီလိုထိပ်ပိုင်း​ တဦး​နှစ်ဦး​လောက်မှာ အာဏာတည်ထား​ပြီး​တော့​ ​တော်​တော်များ​များ​ကို ဆုံး​ဖြတ်လုပ်ကိုင်​နေမှုက​နေ အခု​တော့​ သူတို့​ တစုံတရာ လွှဲသွား​တယ်။ ဒါမှမဟုတ် ​နောက်ဆုတ်သွား​တာ​ပေါ့​။ ဒီလို အသစ်ပြန်တက်လာတဲ့​ စစ်​ခေါင်း​ဆောင် အသစ်​တွေ ကြား​ထဲမှာ​တော့​ အုပ်ချုပ်မှုပိုင်း​ဆိုင်ရာ​တွေမှာ မနိုင်နင်း​မှုနဲ့​ အား​လုံး​ကို ထိန်း​ချုပ်ကိုင်တွယ်နိုင်မှု​ပေါ့​။ ဒီအပိုင်း​မှာ​တော့​ ကျ​နော်ထင်တယ် ပြဿာနာ ရှိနိုင်မယ် ထင်တယ်။ စုဖွဲ့​မှုက​တော့​ အများ​ကြီး​ မသိသာ​ပေမယ့်​ ကစထ ပိုင်း​မှာ​တော့​ တစုံတရာ အ​ပြောင်း​အလဲ ရှိမယ်လို့​ နှိုင်း​ကြည့်​နိုင်တယ် ထင်တယ်။ ဘာ​ကြောင့်​လဲဆို​တော့​ အခုဆိုရင် ကစထမှူး​က ​လော​လောဆယ် သတင်း​ထွက်​ပေါ်လာမှု အ​ခြေအ​နေ​တွေကို အတည်ပြုမယ်ဆိုရင် ၂ ​ယောက်​လောက်ပဲ ကျန်​တော့​မယ်။ အဲဒါဆို​တော့​ ဟိုး​အရင်​ခေတ်တုန်း​ကလိုပဲ ကစထ​တွေကို တခုနှစ်ခု​လောက်ပဲ ထား​တော့​မယ်။ ကျန်တဲ့​ဟာ​တွေကို ပြန်ပြီး​တော့​ အစား​မထိုး​တော့​ဘဲနဲ့​ ဒီအတိုင်း​ထား​မယ်​ပေါ့​။ ဒါမျိုး​လည်း​ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အုပ်ချုပ်​ရေး​နဲ့​ စစ်​ရေး​ပိုင်း​တွေမှာ ဟန်ချက်ညီ ထိန်း​သိမ်း​နိုင်ဖို့​ အတွက် ပထမဦး​ဆုံး​ စုဖွဲ့​မှုပုံစံရဲ့​ အ​ပြောင်း​အလဲ တခုလို့​ မှတ်ယူမယ်ဆိုရင် ရနိုင်မယ် ထင်တယ်။”
ကာကွယ်​ရေး​ဝန်ကြီး​ဌာန စစ်ဆင်​ရေး​အထူး​အဖွဲ့​အ​ကြောင်း​ကို အကျဉ်း​ချုံး​ ​ပြောပြလိုပါတယ်။ ‘ကစထ’မှူး​လို့​ လူသိများ​တဲ့​ ကာကွယ်​ရေး​ဝန်ကြီး​ဌာန စစ်ဆင်​ရေး​အထူး​အဖွဲ့​မှူး​ ဆိုတာကို မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်း​စဉ်ပါတီ​ခေတ် ဦး​နေဝင်း​ လက်ထက် ၁၉၇၉ ခုနှစ်မှာ စတင်ဖွဲ့​စည်း​ပါတယ်။ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က​တော့​ စစ်တိုင်း​မှူး​တွေကို ကြီး​ကြပ်ကွပ်ကဲဖို့​နဲ့​ စစ်ဆင်​ရေး​တွေမှာ ဦး​ဆောင်ညွန်ကြား​ဖို့​ ရည်ရွယ်ဖွဲ့​စည်း​ခဲ့​တာပါ။
စစ်တပ်က မြန်မာနိုင်ငံကို အထက်ပိုင်း​နဲ့​ ​အောက်ပိုင်း​ဆိုပြီး​ နှစ်ပိုင်း​ခွဲထား​ပါတယ်။ ပထမဦး​ဆုံး​ မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်း​ ကစထအဖွဲ့​ ၁ မှူး​က​တော့​ မြန်မာတပ်မ​တော်မှာ နပိုလီယံလို့​ လူသိများ​တဲ့​ အငြိမ်း​စား​ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး​ထွန်း​ရီ ဖြစ်ပြီး​ မြန်မာနိုင်​အောက်ပိုင်း​ ကစထအဖွဲ့​ ၂ မှူး​က​တော့​ အငြိမ်း​စား​ ဗိုလ်ချုပ်တင်စိန် ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၈၈ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်း​အပြီး​မှာ ‘ကစထ’အဖွဲ့​တွေကို ဖျက်သိမ်း​လိုက်ပြီး​ စစ်ဆင်​ရေး​ဖြစ်​နေတဲ့​ ​ဒေသ​တွေကိုပဲ မူတည်ပြီး​တော့​ စစ်ဆင်​ရေး​ အထူး​အဖွဲ့​မှူး​ဆိုပြီး​ ခန့်​အပ်ပါတယ်။
၂၀၀၁ ခုနှစ်က​နေ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အထိ စစ်ဆင်​ရေး​အထူး​အဖွဲ့​မှူး​ ၄ ​နေရာက​နေ ၆ ​နေရာအထိ တိုး​ချဲ့​ဖွဲ့​စည်း​လာပါတယ်။ ‘ကစထ’မှူး​လို့​ လူသိများ​တဲ့​ ကာကွယ်​ရေး​ဝန်ကြီး​ဌာန အထူး​စစ်ဆင်​ရေး​အဖွဲ့​မှူး​ဆိုတာ စစ်ဆင်​ရေး​တွေကို ဦး​ဆောင်ရတာဖြစ်ပြီး​ တိုင်း​မှူး​ထက် တဆင့်​မြင်ပါတယ်။ စစ်ဆင်​ရေး​တွေသာမက နိုင်ငံ​ရေး​၊​ စီး​ပွား​ရေး​၊​ လူမှု​ရေး​ကိစ္စ​တွေကိုလည်း​ ဦး​စီး​ကွပ်ကဲညွှန်ကြား​သူ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်​ရေး​အကဲခတ်​တွေက​တော့​ နဂိုရှိပြီး​သား​ ‘ကစထ’မှူး​ ၆ ​နေရာက​နေ ၂ ​နေရာအထိ လျှာ့​ချလိုက်တဲ့​အတွက် မြန်မာစစ်တပ်မှာ ဖွဲ့​စည်း​ပုံအရ ​ပြောင်း​လဲတာလို့​လည်း​ ​ပြောကြပါတယ်။
‘ကစထ’မှူး​ ​နေရာ​တွေကို ဖြုတ်ပစ်လိုက်​ပေမယ့်​ ‘ကစထ’မှူး​တာဝန် ယူခဲ့​ဖူး​တဲ့​ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး​တွေကို​တော့​ ဘာတာဝန်သစ်​တွေကို ​ပေး​ထား​သလဲဆိုတာ သတင်း​တွေမှာ ​ပေါ်ထွက်လာခြင်း​ မရှိ​သေး​ပါဘူး​။
တကယ်​တော့​ အာဏာရှင်​ဟောင်း​ ဗိုလ်ချုပ်မှူး​ကြီး​သန်း​ရွှေလက်ထက်မှာ ဒီလိုရာထူး​တွေကို တိုး​ချဲ့​ဖွဲ့​စည်း​ထား​ပြီး​တော့​မှ ဦး​စီး​ချုပ်သစ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး​ မင်း​အောင်လှိုင် လက်ထက်မှာ ‘ကစထ’မှူး​တွေနဲ့​ စစ်တိုင်း​မှူး​တွေ အများ​ဆုံး​ ​နေရာ​ရွှေ့​ပြောင်း​ ဖယ်ရှား​လိုက်တာနဲ့​ပတ်သက်လို့​ တပ်မ​တော်​ထောက်လှမ်း​ရေး​ အရာရှိ​ဟောင်း​ ဗိုလ်မှူး​အောင်လင်း​ထွဋ်က သုံး​သပ်​ပြောကြား​ပါတယ်။
“ထူး​ခြား​တာက​တော့​ အား​လုံး​သိတဲ့​အတိုင်း​ပဲ​လေ။ ဘာလို့​ တိုင်း​မှူး​တွေနဲ့​ တိုင်း​မှူး​အဆင့်​ ကစထမှူး​ အဆင့်​တွေကို ဖြုတ်ပစ်ကြလဲ ဆိုတာ ဒါ တပ်မ​တော်မှာ ​တော်​တော်ရှား​ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ​တော်​တော်လည်း​ များ​တယ်။ ဗိုလ်ချုပ် ထွန်း​ကြည်တို့​၊​ ဗိုလ်ချုပ်​ကျော်ဘတို့​ ပြုတ်တဲ့​အချိန်က သူက စစ်တပ်ထဲမှာ မဟုတ်​တော့​ဘူး​၊​ ဆိုတာက ဝန်ကြီး​ကာလမှာ သူက ပြုတ်ကျတာ။ အခုဒါ စစ်တပ်ထဲမှာ တိုင်း​မှူး​အဆင့်​တွေ၊​ ကစထမှူး​ အဆင့်​တွေ၊​ လက်ရှိ ယူနီ​ဖောင်း​ဝတ်ထား​ပြီး​တော့​ လက်ရှိ စစ်တပ်မှာ လုပ်ကိုင်​နေတဲ့​သူ​တွေ ပြုတ်တာက ဒီတကြိမ်က​တော့​ အများ​ဆုံး​ပဲ။ အခုလက်ရှိ ဖြစ်တဲ့​သူ​တွေ အား​လုံး​ဟာ ကျ​နော်တို့​ထက် ငယ်တာ များ​ပါတယ်။ ၂၂ အပတ်စဉ်တို့​၊​ ၂၃ အပတ်စဉ်တို့​က ဖြစ်တာ ပိုများ​တာ​ပေါ့​။ အ​တွေး​အ​ခေါ်ပိုင်း​ပေါ့​။ ကျ​နော်တို့​ငယ်ငယ်တုန်း​ အ​တွေး​အ​ခေါ်ပိုင်း​ကတည်း​က ကျ​နော်တို့​အချင်း​ချင်း​က သင်တန်း​တွေ ကျန်တဲ့​ ​နေရာ​တွေမှာ ဆိုရင် အမြဲတမ်း​ ​ဝေဖန်တတ်ပါတယ်။ ဒီစနစ်ရဲ့​ မ​ကောင်း​တာ​တွေ၊​ ဒီအ​ခြေအ​နေအရ မလှုပ်ရဲတာ​တွေ ကျ​နော်တို့​ ရှိကြတာကိုး​။ ၉၃-၉၄ ​လောက် ကျ​နော်တို့​ စစ်ရုံး​မှာ ရှိကတည်း​ကိုက ကျ​နော်တို့​ သူငယ်ချင်း​တွေ ​ကောက်ချက်ချတယ်​လေ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး​သန်း​ရွှေသာ ဦး​စီး​ချုပ် ဖြစ်လာမယ်၊​ တိုင်း​ပြည်​ခေါင်း​ဆောင် ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် တပ်ပျက်ပြီ၊​ တိုင်း​ပြည်လည်း​ ပျက်ပြီလို့​ ကျ​နော်တို့​ ​ပြောကြပါတယ်။”
မြန်မာတပ်မ​တော်မှာ အခုလို ‘ကစထ’မှူး​တွေ၊​ တိုင်း​မှူး​တွေကို အစုအပြုံလိုက် ​နေရာ​ရွှေ့​ပြောင်း​ဖယ်ရှား​တာမျိုး​ဟာ ဦး​စီး​ချုပ်သစ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး​ မင်း​အောင်လှိုင် လက်ထက်မှာပဲ ဖြစ်လာခဲ့​တာပါ။ ‘ကစထ’မှူး​တွေနဲ့​ တိုင်း​မှူး​တွေ အ​ပြောင်း​အလဲ ဖြစ်တာဟာ ဒီပုဂ္ဂိုလ်​တွေရဲ့​ အမိန့်​မနာခံမှုနဲ့​ လာဘ်​ပေး​လာဘ်ယူ မှု​တွေ​ကြောင့်​ ဖြစ်ရတာလို့​လည်း​ ​ပြောဆို​ဝေဖန်တာ​တွေ ရှိပါတယ်။
မြန်မာ့​တပ်မ​တော်ဟာ ဗိုလ်ချုပ်မှူး​ကြီး​သန်း​ရွှေ လက်ထက်တုန်း​ကနဲ့​ ကွား​ခြား​တာ​တွေ ရှိ​နေပြီလို့​လည်း​ စစ်​ရေး​လေ့​လာသူ​တွေက သုံး​သပ်ကြပါတယ်။
‘ကစထ’မှူး​ ၆ ​နေရာက​နေ ၂ ​နေရာထိ ပြန်​လျှော့​ချထား​တာ​ကြောင့်​ တပ်မ​တော်မှာ အုပ်ချုပ်မှု မနိုင်နင်း​တာ​တွေ၊​ ထိန်း​ချုပ်မှု လစ်ဟာတာ​တွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့​ သုံး​သပ်သူ​တွေလည်း​ ရှိပါတယ်။ တပ်တွင်း​ ​ပြောင်း​လဲမှု​တွေ​ကြောင့်​ လက်ရှိတပ်မှူး​တွေထဲမှာ သံသယ​တွေ ပိုများ​နေတယ်လို့​ စစ်​ရေး​အကဲခတ် ဦး​ကျော်ကိုက သုံး​သပ်ပါတယ်။
“​လော​လောဆယ်က​တော့​ ​ကောင်း​တဲ့​ဘက်ကို​တော့​ အများ​ကြီး​ မမြင်နိုင်​သေး​ဘူး​ပေါ့​ဗျာ။ ​လော​လောဆယ် တပ်ထဲမှာ အ​ပြောင်း​အလဲ ဖြစ်လာတဲ့​ အ​ပေါ်မှာ​တော့​ လူ​တွေက ​ဝေဖန်ချက် နည်း​နည်း​ ရှိနိုင်တယ်။ ​နောက် လက်ရှိ တာဝန်ထမ်း​ဆောင်​နေတဲ့​ တပ်မှူး​တွေ၊​ စစ်​ခေါင်း​ဆောင်​တွေ ကြား​ထဲမှာလည်း​ သို့​လောသို့​လော သံသယစိတ်​တွေက ပိုများ​လာနိုင်မယ် ထင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့​လဲ ဆို​တော့​ ဒီအ​ရေး​ယူမှု​တွေ၊​ စစ်​ဆေး​မှု​တွေကို ​တောက်​လျှောက် ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီး​ မင်း​အောင်လှိုင် တာဝန်ယူပြီး​နောက်ပိုင်း​ စပြီး​ ထွက်​ပေါ်လာတာ​ပေါ့​နော်။ ​လော​လောဆယ် တပ်ပိုင်း​နဲ့​ မတည်ငြိမ်မှု ပြန်​ပြောမယ်ဆိုရင် မ​ကောင်း​တဲ့​ဘက်က ပိုများ​နေတာ​ပေါ့​။”
မြန်မာတပ်မ​တော်တွင်း​ ​ပြောင်း​လဲမှု​တွေဟာ တိုင်း​ပြည်အတွက် နိုင်ငံ​ရေး​အရ အ​ကောင်း​ဘက်ကို ဦး​တည်​နေတာမဟုတ်ဘဲ တပ်ထဲက မတည်ငြိမ်မှု​တွေက​တော့​ အတွင်း​ပဋိပက္ခဆီကို ဦး​တည်​နေတယ်လို့​ သုံး​သပ်သူ​တွေလည်း​ ရှိပါတယ်။
ကာကွယ်​ရေး​ဦး​စီး​ချုပ်သစ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး​မင်း​အောင်လှိုင်ဟာ တပ်မ​တော်ထဲမှာ ပြုပြင်​ပြောင်း​လဲ​နေသလို တပ်တွင်း​စည်း​ကမ်း​ပိုင်း​နဲ့​ အဂတိ လိုက်စား​မှုကိစ္စ​တွေကိုလည်း​ ​သေ​သေချာချာ ကိုင်တွဲမယ်လို့​လည်း​ ပြည်ပ​ရောက် တပ်မ​တော်အရာရှိ​ဟောင်း​တွေက သုံး​သပ်ကြပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ ဥပဒေ ၅ ခုကို ၁ နာရီအတွင်း ဆုံးဖြတ်
Published on September 5, 2011 by အံ့ဘုန်းမြတ်
ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာနက တင်သွင်းခဲ့တဲ့ ဥပဒေ ၅ ခု ဖျက်သိမ်းတာနဲ့ ပြင်ဆင်တာတွေကို ၁ နာရီအတွင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စု ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီး ဦးလှထွန်း တင်သွင်းတဲ့ အမြတ်ခွန် ဥပဒေ ဖျက်သိမ်းရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံ တံဆိပ်ခေါင်း ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး၊ ၀င်ငွေခွန်ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးနဲ့ ရုံးခွန်ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးစတဲ့ အဆိုတွေကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ အစည်းအဝေး တက်ခဲ့တဲ့ မြေပုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖေသန်းက ပြောပါတယ်။
“အဲဒီ ဥပဒေကြမ်း ၅ ခုလုံးကို တနာရီလောက်အတွင်းမှာ ပြီးသွားပါတယ်။ အခွန်ဘဏ္ဍာဝန်ကြီးက နည်းနည်းဆွေးနွေးပြီး တင်ပြဖို့လုပ်တယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာ နာယက ဦးခင်အောင်မြင့်က မဆွေးနွေးပါနဲ့တဲ့။ အဆိုတင်ပြရုံပဲ တင်ပြပါတဲ့။ ထောက်ခံမယ့်သူများကိုလည်း မဆွေးနွေးပါနဲ့၊ ထောက်ခံတယ်ဆိုရင် ထောက်ခံတယ် ပြီးရောဆိုပြီး အဲလိုမျိုး လုပ်ပြီး ဥပဒေကြမ်း ၅ ခု အတည်ပြုတာကို တနာရီလောက်အတွင်းမှာ ပြီးသွားတယ်။”
ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးကို ဘဏ္ဍာအခွန်ဝန်ကြီးဌာနက ပြင်ဆင်ဖျက်သိမ်း ဥပဒေတွေ ပေးထားပြီး ဖြစ်ပေမယ့် ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးတဲ့ ကိုယ်စားလှယ် မရှိဘူးလို့ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဘုန်းမြင့်အောင်က ပြောပါတယ်။
“ဘယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှ စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ပြင်ဆင်ချက် ပေးတာမျိုး မရှိဘူး။ အဲဒါကြောင့်လည်း လွယ်လွယ်ကူကူပဲ ဥပဒေကြမ်း ၅ ခုလောက်ကို တနာရီလောက်အတွင်း ပြီးသွားတာပေါ့။ သူ့ဟာတွေက တံဆိပ်ခေါင်းတို့၊ တော်တော်လေးကို ကြာတဲ့ခေတ်ဥပဒေတွေထင်ပါတယ်။ ဘဏ္ဍာအခွန်စီးပွားရေးက ပတ်သက်တဲ့လူတွေလည်း ဘာမှပြောဆိုသံလည်း မကြားပါဘူး။”
ဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့ အမြတ်ခွန်ဥပဒေတွေကို အစိုးရ၀န်ကြီးဌာနနဲ့ လွှတ်တော် ဥပဒေမူကြမ်းကော်မတီတွေက အသစ်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲထားတဲ့ ဥပဒေတွေနဲ့ ပြန်လည်အစားထိုး ကျင့်သုံးမှာလို့ ကိုယ်စားလှယ်တချို့က ရှင်းပြကြပါတယ်။
အစည်းအဝေးမှာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အဆိုပြုထားတဲ့ ပြည်ထောင်စု သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာနကို ပြည်ထောင်စု ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် အမည်ပြောင်းလဲဖို့အဆိုကို အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
Published on September 5, 2011 by webteam
လွှတ်တော်အတွင်း အဆိုတွေကို မဲခွဲဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာ လျှို့ဝှက်စက်ခလုတ်နှိပ် ဆန္ဒမဲပေး စနစ်ကို မကျင့်သုံးတော့ဘဲ ဗြောင်မဲပေးစနစ်ကိုပဲ အမြဲတမ်း ကျင့်သုံးတော့မယ်လို့ ဒီကနေ့ နေ့လယ်ပိုင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးအပြီး ပြန်လည်ခေါ်ယူကျင်းပတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရ ဦးရွှေမန်းက ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
“ဒီနေ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက အစည်းအဝေးပြီးတော့ ကိုယ်စားလှယ်အချို့က စက်ခလုတ်ခုံနဲ့ မဲပေးတဲ့စနစ်ကို မကြိုက်ဘူး။ သံသယရှိတယ်လို့ ကြားပါတယ်။ အဲဒီတော့ စက်ခလုတ်ခုံအစား နောက်ဆိုရင် မဲခွဲမယ်ဆိုရင် လျှို့ဝှက် စက်ခလုတ်ခုံနဲ့ မခွဲတော့ဘဲ ဗြောင်မဲပေးတော့မယ်။ အဲလိုိ ဗြောင်မဲပဲပေးတဲ့အတွက် ဘာမှကြောင့်ကြစရာ မရှိဘူး။ ဘာမှအနှောင့်အယှက်ပေးလည်း မခံရဘူး။ အနှောင့်အယှက် ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေလည်း မရှိပါဘူးတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက ပြောပါတယ်။”
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ ပြောဆိုချက်က စည်းကမ်းတခုအနေနဲ့ ဖြစ်သွားပြီလား။ ဒါမှမဟုတ်ရင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကနေ စောဒက တက်ဖွယ်တွေကော ရှိလား။ ဘာတွေ ဆက်ဆွေးနွေးဖို့ ရှိသေးလဲ။
“ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ စကားက အတည်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လျှို့ဝှက်မဲပေးတဲ့ စနစ်ဖြစ်ဖြစ်၊ ဗြောင်မဲပေးစနစ်ဖြစ်ဖြစ် သူက ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်း စက်ခလုတ်ခုံနဲ့ မဲပေးတဲ့စနစ်ကို နည်းနည်းသံသယရှိတယ်လို့ သူပြောတာ။ တချို့ကလည်း အဲလိုပဲမြင်တယ်လေ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ စက်ခလုတ်ခုံက ထိန်းချုပ်တဲ့အခန်း ရှိတယ်။ အဲဒီနေရာက ဘယ်သူဘာမဲပေးတယ်ဆိုတာ သိနိုင်တယ်။ အဲဒီလိုမျိုး တချို့ကလည်း ပြောတယ်။ တချို့ကလည်း အဲဒီစက်ခလုတ်ခုံရဲ့ ထိန်းတဲ့ အခန်းကနေ ဘာကိုဘယ်လို လုပ်လို့ရတယ်။ ပြောင်းလဲလို့ရတယ် ဆိုပြီးတော့ ကိုယ်စားလှယ်တချို့က သံသယရှိတာ အမှန်ပဲပေါ့။ အဲဒီအတွက် စက်ခလုတ်ခုံကို မသုံးဘဲ ဗြောင်မဲပေးတဲ့စနစ်ကိုပဲ သုံးတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ ဖြစ်သွားတာပါ။”
လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်က အရေးပေါ်စီမံမှု အက်ဥပဒေ ဖျက်သိမ်းဖို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တယောက်က အဆိုတင်သွင်းတဲ့ အခါမှာ မတ်တတ်ရပ်ပြီး မဲပေးရတော့ တချို့တွေက အင်အားစုများတဲ့ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးက ငြိုငြင်မှာဆိုးလို့ ကြားနေလိုက်တဲ့ အနေအထားမျိုးတွေ တွေ့ရတယ်။ ဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်တွေ နောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်မလာဘူးလို့ မပြောနိုင်ဘူးလား။ ဘယ်လိုမြင်လဲ။
“ကျနော်တို့နိုင်ငံကတော့ ဒီမိုကရေစီ ရင့်ကျက်တဲ့နိုင်ငံ မဟုတ်တော့ အဲဒီလို စပ်ကူးမတ်ကူး ကာလမှာ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုတွေလည်း ရှိနိုင်တယ်။ ဒီမိုကရေစီ ရင့်ကျက်တဲ့နိုင်ငံမှာဆိုရင် ကိုယ်စားလှယ်တွေက ကိုယ့်ပါတီ သူ့ပါတီမရွေးဘူး။ မှန်တယ်ထင်ရင် သူများဘက်က လာပြီးတော့ အဆိုတင်သွင်းရင်လည်း ထောက်ခံပေးလိုက်တာပဲ။ မှားတယ်ထင်ရင်တော့ ကိုယ့်ပါတီက တင်ပြပါစေ၊ ကန့်ကွက်လိုက်တာပဲ။ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာတော့ ဒီမိုကရက်တစ် အင်အားစုတွေ ဆိုတာ လွှတ်တော်ထဲမှာ သိပ်ပြီးနည်းပါတယ်။ အခုပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာဆိုရင် ၅၀ လောက်ပဲရှိတာ။ အရေးပေါ်ပုဒ်မအက်ဥပဒေ ပြင်ဆင်ဖို့ကို ဦးသိန်းညွန့်က တင်သွင်းတဲ့အခါမှာ ကျနော်တို့ဘက်က အဲဒီပုဒ်မရဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အတိအကျ မသိဘူး။ ဦးသိန်းညွန့် ပြောတဲ့ဘက်ကိုလည်း ကျနော်တို့ ထောက်ခံသလို တဖက်က ပြန်ရှင်းတော့လည်း ကျနော်တို့က ဇဝေဇ၀ါဖြစ်သွားတာပေါ့။ အဲဒီပုဒ်မအပေါ်မှာ ကျနော်တို့က ကြိုတင်လေ့လာမှုမရှိဘဲနဲ့ ဖြစ်သွားတာပါ။ ဒီမိုကရက်တစ် အင်အားစုတွေက ကြောက်စိတ်ကြောင့်၊ အခွင့်အရေးကြောင့် အခုလိုမျိုး မရှိပါဘူး။ ပြတ်ပြတ်သားသားပဲ ထောက်ခံရဲပါတယ်။
စက်ခလုတ်ခုံ ပျက်ယွင်းမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာက စက်ခလုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေ အဆင့်ဆင့်ကို အရေးယူ ဆောင်ရွက်တာတွေ ကြားရလား။
“မဲလက်မှတ်နဲ့ပေးတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အဲဒီစနစ်က အရင်သမ္မတ ရွေးတုန်းက သုံးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်တော့ပေးရတယ်။ အခုလို ဗြောင်မတ်တပ်ရပ်လိုက်ဆိုတော့ အချိန်က တမိနစ်လောက်အတိုင်းအတာမှာ ပြီးသွားတယ်။ လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်နဲ့တော့ အကောင်းဆုံးပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒါကိုမှ မညွှန်းတာ။ လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်၊ စက်ခလုတ်ခုံက မဲပေးစနစ်၊ ဗြောင်မဲပေးစနစ် အဲဒီလိုမျိုး ကျင့်သုံးနိုိင်တဲ့အခြေအနေမှာ နှစ်ခုက တခုပဲရွေးလိုက်တော့ လျှို့ဝှက်မဲပေးတဲ့စနစ်က ပျက်သွားတာပေါ့။ အမှန်က မဲလက်မှတ်နဲ့ပေးရင်တော့ အကောာင်းဆုံးပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီစနစ်ကိုမှ မသုံးတာ။ အဲဒီအခြေအနေမှာ ကျနော်တို့က ဘယ်လိုမှ မတတ်နိုင်ဘူး။ ဒီအတိုင်းပဲ ကြည့်နေရတာပေါ့။”
ဗြောင်မဲပေးတဲ့စနစ်က တပ်မတော်သား ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းအင်အားစုနဲ့ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီထဲက အင်အားစုတွေက လျှို့ဝှက်မဲပေးပြီးတော့ အများပြည်သူ လိုလားတဲ့ ပြောင်းလဲစေချင်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာ ပြောင်းလဲလို့ မရဘူးဆိုတဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုလိုမျိုးကော မမြင်ဘူးလား။
“အခြေအနေက စပ်ကူးမတ်ကူးကာလ ဖြစ်နေလို့ပါ။ ပြီးတော့ တပ်မတော်က ဘယ်ပါတီရဲ့ နောက်မြီးဆွဲအင်အားစု မဖြစ်သင့်ဘူး။ ပါတီရဲ့လက်ကိုင်တုတ်လည်း မဖြစ်သင့်ဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ မှန်ကန်မှုအပေါ်မှာ သီးခြားရပ်တည်သင့်တဲ့ အဖွဲ့တခုလို့ ကျနော်ယူဆတယ်။ သူများက ထောက်ခံဆိုထောက်ခံတယ်၊ ကန့်ကွက်တယ်ဆို ကန့်ကွက်တယ် အဲလိုမျိုး ဖြစ်နေရင် တပ်မတော်အပေါ်မှာ ပြည်သူက လေးစားမှာမဟုတ်ဘူး။ တပ်မတော်က လွှတ်တော်ထဲမှာ အင်အားကို ထိန်းညှိပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်သင့်တယ်။ ဒါမှလည်း တပ်မတော်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ပိုတိုးတက်လာမယ်။ တပ်မတော်က သီးခြားရပ်တည်ပြီးတော့ ထိန်းညှိပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတခုပဲ ဖြစ်စေချင်တယ်။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီနဲ့ တပ်မတော်ဘက်က မဲကတော့ ဗြောင်မဲပေးတဲ့စနစ်နဲ့ဆိုတော့ ဒီလိုအချိန်အခါမျိုးမှာတော့ တပြားတချပ်မှ ရနိုင်မယ်မဟုတ်ဘူးလို့ ကျနော်ထင်တယ်။”
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး
အစည်းအဝေးတွင် ဇေယျာငပိ မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးလောက်ကောင်က… မိမိတို့ဒေသတွင် ကွမ်းယာများ၌ ထုံးပိုထည့်လေ့ရှိသည်ကို မိမိ စနစ် တကျ ကွင်းဆင်းလေ့လာခဲ့သဖြင့် သိရှိခဲ့ရကြောင်း၊ ကွမ်းယာတွင် ထုံးပိုထည့်သဖြင့် မလိုအပ်ပဲ ထုံးအလေအလွင့်ရှိနေခြင်းအပေါ် မည်သို့ ဆောင်ရွက်သင့်ပါသနည်းဟူသောမေးမြန်းချက်ကို တိုင်းရင်းဆေးဝန်ကြီးဌာန၀န်ကြီးက ထုံးပိုစားသဖြင့် ထုံးဓါတ်များပြီး အရိုးအဆစ် ခိုင်မာစေသဖြင့် ယခုအတိုင်း မသိကျိုးကျွံပြုသင့်ကြောင်း ပြန်လည်တင်ပြပြီး အားလုံးတညီတညွတ်တည်း အတည်ပြုခဲ့ကြောင်း ...။
ဖုံထူသိရိ မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးဝက်ကြီးက.. မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလေးချိန်ဝင်စနစ်၍ အစိတ်သား ငါးဆယ်သား တပိသာဟု သုံးနှုန်းကြောင်း၊ သို့ သော် အဆိပ်သားဆိုသည်မှာ မစားသင့်သောအစားဖြစ်သဖြင့် ခေတ်နှင့်မလျော်ညီတော့ပါသဖြင့် ပြုပြင်သင့်ကြောင်း တင်ပြဆွေးနွေးရာ နည်းပညာဝန်ကြီးမှ အစိတ်သားအစား ၂၅ ကျပ်သားဟု ခေါ်ရန်သင့်ကြောင်း ပြန်လည်ဆွေးနွေးရာ ..အမျိုးသမီးလွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ် ဒေါ်နှမ်းလုံးကြိုင်က.. ၂၅ ကျပ်သားဆိုသည်မှာ သားဆိုသည့်စကားပါဝင်သဖြင့် အမျိုးသားများကိုဦးစားပေးရာ အခွင့်အရေးပိုယူရာ ရောက်နေကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ ၂၅ ကျပ်သားအစား ၂၅ ကျပ်သမီးဟု ခေါ်ဝေါ်သင့်ကြောင်း ထပ်မံဆွေးနွေးရာ မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ရာ ၂၅ ကျပ်သမီး ဟူသောအခေါ်အဝေါ်ကို သုံးနှုန်းသင့်ကြောင်း မဲအပြတ်အသတ်ဖြင့်အနိုင်ရပြီး အတည်ပြုခဲ့ကြောင်း ...။
ဆက်လက်ပြီး ငမူးရွှေပြည် မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးဘီယာက အရက်ချက်ခွင့်လိုင်စင်များနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး အရက်လိုင်စင်များအား တတိုင်းတပြည်လုံး အတိုင်းအတာဖြင့် များများချပေးစေလိုကြောင်း၊ ပြည်တွင်းတွင် ဖေါဖေါသီသီသောက်နိုင်ရုံမက ပိုလျှံလျှင် ပြည်ပသို့တင်သွင်းနိုင်ပြီး စီးပွား ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မည်ဟု ယုံကြည်ပါကြောင်း ဗလုံးပထွေးဖြင့်တင်ပြဆွေးနွေးရာ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှ တချက်လွှတ်အတည်ပြုခဲ့ကြောင်း ...။
ဗြောင်မဲပေးစနစ်သာ ကျင့်သုံးတော့မည့်အပေါ် လွှတ်တော်ကု...
ကျနော်တို့ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာကြာ စောင့်နေရမှာလဲ
စီးပွားရေး ပြုပြင်မှုနဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ပြောင်းလ...
Aung San Suu Kyi visits Indian embassy
မြန်မာပြည်မှာ ငွေလဲလှယ်နှုန်း တကယ်ပြင်မှာလား